Holocaust ကိုအမှတ်တရအဖြစ် Halacha တွင်အစာရှောင်ခြင်းကျင်းပသင့်ပါသလား။ (ကော်လံ ၄) - အရှင်ဘုရား Michael Avraham
Holocaust ကိုအမှတ်တရအဖြစ် Halacha တွင်အစာရှောင်ခြင်းကျင်းပသင့်ပါသလား။ (၄) ကော်လံ၊
18 မှတ်ချက်များ	/ Tu Elul 18 - 09/2016/XNUMX 18 / 09 / 2016
ဥပုသ်နေ့ သို့မဟုတ် မီးလောင်တိုက်သွင်းခြင်းအား သတိရအောက်မေ့ခြင်းနေ့ကို အဘယ်ကြောင့် ပညာရှိများက မသတ်မှတ်ကြသနည်းဟု နှစ်စဉ် မေးခွန်းထုတ်လာကြသည်။ Gedaliah Ben Ahikam ကို သတ်ခြင်း သို့မဟုတ် ယေရုရှလင်မြို့ကို ဝိုင်းရံထားသည့် တံတိုင်းများ ဖောက်ဖျက်ခြင်းအတွက် အောက်မေ့ခြင်း၌ အစာရှောင်ကြမည်ဆိုပါက၊ အနည်းဆုံး ပုံမှန်မဟုတ်၍ ကပ်ဆိုးကြီးဖြစ်သည့် Holocaust နေ့ကို အမှတ်ရဖွယ်ရှိပေလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့အတွက် ပို၍ အကျုံးဝင်ပြီး ထိထိမိမိ၊ အဖြေများသည် များသောအားဖြင့် halakhic အခွင့်အာဏာနှင့် ပါဝါ၏မေးခွန်းကို လှည့်ပတ်နေကြသည်။ Klal Israel အတွက် စည်းနှောင်မည့်နေ့ကို သတ်မှတ်ပေးနိုင်သည့် အရည်အချင်းပြည့်မီသော အဖွဲ့အစည်း (Sanhedrin) မရှိခြင်းအပေါ် အချို့က ဆက်လက်စွဲမြဲနေပါသည်။ အခြားသူများက ၎င်းအား ကျွန်ုပ်တို့၏ သိမ်ငယ်မှု (ကောင်းစွာမှတ်မိသော မျိုးဆက်များ ကျဆင်းခြင်း) ကြောင့်ဟု ယူဆကြသည်။ ဒီအကြောင်းပြချက်တွေက အကောင်းဆုံးဖြစ်မှာပါ။ အကယ်၍ Purim Frankfurt သို့မဟုတ် Casablanca ကိုသတ်မှတ်နိုင်ပြီး၊ ပဲပင်များ သို့မဟုတ် စမတ်ဖုန်း သို့မဟုတ် ရုပ်မြင်သံကြားများကို ပိတ်ပင်ထားနိုင်လျှင် အခွင့်အာဏာရှိပြီး လိုအပ်သည့်အခါတွင် ဥပဒေအသစ်များထုတ်ရန်အတွက် လုံလောက်သော halakhic ပါဝါရှိသည်။
အတော်များများက ၎င်းကို halachic Yvonne အဖြစ်မြင်ကြပြီး၊ တရားမျှတမှု ပမာဏလည်း ရှိတယ်လို့ ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်များကို ဖောက်ဖျက်မည်ကို စိုးရိမ်၍ အသစ်များမှ ဤနေရာတွင် တွန့်ဆုတ်နေပါသည်။ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး သို့မဟုတ် ဇီယွန်ဝါဒကို ကြောက်ရွံ့ခြင်း (နောက်အဆင့်တွင် အစ္စရေးတွင် လွတ်လပ်ရေးနေ့ကို စတင်ကျင်းပမည်)။ ဒါပေမယ့် ဒီမေးခွန်းအတွက် ကျယ်ပြန့်ပြီး ကွဲပြားတဲ့ အမြင်ကို တင်ပြချင်ပါတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့အားလုံး၏ ဘာသာရေးပညာရေးတွင် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော အရာမှာ ဟလာဟာဟ်ဖြစ်သည်။ အရာအားလုံးကို လွှမ်းခြုံထားရမည်၊ တစ်ပြည်လုံး ဂုဏ်ပြုခံရပြီး လစ်လပ်နေသော နေရာလည်း ရှိသည်။ အရာအားလုံးနှင့် အထူးသဖြင့် တန်ဖိုးကြီးသောအရာများသည် halachic စမ်းသပ်ဓာတ်ပေါင်းဖိုမှတဆင့် ဖြတ်သန်းရမည်ဖြစ်ပြီး ၎င်းနှင့်လည်း သက်ဆိုင်ပါသည်။ ဒင်္ဂါး၏အခြားတစ်ဖက်တွင် ဟာလခဟ်အတွင်းသို့မ၀င်ရောက်ဘဲ ၎င်း၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအဖြစ် တန်ဖိုးရှိသောတန်ဖိုးများ သို့မဟုတ် လုပ်ရပ်များမရှိနိုင်ပါ။
ဥပမာအားဖြင့်၊ များစွာသောသူတို့သည် ဟာလာခါ၏ လူမှုစီးပွားထုတ်ပြန်ချက်ကို ရှာဖွေနေကြသည်။ ဟာလာဟာ ဆိုရှယ်ဒီမိုကရက်တစ်၊ အရင်းရှင် (အရိပ်အမြွက် - ဒါက အနီးစပ်ဆုံး အဖြေ) ဒါမှမဟုတ် ကွန်မြူနစ်လား။ Morning News သည် ဆိုရှယ်လစ် ဟာလဟာ မည်ကဲ့သို့ ဆိုရှယ်လစ် ဟာလခ ဖြစ်သည် ဟု စိတ်အားထက်သန်စွာ ဆိုကာ ဖြန့်ကျက် တရားမျှတမှု ၊ အရင်းရှင် ၊ ကွန်မြူနစ် နှင့် အခြား သော ဆောင်းပါး တစ်ပုဒ် ထုတ်ဝေသည် ။
ဤရာထူးအားလုံးအတွက် ယေဘူယျယူဆချက်မှာ ဟာလခသည် ဤအရာအားလုံး၏ တစ်ခုခုဖြစ်သည်မှာ သေချာပါသည်။ ဤဘုံယူဆချက်ကို ဤနေရာတွင် ငြင်းဆိုလိုပြီး အဆင့်နှစ်ဆင့်ဖြင့် လုပ်ဆောင်ပါ- a. ဤနှင့် အလားတူကိစ္စများနှင့်ပတ်သက်၍ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ပြတ်ပြတ်သားသား ထုတ်ဖော်ပြောဆိုရန် မဖြစ်နိုင်ဟု ကျွန်ုပ်မထင်ပါ။ ခ ဒီလိုလုပ်ဖို့လည်း မလိုအပ်ပါဘူး။ Halacha သည် ထိုသို့သော ကြေငြာချက်ထုတ်ရန် အကြောင်းပြချက်မရှိပါ။ အခု နည်းနည်း ထပ်ပြီး ရှင်းဖို့ ကြိုးစားမယ်။
တစ် ဟာလာဟာမှာ ပြတ်သားတဲ့ အယူဝါဒဆိုင်ရာ ထုတ်ပြန်ချက်တစ်ခု ရှိပါသလား။
Halacha သည် မျိုးဆက်များတစ်လျှောက်၊ နေရာများစွာတွင်၊ မတူညီသောအခြေအနေများနှင့် မတူညီသောလူများထံမှ ပြောင်းလဲလာခဲ့သည့် စကားများစွာစုစည်းမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် meta-halachic လေယာဉ်တွင် အမြဲတမ်း ဆက်စပ်မှု မရှိပါ။ ငှားရမ်းထားသော ဥပမာအနေဖြင့်၊ တရားဒေသနာနှင့် ပတ်သက်၍ Maimonides ၏ စီရင်ထုံးများကို ယူပါမည်။ ၎င်းတို့တွင် halakhic ညီညွတ်မှုရှိသည်ဟု ယူဆလျှင်ပင်၊ ၎င်းတို့သည် meta-halakhic ညီညွတ်မှုကို မထိန်းသိမ်းနိုင်ပေ။ လူသိများသည့်အတိုင်း၊ Rabbi Akiva ၏ Beit Midrash နှင့် Rabbi Ishmael တို့သည် Torah ကို တောင်းဆိုသင့်သည့်ပုံစံနှင့် ပတ်သက်၍ (Rish - ယေဘုယျနှင့် ပုဂ္ဂလိက၊ နှင့် RA - အများကိန်းနှင့် လူနည်းစုအတွက်) အကြား သဘောထားကွဲလွဲမှုရှိပါသည်။ Shavuot XNUMXa နှင့် မျဉ်းပြိုင်များကို ကြည့်ပါ။ ) ဤ meta-halakhic အငြင်းပွားမှုတွင် မတူညီသော halakhic သက်ရောက်မှုများကို ယူဆောင်လာပေးသည့် ပြသနာများစွာရှိပါသည်။ Maimonides သည် ဤကိစ္စရပ်အချို့အတွက် halakhah ကို စည်းမျဥ်းပြပြီး အခြားနေရာများတွင် ကျွန်ုပ်ပြခဲ့ပြီးသည့်အတိုင်း တစ်ခါတစ်ရံတွင် သူသည် တရားဒေသနာ အထွေထွေနှင့် သီးသန့်အပေါ် အားကိုးသော halakhic ထင်မြင်ယူဆချက်အဖြစ် စည်းကမ်းရှိပြီး တစ်ခါတစ်ရံတွင် အများသူငှာနှင့် လူနည်းစုများအပေါ်တွင်သာ မှီခိုနေရသော သဘောထားတစ်ခုအဖြစ် စည်းကြပ်ပါသည်။ ၎င်းသည် meta-halakhic ညီညွတ်မှုကို မထိန်းထားပေ။
ယေဘူယျအားဖြင့် ဟာလာခသည် halakhic ညီညွတ်မှုရှိနိုင်သည်ဟု ကျွန်ုပ်ထင်သည် (၎င်းသည် ကျွန်ုပ်၏ထင်မြင်ချက်တွင် အနည်းငယ်ချဲ့ကားသည့်ဖော်ပြချက်ဖြစ်သည်)၊ သို့သော် ၎င်းတွင် စည်းစနစ်ကျသော၊ ကွန်မြူနစ်၊ အရင်းရှင် သို့မဟုတ် အခြားအရာများကို ဖော်ပြခြင်းဆိုလိုသည်မှာ meta-halakhic သို့မဟုတ် အတွေးအခေါ်ဆိုင်ရာ ညီညွတ်မှုရှိပုံမပေါ်ပါ။ လူမှုစီးပွားကဏ္ဍခွဲ။ မတူညီသောရင်းမြစ်များက ကျွန်ုပ်တို့အား ကွဲပြားခြားနားသော ကောက်ချက်ချရန် ခေါ်ဆောင်သွားသည်၊ ၎င်းတို့အားလုံးသည် စည်းနှောင်မှုမဟုတ်၊ ၎င်းတို့အားလုံးသည် အခြေအနေတိုင်းတွင် ကျင့်သုံးကြသည်မဟုတ်၊ ၎င်းတို့အနက်များစွာအတွက် ကွဲပြားသော အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်များရှိသောကြောင့် ၎င်းတို့ကို စနစ်တကျ မိစ္ဆာနဟ်ဟု ကောက်ချက်ချရန် မဖြစ်နိုင်ပေ။ တစ်ခါတစ်ရံတွင် ရှင်းလင်းပြတ်သားသော halakhic စီရင်ချက်ကို ထုတ်ရန်ပင်မဖြစ်နိုင်သော်လည်း စနစ်တကျ halakhic meta သည် သေချာပေါက် အရေးမကြီးပါ။
ပြဿနာသည် ရှုပ်ထွေးမှု၊ အရင်းအနှီးများပြားမှု၊ သို့မဟုတ် ယင်းကဲ့သို့လုပ်ဆောင်ရာတွင် အခြားအခက်အခဲများမဟုတ်ကြောင်း နားလည်ရန် အရေးကြီးပါသည်။ ခွဲဆိုတာမျိုး မရှိဘူးလို့ စောဒကတက်မိပါတယ်။ ကျွန်ုပ်၏အမြင်အရ halakhah မှ ထိုကဲ့သို့သော mishnah ကို ထုတ်ယူသူတိုင်းသည် ၎င်းကို လှည့်ဖြားခြင်း သို့မဟုတ် အနည်းဆုံး အငြင်းပွားဖွယ် အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုနိုင်သော တီထွင်ဖန်တီးမှုတွင် ပါဝင်နေပါသည်။ ညွှန်ပြချက်တစ်ခုအနေနှင့်၊ ဟာလာခဟ်ကိုလေ့လာပြီးနောက် အခြေခံကျကျ ပြောင်းလဲခဲ့သော ဤပြဿနာများကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းသူများထဲမှ တစ်ဦးတစ်ယောက်မျှ သိမည်မထင်ပါ။ မြှားပစ်ပြီးနောက် ထိုသို့သော ဆွေးနွေးမှုသည် မည်သည့်အခါမှ ပန်းတိုင်အဖြစ် မရောက်ပါ။ ဆိုရှယ်လစ်ရှိသူ မည်သူမဆို Torah ဆိုရှယ်လစ်ဝါဒတွင် တွေ့ရမည်ဖြစ်ပြီး အရင်းရှင် သို့မဟုတ် အခြားသော လူမှုစီးပွားလက်အောက်ခံတစ်ဦး၏ အလားတူပင် ဖြစ်သည်။ ယင်းက ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သွေး မရိုးသားမှုအပေါ် သံသယကြီးစွာ ပေါ်ပေါက်စေသည်။ လူတွေက သီအိုရီအရ လူမှုစီးပွား ရပ်တည်ချက်ရှိရမယ်လို့ ယူဆကြပြီး သူတို့ကိုယ်တွင်းမှာ အဲဒီလို အနေအထားကို ရှာတွေ့ပြီး အဲဒီခေတ်ပျက်ရှုပ်ထွေးနေတဲ့ စိတ်ရှုပ်ထွေးမှုကနေ ခိုင်မာတဲ့ တစ်စုံတစ်ရာကို ရယူဖို့အတွက် ယုံမှားသံသယမရှိသော အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုနိုင်တဲ့ တီထွင်ဖန်တီးမှု၊
ကျွန်ုပ်၏စကားလုံးများ၏အနားသတ်များတွင် နောက်ထပ်မေးခွန်းတစ်ခုကို ထပ်ထည့်ပါမည်- ဟာလာဟာကို စည်းစနစ်ကျသော အတွေးအခေါ်-လူမှုစီးပွားကဏ္ဍခွဲမှ ထုတ်ယူရာတွင် ကျွန်ုပ်အမှန်တကယ် အောင်မြင်ခဲ့သည်ဆိုပါစို့၊ ၎င်းသည် ကျွန်ုပ်အား တာဝန်ပေးသင့်ပါသလား။ အချို့သောဥပဒေများသည် လူမှုစီးပွားပဋိသန္ဓေကို နောက်ခံပြုထားသည့်အချက်က ၎င်းကို လက်ခံရန် ကျွန်ုပ်အား မလိုအပ်ပါ။ အရင်းခံသဘောတရားကို လက်မခံဘဲ ဒီဥပဒေတွေကို ငါကတိသစ္စာပြုပြီး (တကယ်တော့ စည်းနှောင်ထားတယ်ဆိုရင်) ကျင့်သုံးနိုင်တယ်။ ဆိုလိုသည်မှာ ဤပဋိသန္ဓေနေခြင်းသည် ဟာလခဟ်၌ စည်းနှောင်မှုအဖြစ် မဖော်ပြထားသော နောက်ဆက်တွဲ နိဂုံးများပါလျှင်- ငါသည် ၎င်းတို့အတွက် တာဝန်ဝတ္တရားဟု မထင်ပါ။ ကျွန်ုပ်သည်လည်း meta-halachic ကွဲလွဲမှုရှိသည်ဟု အများဆုံးပြောနိုင်သည်။ ဒီကိစ္စမှာ ကျွန်တော်ဟာ ကုမ္ပဏီကောင်းကြောင်းကို ပြသခဲ့ပြီးပြီ မဟုတ်ပါလား။
ဤဒေသများတွင် halakhah သည် ဆန္ဒရှိလျှင်ပင် ကျွန်ုပ်ပြောနိုင်သည်မှာ အရိုးသားဆုံးဖော်ပြချက်မှာ ဟာလာဟာသည် ကျွန်ုပ်တို့အား အသိတရားကျင့်သုံးရန်နှင့် လျောက်ပတ်သော ယုတ္တိနည်းဖြင့် ပြုမူရန် လိုအပ်သည်ဟု ကျွန်ုပ်ထင်ပါသည်။ ယခုအချိန်မှစ၍ လူတိုင်းသည် အဘယ်အရာသည် အဓိပ္ပာယ်ရှိသနည်း၊ အဘယ်အရာသည် အဓိပ္ပာယ်ရှိသနည်း၊ ၎င်းတို့၏ ကိုယ်ပိုင်လူမှုစီးပွား ခံယူချက်ကိုလည်း ပုံဖော်ကြမည်ဖြစ်သည်။ ဤခံယူချက်သည် Torah နှင့် Halacha ၏အလိုတော်ဖြစ်သည်။ သို့သော် ဤကဲ့သို့သော ဒေသများတွင် ကျွန်ုပ်တို့ထံမှ halakhic ဆန္ဒ အမှန်တကယ် ရှိနေသည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ ယူဆနေသရွေ့ ဤအရာသည် ပထမအဆင့်တွင်သာ ရှိပါသည်။ ယခုကျွန်ုပ်တို့ဒုတိယအဆင့်သို့ဆက်လက်သွားပါမည်။
ခ သီအိုရီတွင် ရှင်းလင်းပြတ်သားသော အယူဝါဒဆိုင်ရာ ရပ်တည်ချက် ရှိသင့်ပါသလား။
ယခုကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်ကိုကိုယ်မေးရမှာက ဒီမေးခွန်းတွေအတွက် သီအိုရီမှာ အယူဝါဒဆိုင်ရာ ရပ်တည်ချက်တစ်ခုရှိသင့်တယ်လို့ ဘာကြောင့်ယူဆတာလဲ။ ဤ halakhic နယ်ချဲ့ဝါဒကို ကျွန်ုပ် နားမလည်ပါ၊ ကျွန်ုပ်၏ အဆုံးအဖြတ်တွင် ရေမထိန်းနိုင်ပါ။ ဒီလိုအနေအထားမျိုးလည်း မဖြစ်သင့်ပါဘူး။ ဟာလခသည် ဤမေးခွန်းများကို မဖြေရှင်းနိုင်ခြင်းကြောင့် သို့မဟုတ် အမျိုးမျိုးသောအခက်အခဲများကြောင့် (ibid.) မှ ရာထူးတစ်ခုကို ထုတ်ယူရန် ခက်ခဲခြင်းကြောင့်သာမက (= halakhic စုပေါင်း?!) လည်း ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သောကြောင့် (မသိစိတ်မှလည်း ဖြစ်နိုင်သည်။ ၎) သူတို့နဲ့ မပတ်သက်ဖို့၊ မဆုံးဖြတ်ပါနဲ့။ သူမသည် ၎င်းတို့အား သူ၏ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးများအဖြစ် မမြင်သောကြောင့် ၎င်းတို့ကို သူမ၏နယ်ပယ်မှ ထွက်ခွာသွားခဲ့သည်။
ဤနေရာတွင် လက်ခံထားသော စာတမ်းအတွက် အစားထိုးစာတမ်းတစ်ခု တင်ပြလိုပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည် လူသားများဖြစ်ကြပြီး လူသားများအုပ်စု၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းမှာ ဂျူးလူမျိုးများဖြစ်သည်။ Moharram Tzitzaro Zatzokal က “လူသားသည် ငါ့အတွက် ဘာမှမထူးပါဘူး” (ibid., ibid.) ဆိုသည့်အတိုင်း ဂျူးသည် ပထမနှင့် အရေးအကြီးဆုံး ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပြီး ထို့နောက် ဂျူးလူမျိုးဖြစ်သည်။ အထပ်နှစ်ထပ်ကြားတွင် ဤပိုင်းခြားမှုနှင့်အတူ တပြိုင်နက်တည်း တန်ဖိုးကမ္ဘာ (ဂျူး! အခြား 1. ဂျူးများအတွက် သီးခြား halakhic ကြမ်းခင်း။
ပထမထပ်တွင် Halacha တွင်ထည့်သွင်းရန်မလိုအပ်သောတန်ဖိုးများပါရှိသည်။ အချို့က ၎င်းတို့သည် ကမ္ဘာပေါ်ရှိ အရာအားလုံးကို ဂျူးလူမျိုးများသာမက (တစ်ကမ္ဘာလုံးရှိ) ဂျူးလူမျိုးများကိုပါ ချည်နှောင်ထားသောကြောင့်၊ အချို့မှာ ၎င်းတို့၏ တည်ရှိမှုကို စိတ်ဆန္ဒအရ တစ်ဦးချင်း လုပ်ဆောင်ရမည်ဖြစ်ပြီး၊ အချို့မှာ ဟလာခရစ်နယ်ပယ်တွင် လိုအပ်သည့်အတိုင်း ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးအတွက် တူညီသော စည်းနှောင်မှုနည်းလမ်းဖြင့် မဟုတ်ဘဲ၊
လွတ်လပ်ရေးနေ့တိုင်း Bnei Brak ရှိ Ponivez yeshiva ၏ခေါင်မိုးပေါ်တွင်အလံကိုချိတ်ဆွဲထားသည့် Ponivez မှရဗ္ဗိ၏အမည်ဖြင့်လူသိများပြီးအသနားခံစကားမပြောသော်လည်းချီးမွမ်းပါ။ Ben-Gurion ကဲ့သို့သော ဇီယွန်ဝါဒီတစ်ဦးဖြစ်ကြောင်း ဘုရားသခင်က ယင်းအကြောင်းကို ပြောကြားသောအခါတွင် Ben-Gurion သည် ချီးမွမ်းခြင်း သို့မဟုတ် တောင်းပန်ခြင်းမပြုခဲ့ပေ။ မိုက်မဲပြီး ဆိုးသွမ်းသော ဇီယွန်ဝါဒီများ၏ အသုံးစရိတ်ဖြင့် ဤဟာသကို ကျွန်ုပ်ကြားခဲ့ရဖူးသော အလွန်သြသဒေါက်စ်များစွာက ရယ်မောကြသော်လည်း၊ ၎င်းတို့သည် ၎င်း၏ အနက်အဓိပ္ပါယ်ကို နက်နဲစွာ ကျော်လွန်သွားသည်ဟု ကျွန်ုပ်မထင်ပါ။ ရဗ္ဗိ၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ သူသည် Ben-Gurion ကဲ့သို့ လောကီဇီယွန်ဝါဒီဖြစ်ကြောင်း ပြောရန်ဖြစ်သည်။ သူ၏ဇီယွန်ဝါဒသည် ဘာသာရေးမဟုတ်သော်လည်း အမျိုးသားရေးတန်ဖိုးဖြစ်သောကြောင့် ဟာလခဟ်အတွင်းသို့ မ၀င်ရောက်စေဘဲ ၎င်းအား ကတိသစ္စာပြုပါသည်။ လွတ်လပ်ရေးနေ့သည် Ponivez ၏ ရဗ္ဗိရဗ္ဗိမှ ကျင်းပသော ဘာသာရေးဆိုင်ရာ အားလပ်ရက်ဖြစ်ပြီး ၎င်းအား ဘာသာရေးဆိုင်ရာ စရိုက်လက္ခဏာတစ်ခုအဖြစ် သတ်မှတ်ကာ halakhic စည်းမျဉ်းများဖြင့် ကန့်လန့်ခံရန် စိတ်မဝင်စားပါ။
Holocaust Remembrance နေ့ သို့ ပြန်သွားရန်
ယနေ့တွင်၊ ဣသရေလလူမျိုးများသည် အစုလိုက်အပြုံလိုက်သတ်ဖြတ်ခြင်းအား နည်းအမျိုးမျိုးဖြင့် သတိရကြပြီး အချို့မှာ ဥပဒေနှင့် ယေဘုယျလူမှုရေးကျင့်စဉ်များအဖြစ် ပြဌာန်းထားပြီး အချို့မှာ တစ်ဦးချင်းဖြစ်သည်။ ဤကဲ့သို့သောနည်းလမ်းများသည် ကျွန်ုပ်အတွက် လုံးဝအားရစရာဖြစ်ပုံရပြီး ယနေ့ခေတ်တွင် ထိုသို့လုပ်ဆောင်နိုင်သည့် အရည်အချင်းရှိသော အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုရှိလျှင်ပင် ၎င်းတို့အား halakhic စည်းမျဉ်းများတွင် ကန့်သတ်ရန် မလိုအပ် သို့မဟုတ် အကြောင်းပြချက်မရှိပေ။ ၎င်းတို့သည် အထက်ဖော်ပြပါ နှစ်ခု၏ ပထမထပ်နှင့် သက်ဆိုင်ပြီး ၎င်းတို့ကို ဒုတိယထပ်သို့ ရွှေ့ရန် အကြောင်းမရှိပါ။ Holocaust Remembrance Day သည် ဘာသာရေးဆိုင်ရာ စရိုက်လက္ခဏာမရှိသော အမျိုးသားနေ့ဖြစ်ပြီး ယင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး အမှားအယွင်းမရှိပေ။ ၎င်းသည် ၎င်း၏တန်ဖိုးကို မဆုံးရှုံးစေဘဲ၊ တန်ဖိုးရှိသောအရာအားလုံးကို ဟလာခ် သို့မဟုတ် ဘာသာရေးဘောင်တွင်ပင် ထည့်သွင်းရမည်မှာ မမှန်ပါ။
ထိုနည်းအတူပင် လွတ်လပ်ရေးနေ့တွင် ဘုရားသခင်ကို ချီးမွမ်းပြီး ဘုရားသခင်ကို ချီးမွမ်းမည်ဟု သေချာပေါက်ပြောသော်လည်း ၎င်းကို ဘာသာရေးအရ အရေးပါသောနေ့အဖြစ် မမြင်ဘဲ ဟလာခီနေ့ဟု လုံးဝမထင်ပါ။ ၎င်း၏အဓိပ္ပာယ်မှာ အမျိုးသားရေးဖြစ်ပြီး၊ ကျွန်ုပ်သည် လောကီဇီယွန်ဝါဒီတစ်ဦး (Ponivez နှင့် Ben-Gurion ၏ Rabbi ကဲ့သို့) ဤအခြေခံတစ်ခုတည်းဖြင့် ၎င်းကိုပါဝင်ပါ။ ငါ Hillel လို့ မပြောဘူး ဆိုတော့ Chief Rabbinate က Hillel ကို ပြောသင့်တယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ထားပြီး ဒါဟာ ဒီအဖွဲ့အစည်းနဲ့ ငါ့ရဲ့ နာမည်ကြီး ဆက်ဆံရေးကြောင့် မဟုတ်ဘူး။ ဒီလိုလုပ်တာ မှန်တယ် ကောင်းတယ်လို့ ထင်တဲ့အတွက် ချီးကျူးမိပါတယ်။ ဒါဟာ ဘာသာရေးသမားတစ်ယောက်အနေနဲ့ ငါ့ရဲ့အမျိုးသားရေးရပ်တည်ချက်ကို ဖော်ပြဖို့ ငါ့နည်းလမ်းပဲ။
ဒါဆို အတိတ်က ဘာလဲ။
အရင်တုန်းကတော့ သူတို့ဟာ ဟာလခဟ်မှာ တန်ဖိုးတိုင်းနဲ့ တန်ဖိုးတိုင်းကို ခိုင်ခံ့အောင် လုပ်ခဲ့တယ်။ ပညာရှိများနှင့် တရားရုံးများသည် အစာရှောင်ခြင်း၊ ရွှင်လန်းခြင်းနေ့ရက်များနှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏အချိန်များကို သတ်မှတ်ပေးသူများဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့် အစ္စရေးမှာ ဘုရင်မရှိတဲ့ အတုအယောင် အခြေအနေတစ်ခုရဲ့ ရလဒ်လို့ ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ ရဗ္ဗိတရားဒေသနာကို ရေးသားသူသည် စင်ပြိုင်အစိုးရစနစ် နှစ်ခုဖြစ်သော ဘုရင်နှင့် တရားရုံးတစ်ခုအကြောင်း ပြောဆိုသည်။ အကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့် ပညာရှိများ၏ရင်းမြစ်များတွင် ဘုရင့်စနစ်အကြောင်း အရိပ်အမြွက်မျှ မတွေ့ရပေ။ ခုံရုံးတစ်ခုသည် လမ်းများကို အချိန်မီပြုပြင်ခြင်း (စကခ) မှ ပို့ဆောင်ရေး ဝန်ကြီးဌာနဟု အဓိပ္ပာယ်ရသည်။ ၎င်းတို့သည် စည်းမျဉ်းများကို ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ ချမှတ်ခြင်း၊ ရပ်ရွာအတွင်း မဲပေးခြင်းဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းများကို ဟာလာခါက ဆုံးဖြတ်ပြီး Shulchan Aruch တွင် ပေါ်လာသည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ အရေးကြီးတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ် (= ခုံသမာဓိ) ရဲ့ သဘောတူညီချက်ကိုလည်း လိုအပ်တယ်။ ဒါပေမယ့် အစ္စရေးမှာ ဘုရင်မရှိတဲ့အချိန်မှာ Toshba'ap ကို တည်ထောင်ခဲ့ပြီး ဘာသာရေးဆိုင်ရာ နိုင်ငံတော်အစိုးရရဲ့ အခွင့်အာဏာကို ရှင်ဘုရင်ကနေ ကြီးကျယ်တဲ့ BID ဆီကို လွှဲပြောင်းပေးခဲ့တဲ့ ရလဒ်တစ်ခုလို့ ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့် ဘုရင်များအဖြစ် အမှန်အကန် ထမ်းဆောင်ခဲ့သောကြောင့် ဆီးန်ဟီဒရင်၏ ဥက္ကဋ္ဌများသည် ဒါဝိဒ်အမျိုးအနွယ်မှ ဆင်းသက်လာကြသည်။ ထိုအချိန်မှစ၍ ယနေ့အချိန်အထိ ကျွန်ုပ်တို့သည် လောကီနိုင်ငံတော်ဆိုင်ရာ အတိုင်းအတာမရှိသည့်အပြင် အရာအားလုံးသည် ခုံသမာဓိလူကြီးများ၊ တရားရုံးများနှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဘာသာရေးနှင့် ဟလာခိကျသည့် အတိုင်းအတာနှင့် သက်ဆိုင်သည်ဟူသော အချက်ကို ကျွန်ုပ်တို့ ကျင့်သားရလာပါသည်။ ဟာလခဟ်ကို ကျော်လွန်ပြီး ငါတို့ရဲ့ အကျင့်ကို ဘုရင်က ဆုံးဖြတ်မယ့်အစား BD က ရိုက်နှက် အပြစ်ပေးတယ်။ BID ၏ ဤအခွင့်အာဏာသည် မူလအစိုးရတွင် ဘုရင်၏အာဏာကို ထင်ဟပ်စေသည်။
တူညီသောအချက်၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေဖြင့် အရာအားလုံးသည် Torah နှင့် အရာအားလုံးဖြစ်သွားပြီဟူသောအချက်ကို ကျွန်ုပ်တို့ကျင့်သုံးခဲ့သည်။ ဟာလကာဟ်၏ အပြင်ဘက်တွင် သာမန်လူ့ဘဝမရှိ၊ တန်ဖိုးမရှိသည်မှာ သေချာသည်။ အရာအားလုံးကို ခုံသမာဓိလူကြီးများနှင့် ရဗ္ဗိများက စီရင်ဆုံးဖြတ်သင့်သည်။ ဒါပေမယ့် ဒီနေ့တော့ ပုံမှန်အတိုင်း ပြန်သွားဖို့ အခွင့်အရေးရှိတယ်။ အစ္စရေးလူများသည် BH တွင် လောကီရေးရာ အမျိုးသားရေး အတိုင်းအတာတစ်ခု ရှိသည် (BH သည် လောကီရေးရာ ဝါဒမဟုတ်သော်လည်း ကျွန်ုပ်တို့အားလုံး၏ အသက်တာ၏ လောကရှုထောင့်မှ ပြန်လာခြင်းဖြစ်သည်။ အချို့က ၎င်းကို သမိုင်း၏ ဇာတ်ခုံသို့ ပြန်ရောက်ခြင်းဟု ခေါ်ဆိုကြသည်)။ သမိုင်းဆိုင်ရာ ရောဂါဗေဒ အမျိုးမျိုးကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့ ကျင့်သားရလာခဲ့သည့် ပုံစံအတိုင်း ဆက်သွားနေစရာ အကြောင်းမရှိပါ။
နိဂုံးချုပ်အားဖြင့်၊ လွှမ်းမိုးနေသော ထိုးထွင်းသိမြင်နိုင်စွမ်းနှင့် ဆန့်ကျင်ဘက်တွင် ပြည်နှင်ဒဏ်ခံရခြင်းသည် ဟာလခဟ်၏နယ်ပယ်ကို ကျဉ်းမြောင်းစေရုံသာမက (အချို့ကိစ္စများတွင်လည်း ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်ရှိသော်)၊ ၎င်းတို့ကို အခြားနယ်ပယ်များတွင် သင့်လျော်သော သင်ယူမှုထက် ကျော်လွန်စေခဲ့သည်။ နယ်ချဲ့သမားများက ၎င်းနှင့် ၎င်း၏ စက်လုံးများကို ကိုးကား၍ ဟာလခ၏ အခြေအနေကို ဒေါသူပုန်ထကာ ပုံမှန်အတိုင်း ပြန်သွားသင့်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏ ဘဝနယ်ပယ်အားလုံးကို ၎င်း၏ အတောင်ပံများအောက်တွင် သိမ်းထားပါစေ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ခရစ်ယာန်ဝမ်းကွဲများကို အဓိပ္ပါယ်ဖော်ရန်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ငရဲသို့မသွားကြပါနှင့်၊ သူ့တွင်ရှိသော ဥပဒေနှင့် ရှင်ဘုရင် (သို့မဟုတ်) သူ၌ရှိသောအရာကို ပေးပါ။
လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်၊ Holocaust ငြင်းဆိုခြင်းနှင့် "စောင့်မနေပါနဲ့" (ကော်လံ 6)
Halacha နှင့် Law ရှိ အိမ်ခြံမြေဥပဒေ
18 “မီးလောင်တိုက်သွင်းခြင်းကို အောက်မေ့ခြင်းအတွက် Halacha တွင် အစာရှောင်ခြင်း ရှိသင့်သလော။ (၄)"
29 Elul 09 - 2016/14/53 at XNUMX:XNUMX
အစဉ်အဆက် ပုံသွင်းထားသည့်အတိုင်း Halacha တွင် စနစ်တကျ မစ်ရှနဟ်ကို ရှာမတွေ့နိုင်သော်လည်း ရေးထားသော Torah အလွှာတွင် အနည်းဆုံး တစ်ခုကို ရှာတွေ့နိုင်သည်ဟု သင်မထင်ပါသလား။ သမ္မာကျမ်းစာသည် ကိုယ်ကျင့်တရားတန်ဖိုးများသာမက ဘာသာရေးတန်ဖိုးများအကြောင်း အန်စာတုံးများကစားနေသည်ဟု မင်းရဲ့စာအုပ်ထဲမှာ ငါတွေ့ခဲ့တယ်။ ဆိုလိုသည်မှာ၊ သင်၏စကားများ (ကျွန်ုပ်နားလည်မှုအရှိဆုံးအနေဖြင့်) Torah နှင့် Oral Torah ရေးထားသော Judaism များအားလုံးသည် လူသား၏ပုံမှန်ဘဝမှပေါ်ထွက်လာပြီး "ဘာသာတရား" အမျိုးအစားထဲသို့ ကျရောက်နေသော အလွှာတစ်ခုဖြစ်သည်။ “ဘာသာတရား” အမျိုးအစားက ဘာကိုဆိုလိုတာလဲလို့ မေးပါတယ်။ ထိန်းသိမ်းထားသူအတွက် ယုတ္တိမရှိဘဲ ထင်သလိုထင်သလို တစ်ခုခုလုပ်နေသလား။ ပြီးတော့ mitzvos မှာ အမှတ်တစ်ခုရှိတယ်လို့ ထင်တဲ့သူတိုင်းက လူသား/လူ့အဖွဲ့အစည်း/လူသားမျိုးနွယ်နဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ စံနှုန်းနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ အဆင့်မှာ ထားသင့်တယ်လို့ မဆိုလိုပါဘူး။ ဥပမာအားဖြင့်၊ Jabotinsky ကဲ့သို့ Shemita စီးပွားရေးမူများကို mitzvah မှ ကောက်ချက်ချရန် မဖြစ်နိုင်ပေ။
ဤနေရာတွင် တင်ပြထားသော လှုပ်ရှားမှုသည် နောက်ထပ် ခြေတစ်လှမ်း လှမ်းသင့်သည်ဟု ထင်ရသည်။ ကျွန်ုပ်အတွက်၊ ပြည်နှင်ဒဏ်ခံရခြင်းသည် ဘာသာတရား၏ နယ်ချဲ့ဝါဒကို ဖန်တီးရုံသာမက သမ္မာကျမ်းစာနှင့် ကင်းမဲ့သော အလွှာတစ်ခုဖြစ်သည့် ဘာသာတရားအမျိုးအစားကို ယေဘုယျအားဖြင့် ဖန်တီးခဲ့သည်။ နိုင်ငံတော်အကျိုးအတွက် ဦးစွာပထမ “ပြည်တွင်း၌ ကျင့်ရန်” ဟူသော ပညတ်တော်များကို ပေးထားသည်။ နိုင်ငံတော်အဆင့်တွင် ယနေ့ Holocaust Remembrance Day ကို ကုသရန် သင်ပြောနေသည့်အတိုင်း ယခု ကျွန်ုပ်တို့ကျင်းပနေသော အစာရှောင်ခြင်းများကို အတိအကျ ခံယူသင့်သည်ဟု ကျွန်ုပ်ထင်ပါတယ်။
ပထမဆုံးအချက်ကတော့ မတွေ့ဘူးထင်ပါတယ်။ ကြိုးစားမှုတွေဟာ တကယ်ကို မယုံနိုင်စရာပါပဲ။ အမှန်တရားကို လျစ်လျူရှုပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏ဆန္ဒများ (ထိုက်တန်ပြီး ကောင်းလျှင်ပင်) လက်အောက်ငယ်သားကို လက်အောက်မခံရန် အရေးကြီးပါသည်။ ရေးထားတဲ့ Torah ထဲမှာတောင် အတော်လေး နှိုင်းမဲ့နေတယ် ထင်ပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ် လူတိုင်းက သဘောတူထားတဲ့ universal values ​​တွေကို နေရာတိုင်းမှာ တွေ့ပါလိမ့်မယ်။ သို့သော် Torah သို့မဟုတ် Halacha ကိုလေ့လာခြင်းသည် ကျွန်ုပ်၏ထင်မြင်ယူဆချက်တွင် သင်ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးထားသော ခံယူချက်များကို မည်သည့်အရာမှ ပြောင်းလဲခြင်းမရှိပါ (၎င်းသည် ကျွန်ုပ်၏ထင်မြင်ယူဆချက်တွင် အမှန်ပင်ဖြစ်သည်၊ လူတို့သည် ၎င်းတို့လိုချင်သောအရာကို ရှာဖွေကြသည်)။
Sages တွင် အကျင့်စာရိတ္တနှင့် ဘာသာရေးအကြား ခြားနားမှု မရှိကြောင်း၊ Rishonim တွင်လည်း ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည်ကို ကျွန်ုပ်သဘောတူပါသည်။ တစ်နည်းအားဖြင့် ပြည်နှင်ဒဏ်ပေးခြင်းသည် ဤထူးခြားချက်ကို ဖန်တီးခဲ့သည် (ယေဘုယျအားဖြင့် ဟာလခဟ်၏သမိုင်းသည် ယခင်ကမဟုတ်သော ကွဲပြားမှုများဖန်တီးမှုဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံးအချက်မှာ မစ်ရှနဟ်၌မရှိသော အယူအဆများ) ဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော့်အမြင်အရတော့ ဒါဟာ ကမ္ဘာကြီးက တိုးတက်နေတယ် (နောက်မဆုတ်ပါဘူး) ဆိုတဲ့ စကားရပ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ သခင်အများစုသည် ၎င်းတို့ကြားတွင် ခွဲခြားသတ်မှတ်ထားသော တန်ဖိုးနှစ်မျိုးရှိကြောင်း ယခု ကျွန်ုပ်တို့နားလည်ပါသည်။ ဤအချက် (သတိမထားမိသောအရာကို ပိုင်းခြားသိမြင်နိုင်စေရန် ကူညီပေးသည်) မှာ ဘာသာရေးကတိကဝတ်မပါဘဲပင် ကိုယ်ကျင့်တရားဖြစ်နိုင်သည်ကို ယနေ့ ကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်နေရပါသည်။ ဒါဆို ဘာသာရေးကတိကဝတ်ကို ဘာသာရေးရည်ရွယ်ချက်အတွက် ရည်ရွယ်တယ်လို့ ဘာကြောင့်ထင်လဲ။ ဤအမြင်ဖြင့် ယနေ့ခေတ်တွင် လွန်စွာလွန်ကဲနေပါသည်။
ဘာသာရေးဆိုင်ရာ ရည်ရွယ်ချက်များကို အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုရာတွင် အကျင့်စာရိတ္တတန်ဖိုးများထက် စံတန်ဖိုးများ မရှိဟု သင်ယူဆသည်။ ဒါက အခြေခံလို့ မမြင်ဘူးတဲ့ ယူဆချက်တစ်ခုဖြစ်ပြီး Torah နဲ့ Halacha ကိုကြည့်တဲ့အခါ သေချာပေါက်မဟုတ်ပါဘူး။ အလွန်စဉ်းစားဆင်ခြင်စရာ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအတွက် ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာ ကျိုးကြောင်းဆီလျော်မှုကို မတွေ့နိုင်ဟု ယူဆပါသည်။ ဒီတော့ လူတိုင်းဟာ ကိုယ်ကျင့်တရားအတွက် ရည်ရွယ်တယ်လို့ ဘာကြောင့် ယူဆတာလဲ။ ငါ့အမြင်အရတော့ နှလုံးသားရဲ့ အလိုဆန္ဒတွေကို တွယ်ကပ်ပြီး အဖြစ်မှန်ကို လျစ်လျူရှုခြင်းလည်း ရှိပြန်တယ်။
1. သမ္မာကျမ်းစာသည် မတူညီသောကျောင်းများနှင့် လောကအမြင်များကို ကိုယ်စားပြုသည့် alibi ဖြစ်သည်ဆိုပါက၊ သမ္မာကျမ်းစာသည် ကွဲပြားနေမည်ဆိုလျှင် ပြောစရာအကြောင်းမရှိပါ။ သို့သော် သမ္မာကျမ်းစာ၏ ပေါ်လွင်ထင်ရှားသောအတိုင်းအတာကို ကျွန်ုပ်တို့လက်ခံပါက၊ ကျွန်ုပ်၏အမြင်အရ၊ အခန်းငယ်များကိုလေ့လာခြင်းတွင် အချို့သောအနေအထားကို ပုံဖော်နိုင်သည် သို့မဟုတ် ပြန်လည်သန့်စင်နိုင်သည်။ ဥပမာ၊ သမ္မာကျမ်းစာနှင့် မင်းမျိုးမင်းနွယ်ဆက်ဆံရေးသည် ခက်ခဲသော အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်ဖြင့် သေချာပေါက် ဆွေးနွေးနိုင်သည်ဟု ကျွန်တော်ထင်သည့် ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ဘုရင့်တရားခွင်မှာ မြင်တဲ့ Maimonides က အစ္စရေးမှာ ဘုရင်ရဲ့ခန့်အပ်မှုစာတစ်စောင်ကို အဲဒီအခန်းတစ်ခုလုံးရဲ့ ရိုးရှင်းတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကို လျစ်လျူရှုခဲ့တယ်ထင်ပါတယ်။ သူ၏ရာထူးကိုသေချာသောအခြားသူကိုကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်နိုင်မည်မဟုတ်ပေ (ကျွန်ုပ်တို့သည် Dawkins ကိုယုံကြည်မည်မဟုတ်သကဲ့သို့) သို့သော်သမ္မာကျမ်းစာလေ့လာခြင်းသည်ပြဿနာများစွာအတွက်ထိုးထွင်းသိမြင်မှုအသစ်များကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်ပါတယ်။ ယေဘူယျအားဖြင့် ကျွန်ုပ်၏ခံယူချက်မှာ အာဗြဟံသည် သောဒုံမြို့ဖျက်ဆီးခံရမှုတွင် အာဗြဟံက ကြွေးကြော်ခဲ့သည့်အတိုင်း တိုရာကျမ်းတွင် ရေးထားသည့်အတိုင်း လူ့ကျင့်ဝတ်နှင့် ဆန့်ကျင်ဘက်မဖြစ်သင့်ပေ။ ထို့ကြောင့် သမ္မာကျမ်းစာတစ်ခုတည်းသည် ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာ အယူအဆတစ်ခုကို အစမှအဆုံးဖန်တီးရန် မလုံလောက်သော်လည်း ၎င်းသည် အထောက်အကူဖြစ်မည်ဟု ကျွန်ုပ်ထင်သည်။
၂။ ဘာသာရေးအရ ကတိကဝတ်မရှိဘဲ ကိုယ်ကျင့်တရားဖြစ်ဖို့ဆိုတာ အမျိုးအစား နှစ်မျိုးရှိကြောင်း ဘယ်လို ညွှန်ပြတယ်ဆိုတာ ကျွန်တော် နားမလည်ပါဘူး။ ဘာသာရေးသည် ကိုယ်ကျင့်တရားသာဖြစ်သည်ဟု ငါဆိုသည်မဟုတ်သော်လည်း မစ်ဇ်ဗို၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ အမျိုးအစားတစ်ခုတည်းနှင့်သက်ဆိုင်ကြောင်း သေချာပါသည်။ mitzvos ၏အရသာကိုအမြဲတမ်းနားလည်သဘောပေါက်နိုင်ခြင်းမရှိသည့်အချက်မှာ "ဘာသာရေး" အမျိုးအစားကိုမွေးစားရန်မလိုအပ်ပါ။ တခါတရံတွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် လိုအပ်သောအရာများ ပေါ်ထွန်းလာသည်ကို ဆန့်ကျင်နားလည်ရန် သမိုင်းဆိုင်ရာ ဆက်စပ်မှု မရှိသော်လည်း ၎င်းမှာ ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာ အကြောင်းပြချက် မရှိဟု မဆိုလိုပါ။ အထူးသဖြင့် “ဘာသာရေးတန်ဖိုး” ၏ အပြုသဘောဆောင်သော အဓိပ္ပါယ်ကို ကျွန်ုပ်အား မပေးသေးသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ဤအချိန်တွင်၊ "အပေါက်များ" ပြီးမြောက်ရန် "ဘာသာရေး" အမျိုးအစားတစ်ခုရှိနေသည်ဟုကျွန်ုပ်မယူဆနိုင်ပါ။
1. ကွဲလွဲမှု မရှိသင့်သော်လည်း သက်တမ်းတိုးရန် ဖြစ်နိုင်ခြေရှိမရှိ မေးခွန်းဖြစ်သည်။ လူတစ်ဦးသည် မိမိလက်ခံနိုင်ဖွယ်မရှိသော သမ္မာကျမ်းစာလေ့လာမှုကို ရှာဖွေတွေ့ရှိပြီး သူ၏လေ့လာပြီးနောက် ခံယူချက်အား ပြောင်းလဲနိုင်ပါသလား။ ဒီလိုဖြစ်လာမယ်မထင်ပါဘူး။ ဘုရင်ကို ငြင်းပယ်သော Abarbanel သည် သမ္မာကျမ်းစာတွင် သူ၏သန္ဓေတည်ခြင်းကို တွေ့ရှိခဲ့ပြီး မငြင်းသော Maimonides သည် သူ၏သန္ဓေတည်ခြင်းကို တွေ့ရှိခဲ့သည်။ ဒီနေ့လည်း အလားတူပါပဲ။
မည်သည့်နယ်ပယ်နှင့် မည်သည့်စာအုပ် သို့မဟုတ် ရုပ်ရှင်တွင်မဆို လေ့လာမှုတိုင်းတွင် မေးခွန်းများဖွင့်ပြီး ခံယူချက်များကို ပြောင်းလဲနိုင်သည်မှာ ရှင်းပါသည်။ သို့သော် အပြောင်းအလဲသည် သမ္မာကျမ်းစာ၏ အခွင့်အာဏာကြောင့်မဟုတ်ဘဲ အတွင်းပိုင်းလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုဖြင့် ပြုလုပ်လိမ့်မည် (ထိုနေရာတွင် မတူညီသောနိဂုံးတစ်ခုကို ကျွန်ုပ်တွေ့ရှိသောကြောင့် ပြဿနာအချို့တွင် ကျွန်ုပ်၏ရပ်တည်ချက်ကို ပြောင်းလဲရန် တွန်းအားပေးခဲ့သည်)။
၂။ဘာသာရေးတန်ဖိုးကို အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုထားခြင်းမရှိပါ။ ဒါပေမယ့် ဥပမာအနေနဲ့ပြောရရင် ခင်ပွန်းဖြစ်သူနဲ့ခွဲထွက်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့တဲ့ ကိုဟင်ရဲ့ဇနီးအတွက် စွဲချက်ဟာ ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာရည်ရွယ်ချက်အတွက် စွဲချက်တစ်ခုလို့ မထင်ပါဘူး။ ၎င်း၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ ယဇ်ပုရောဟိတ်များ၏ သန့်ရှင်းမှုကို ထိန်းသိမ်းရန်ဖြစ်သည်။ ဒါက ဘာသာရေးနဲ့ အကျင့်ပျက်တဲ့ ပန်းတိုင်ပါ။ ဝက်သားစားတာကို တားမြစ်တာတောင် ကိုယ်ကျင့်တရားနဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ရှိတဲ့ တားမြစ်ချက်လို့ မထင်ပါဘူး။ ကျွန်ုပ်တို့အားလုံး နားမလည်နိုင်သော ကိုယ်ကျင့်တရား ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခု ရှိသည်ဟု အမြဲပြောနိုင်သည်။ ဤသည်မှာ အချည်းနှီးသော ကြေငြာချက်ဖြစ်ပြီး၊ ကျွန်ုပ်ထင်မြင်စရာ အကြောင်းမရှိပါ။
ကျွန်ုပ်၏အငြင်းအခုံမှာ mitzvos ၏ရည်ရွယ်ချက်သည်ကိုယ်ကျင့်တရားဖြစ်ပါက၊ mitzvos သည်မလိုအပ်ပါဘူး (အနည်းဆုံးယနေ့)။ စင်စစ်သော်ကား၊ ၎င်းတို့မရှိလျှင်ပင် ကိုယ်ကျင့်တရားပန်းတိုင်ကို အောင်မြင်နိုင်သည် (ဤသို့ပင် ငါသည် ဟာလခဟ်နှင့် မချည်နှောင်ထားသော ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာ သက်သေအထောက်အထားများ ယူဆောင်လာခဲ့ပြီ)။ အဲဒီတော့ ဥပဒေကို လိုက်နာဖို့က ဘာလဲ။ ကိုယ်ကျင့်တရားနဲ့ လုံလောက်ပါစေ။
1. သို့သော် ယနေ့ ကျွန်ုပ်သည် Maimonides နှင့် Abarbanel အကြား အငြင်းပွားမှုကြားမှ လာ၍ ဆုံးဖြတ်နိုင်ပြီး၊ Maimonides ၏ ထင်မြင်ယူဆချက်သည် သမ္မာကျမ်းစာလေ့လာခြင်း၏ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက် ကိရိယာများအရ အခန်းငယ်များ၏ ရိုးရှင်းမှုနှင့် ဝေးကွာနေပုံပေါ်ကြောင်း ဆုံးဖြတ်နိုင်ပါသည်။ ဤသင်တန်းသည် ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင် အလိုအလျောက် အတင်းအကြပ် ခိုင်းစေသည်ဟု မဆိုလိုသော်လည်း (ကျွန်ုပ်တို့ နားလည်သည့်အတိုင်း) ပေါင်းစပ်ထားသော ချဉ်းကပ်မှုအရ သင်ကြားခဲ့သည့်အတိုင်း အငြင်းအခုံများမှ တိုက်ရိုက် ရပ်တည်ချက် ပြောင်းလဲခြင်းမျိုး မရှိသော်လည်း စကားအပြောအဆို ဖြစ်စဉ်တစ်ခုမှသာ ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ဤကျမ်းချက်သည် ခိုင်လုံသောစာသားဖြစ်သည်ဟူသော ယုံကြည်ချက်ဖြင့် အခန်းငယ်များကို ဖတ်ရှုခြင်းသည် လုပ်ငန်းစဉ်၏အဆုံးတွင် ခံယူချက်ပြောင်းလဲခြင်းအတွက် အဆုံးအဖြတ်ပေးနိုင်သည်ဟု ကျွန်ုပ်ထင်သည်။
2. တစ်ဖန် အဓိပ္ပါယ်မရှိသော အမျိုးအစားတစ်ခုကို ဖန်တီးခြင်းသည် ကျွန်ုပ်တို့သည် ပညတ်တော်များ၏ အကျိုးအားလုံးကို မအောင်မြင်ခဲ့ဟု ကျွန်ုပ်၏ ငြင်းခုံမှုထက် အဘယ်ကြောင့်နည်းသည်ကို ကျွန်ုပ် နားမလည်ပါ။ ယခုအချိန်အထိ "ဘာသာရေးတန်ဖိုး" သည် ကျွန်ုပ်အတွက် ဘာမှ အဓိပ္ပာယ်မရှိပါ၊ ၎င်းသည် အမှန်တကယ် တွင်းများဖြည့်နေပုံရသည်။ mitzvos မပါပဲ ကိုယ်ကျင့်တရားဖြစ်နိုင်ရင် ဘာကြောင့် mitzvos ကို ထားရမှာလဲဆိုတဲ့ မေးခွန်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး၊ မိဿဗိုဇ်အားဖြင့် သီလပို၍ ဖြစ်နိုင်သည်ဟု ဉာဏ်ပညာရှိတို့က “နောင်လာမည့် အနာဂတ်အတွက် ပျက်ပြယ်သည်” ဟု ပညာရှိများက ဆိုသောအခါ ဤအရာသည် ပညာရှိများ၏ အဓိပ္ပါယ်ကို ဆိုလိုသည်ဟု ကျွန်ုပ်ထင်သည်။ အမှန်တကယ်တော့ အချို့သော mitzvos များသည် ကျွန်ပြုခြင်းကဲ့သို့သော သမိုင်းဝင်အခန်းကဏ္ဍများ ကုန်ဆုံးသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပြီး အချို့မှာ ၎င်းတို့၏ အကောင်အထည်ဖော်မှုကို စောင့်မျှော်နေကြဆဲဖြစ်သည်ဟု ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်ပင် ထင်မြင်မိပါသည်။
1. ထို့နောက်ဆုံးဖြတ်ပါ။ မေးခွန်းက မင်းနဲ့ မတူတဲ့ တွေးခေါ်သူတွေကို ဘာကြောင့် မယုံကြည်တာလဲ။ ထို့ကြောင့် သမ္မာကျမ်းစာနှင့် Halacha မှ ခံယူချက်များနှင့် တန်ဖိုးများကို ပုံဖော်နိုင်စွမ်းအပေါ် ကျွန်ုပ် သံသယဖြစ်မိပါသည်။ မင်းအတွက်က Abarbanel နဲ့တူတယ်ထင်ရပေမယ့် မင်းတော်ဝင်မဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာ ရှင်းပါတယ်။ မင်းမျိုးမင်းနွယ်နဲ့ စကားပြောတဲ့အခါ သူတို့က အချက်ပြချက်တွေကို ထုတ်ပြီး ဆန့်ကျင်ဘက်အမြင်ကို ဥပမာပေးထားတာ (မင်းထင်မြင်ချက်နဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက်မှာ နေရာတစ်ခုရှိတယ်)။ သို့သော် ဘုရင်၏မေးခွန်းသည် ဆိုးရွားသော ဥပမာတစ်ခုဖြစ်သည်၊ အကြောင်းမှာ တိုရာသည် ယင်းကို အတိအလင်း ရည်ညွှန်းသည်။ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမဟုတ်သော halakhic နှင့် အယူဝါဒဆိုင်ရာမေးခွန်းများအကြောင်း ပြောနေပါသည်။ တူညီသောအတိုင်းအတာအထိ Torah သည် Gd ကိုယုံကြည်ကြောင်းထောက်ခံအားပေးသည်ဟုသင်လည်းယူဆောင်လာနိုင်သည်။
လွယ်လွယ်လေးပဲ၊ တကယ်တော့ အဲဒါက ခံယူချက်ပြောင်းလဲမှုတွေကို မဖြစ်ပေါ်စေပါဘူး။
2. တစ်စုံတစ်ခုသော အဓိပ္ပါယ်မရှိသောအချက်သည် ၎င်းအကြောင်းပြောရန် အကြောင်းမရှိဟု မဆိုလိုပါ (အကောင်းမြင်သူများကဲ့သို့မဟုတ်ပါ)။ Muharram R. Piersig ၏ စကားလုံးများသည် အရည်အသွေး သဘောတရား၏ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်အပေါ် သူ၏ စာအုပ် Zen and the Art of Motorcycle Maintenance တွင် လူသိများကြပြီး (လူဆိုး) ဂရိလူမျိုးများသည် အရာအားလုံးကို သတ်မှတ်ရမည်ဟု အချက်ဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဦးနှောက်ကို ဖောက်ထုတ်လိုက်သည့်အချက်ကို သိရှိကြသည်။ . ကိုယ်ကျင့်တရားတန်ဖိုးရဲ့ သဘောတရားကို ဘယ်လိုသတ်မှတ်ရမှန်းမသိလို့ နိဂုံးချုပ်ရလိမ့်မယ် ထင်ပါတယ်။ အခြေခံသဘောတရားလို့ သတ်မှတ်လို့မရပါဘူး။ ယဇ်ပုရောဟိတ်၏ သန့်ရှင်းမှု၊ ဗိမာန်တော်၏ သန့်ရှင်းမှုနှင့် အခြားအရာများ ၏ ဘာသာရေးတန်ဖိုးကို သင့်အား ငါယူဆောင်လာပါသည်။
သင်သည် ကျွန်ပြုခြင်း၏စံနမူနာကို ယူဆောင်လာသော်လည်း သင့်ဘဝအတွက် လွယ်ကူစေသည်။ ငါ Torah နှင့် Halacha အများစုအကြောင်းပြောနေသည်။ သူတို့သည် ၎င်းတို့၏ အခန်းကဏ္ဍကို မဖြည့်ဆည်းခဲ့ကြသော်လည်း ကျင့်ဝတ်တန်ဖိုးကို ဘယ်သောအခါမှ မထမ်းဆောင်ခဲ့ကြပေ။ ဒါဆို သူတို့က ဘာအတွက်လဲ။ mitzvos က ပိုပြီး ကိုယ်ကျင့်တရား ပိုကောင်းနိုင်တယ် ဆိုတဲ့ သီအိုရီ ကြေငြာချက် ကို မင်းပြောနေတာ။ အဲဒါကို အရိပ်အယောင် မတွေ့ဘူး။ mitzvos ၏စာမေးပွဲနှင့်အစီအစဥ်တွင်မဟုတ်ပါ (အများစုမှာအကျင့်စာရိတ္တနှင့်မသက်ဆိုင်ပါ)၊ အဖြစ်မှန်ကိုကိုယ်တိုင်ကြည့်ရှုလေ့လာခြင်း၌လည်းမရှိပါ။ ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်၏ထင်မြင်ချက်မှာ ဤအရာများသည် ကြေကွဲဖွယ်ရာ အဖြစ်ဆုံးဖြစ်ပြီး အဖြစ်မှန်ကို သမ္မာသတိရှိသော အမြင်မဟုတ်ပါ။
29 Elul 09 - 2016/14/54 at XNUMX:XNUMX
ကျွန်ုပ်၏ အသိပညာ အတတ်နိုင်ဆုံးအားဖြင့်၊ နိုင်ငံတော် ထူထောင်ခြင်းကို သဘာဝ ဖြစ်ရပ်တစ်ခု (ဘုရားသခင်၏ စွက်ဖက်မှု မပါဘဲ) အဖြစ် မြင်သည်။ သို့ဆိုလျှင် ဤအကြောင်းအရာတွင် ဘုရားသခင်အား ချီးမွမ်းခြင်းကား အဘယ်နည်း။
အမှန်ပင်၊ ယနေ့ နိုင်ငံတော် ထူထောင်ရာတွင်သာမက သမိုင်းတွင် ဘုရားသခင် ပါဝင်ပတ်သက်ခြင်း မရှိသည်ကို ကျွန်ုပ် နားလည်ပါသည် (ထို့ပြင် မည်သည့်နေရာနှင့် မည်သည့်အချိန်တွင် ဖြစ်လာမည်ကို ကျွန်ုပ်မသိနိုင်)။ ထို့ကြောင့် ပျော်ရွှင်မှု တစ်စုံတစ်ရာ ဖြစ်ပေါ်လာသောအခါ (= "အံ့ဖွယ်ကောင်းသည်" ?) ဤကမ္ဘာကြီးနှင့် ငါ၏ဖန်ဆင်းခြင်းတို့ကို ဝန်ခံခြင်းအဖြစ် ချီးမွမ်းပြောဆိုရန် အခွင့်အရေးတစ်ခုသာ ဖြစ်ပါသည်။
29 Elul 09 - 2016/14/55 at XNUMX:XNUMX
အဝေးရောက် တပါးအမျိုးသားများ အုပ်ချုပ်မှုအောက်တွင်ပင် ဟာလခမြို့တွင် ကျောက်ချရပ်နားပြီး တရားဝင်သော "Dina Damlakhuta Dina" ကို ကတိကဝတ်ကြားက ခြားနားချက် အတိအကျကို ကျွန်ုပ် နားမလည်နိုင်ပါ၊၊ နှင့် ယနေ့ အခြေအနေ၊ နယ်ပယ်များနှင့် စကြာဝဠာတန်ဖိုးများအတွက်၊ နှင့်တူ?
မင်းရဲ့ မှတ်ချက်ထဲက ကောက်နုတ်ချက်ကို ငါကိုးကားမယ်- "တူညီတဲ့ကိစ္စတစ်ခုအနေနဲ့၊ အရာအားလုံးဟာ Torah ဖြစ်ခဲ့ရပြီး အရာအားလုံးဟာ ပြောင်းလဲသွားခဲ့တယ် ဆိုတဲ့အချက်ကို ငါတို့ ကျင့်သားရလာခဲ့တယ်။ ဟာလကာဟ်ရဲ့အပြင်မှာ သာမန်လူသားဘဝဆိုတာ မရှိသလို တန်ဖိုးလည်းမရှိတာ သေချာပါတယ်။ အရာအားလုံးကို ခုံသမာဓိလူကြီးများနှင့် ရဗ္ဗိများက စီရင်ဆုံးဖြတ်သင့်သည်။ ဒါပေမယ့် ဒီနေ့တော့ ပုံမှန်အတိုင်း ပြန်သွားဖို့ အခွင့်အရေးရှိတယ်။ အစ္စရေးလူများသည် BH တွင် လောကီရေးရာ အမျိုးသားရေး အတိုင်းအတာတစ်ခု ရှိသည် (BH သည် လောကီရေးရာ ဝါဒမဟုတ်သော်လည်း ကျွန်ုပ်တို့အားလုံး၏ အသက်တာ၏ လောကရှုထောင့်မှ ပြန်လာခြင်းဖြစ်သည်။ အချို့က ၎င်းကို သမိုင်း၏ ဇာတ်ခုံသို့ ပြန်ရောက်ခြင်းဟု ခေါ်ဆိုကြသည်)။ သမိုင်းဆိုင်ရာ ရောဂါဗေဒ အမျိုးမျိုးကြောင့် ကျွန်တော်တို့ ကျင့်သားရလာတဲ့ ပုံစံအတိုင်း ဆက်သွားနေစရာ အကြောင်းမရှိပါဘူး။” ထို့အတွက်ကြောင့် ကျွန်ုပ်တောင်းဆိုသည်မှာ “ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့ပြည်မှ နှင်ထုတ်ခံရသည်” ဆိုသည့်အချိန်၌ပင် ဟာလခဟ်၏ ဆုံးဖြတ်ချက်အချို့အောက်တွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် (ဟာလခဟ်အပြင်ဘက်တွင် ခင်းကျင်းထားသော) ဆုံးဖြတ်ချက်များ၏ တရားဝင်မှုအောက်တွင် ရှိခဲ့ပါသည်။ "ဒိဋ္ဌိဓမ္မလက္ခုတာဒိနာ" အမျိုးအစားတွင် ပါ၀င်ခဲ့သ လောက်တော့ အတွေးအမြင်တွင် ထင်ရှားသိသာသော အတိုင်းအတာသည် အဘယ်နည်း။
အခုမှ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပိုရှင်းလာမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
ငါနားလည်တယ်။ သို့သော် အခြားသူများ၏လက်အောက်တွင် အုပ်ချုပ်မှုသည် ကျွန်ုပ်တို့အတွက် အနှောက်အယှက်ဖြစ်ပြီး မလိုလားအပ်ပေ။ Dina Damlakhuta မှာ halakhic တရားဝင်မှုရှိတယ်၊ ဒါဆို ဘာလဲ။ Franz Josef ရဲ့ တံတိုင်းအောက်မှာနေရတာ ကောင်းတယ်လို့ ဆိုလိုတာလား။ ပျော်ရွှင်မှုမှာ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ဘဝကို ကိုယ်တိုင်စီမံခန့်ခွဲခြင်းသို့ ပြန်သွားရခြင်းဖြစ်ပြီး ၎င်းသည် halakhic တရားဝင်မှုမဟုတ်ပေ။
အကြောင်းအရာများကို ရှင်းလင်းပေးသည့်အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ သင်သည် ပညတ်တော်များနှင့် တိုက်ရိုက်အာဏာကို ရရှိလိမ့်မည်။
29 Elul 09 - 2016/14/58 at XNUMX:XNUMX
အကယ်၍ အစာရှောင်ခြင်းသည် အမျိုးသားပွဲတစ်ခုသာ ဖြစ်ပါက ၎င်းတို့ လွတ်မြောက်မည်ဟု သင်ထင်ပါသလား။ ပြည်နယ်တစ်ခုတွင်ကျင်းပသည့် အခမ်းအနားတစ်ခုသည် တရားဇရပ်တိုင်းရှိ ဆုတောင်းချက်တစ်ခုကို အမှန်တကယ်အစားထိုးနိုင်ပါသလား။
Holocaust သည် တိဗက် သို့မဟုတ် ဂေဒလိ၏ ဆယ်ပုံတစ်ပုံတွင် ပိုမိုပြင်းထန်သော ပြင်းအားရှိသော ဖြစ်ရပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်တော့်အမြင်အရတော့ အဲဒါကို နောင်လာနောက်သားတွေဆီ လက်ဆင့်ကမ်းဖို့ အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းက ခါတိုင်းလို ဥပုသ်နေ့ဖြစ်တဲ့ ဘာသာရေး ဝမ်းနည်းခြင်းနေ့ကို ယုံမှားသံသယဖြစ်စရာမရှိပါဘူး။ မင်းရဲ့ (ဘာသာရေး) အသိမိတ်ဆွေ ဘယ်နှစ်ယောက်က ဘုရင်ယေဟုကို သိတာလဲ။ Gedalia Ben Ahikam ကို ဘယ်နှစ်ယောက်သိလဲ။
ဘာလုပ်မလဲ? အားလပ်ရက်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အစာရှောင်တဲ့နေ့ပဲဖြစ်ဖြစ် အစားအသောက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို ဂျူးတွေက ကောင်းကောင်းမှတ်မိတယ်။ ပိုမိုကောင်းမွန်စွာ လုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ကြောင်း သမိုင်းက ပြသခဲ့သည်။ ဂျူးအမျိုးသားအားလပ်ရက်များ (Megilat Ta'anit) သည် Halacha တွင်လက်ခံသည့်ရက်မှလွဲ၍ အခြားမည်သည့်ရက်စွဲမှမလွတ်မြောက်ကြောင်း အထောက်အထားများ။
ဤသည်မှာ ကိရိယာတန်ဆာပလာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဟာလာဟာဟ် လိုအပ်သလား ဒါမှမဟုတ် အောက်မေ့ဖွယ်နေ့ကို သတ်မှတ်ဖို့ မျှော်လင့်သလားဆိုတဲ့ မေးခွန်းကို ကျွန်တော် ဖြေရှင်းပါတယ်။ ဘယ်အရာက ပိုထိရောက်သလဲဆိုတဲ့ မေးခွန်းက ကွဲပြားပြီး သီးခြားဆွေးနွေးသင့်တယ်။
ဒုတိယမေးခွန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကျွန်တော့်အမြင်ကတော့ မေ့ရင် မေ့သွားလိမ့်မယ်။ တချိန်ချိန်မှာ အဖြစ်အပျက်တွေဟာ ဝေးကွာပြီး ဆီလျော်မှုနည်းလာပါတယ် (ဂေဒလိနဲ့ ယေဟုကို သတိရဖို့ ဒီနေ့ တကယ်အရေးကြီးပုံမပေါ်ဘူး)။ မင်းရဲ့မှတ်ချက်တွေဟာ ဘာသာတရားနဲ့ ဟာလခဟာ အမျိုးသားနဲ့ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ လူသားတန်ဖိုးတွေကို ဝန်ဆောင်မှုပေးသင့်တယ်ဆိုတဲ့ ကျယ်ပြန့်တဲ့ခံယူချက်အပေါ် အခြေခံပါတယ်။ အဲဒါကို ကျွန်တော် သဘောမတူဘူး။
29 Elul 09 - 2016/15/01 at XNUMX:XNUMX
အရှင်ဘုရား Uriel Eitam ၏ မိတ်ဆွေများထံမှ ယေရုဟမ်မြို့၌ ဆုံးမသြဝါဒပေးသော နေ့ရက်မှစ၍ ငါသည် များစွာသောအကြောင်းအရာတို့ကို ကြားသိရပြီ။
ဟိုလိုကော့စ်နေ့အတွက် အစာရှောင်ခြင်းဆိုင်ရာ မင်းရဲ့ဆောင်းပါးကို စိတ်အားထက်သန်စွာ ဖတ်ပြီး အကြောင်းအရာအများစုကို သဘောတူပါတယ်။
ကွယ်လွန်သူ အရှင်ဘုရား Amital ထံမှ ကြိမ်ဖန်များစွာ ကြားသိခဲ့ရသည်– “အရာအားလုံးသည် တိုရဟ်၏ ထင်မြင်ချက်မဟုတ်”။ "Da'at Torah" နှင့် အခြားအရာများကို ပြောရန်မလိုအပ်ပါ။
လွတ်လပ်ရေးနေ့တွင် ဂုဏ်ပြုသောအားဖြင့် ဝမ်းမြောက်ဂုဏ်ယူပါလေ။
ဖြစ်ပျက်ခဲ့သော အံ့ဖွယ်အမှုတစ်ခုအတွက် ချီးမွမ်းစကားဆိုကာ ၎င်းသည် ဘာသာရေးအရ အရေးမပါဟု မည်သို့ပြောနိုင်သနည်း။ ဒါမှမဟုတ် မင်းပြောတာကို ငါနားမလည်ဘူး။
ရေချိုးခန်းသွားပြီးနောက် (ကွဲပြားစေရန်) ဖန်တီးထားသည့် ကြေငြာချက်ကို စဉ်းစားပါ။ ကျွန်ုပ်၏အပေါက်များကိုဖွင့်ပြီး ဘုရားသခင်အား ဝန်ခံခြင်းသည် ဘာသာရေးဆိုင်ရာ အတိုင်းအတာတစ်ခုရှိပါသလား။ မနက်စာ မစားခင်နဲ့ စားပြီး နှုတ်ဆက်တဲ့ မနက်စာက ဘာသာရေး အချိုးအစား ရှိလား။ ငါ့အတွက်တော့ တိုင်းပြည်က အိမ်သာနဲ့ မနက်စာလိုပါပဲ။
အံ့ဖွယ်အမှုတစ်ခုအတွက် ချီးမွမ်းခြင်းအတွက်၊ ဒါက နောက်မေးခွန်းတစ်ခုပါ။ ယနေ့ကျွန်ုပ်၏ခံယူချက်မှာ အံ့ဖွယ်အမှုများမရှိခြင်း (သို့မဟုတ် အနည်းဆုံး အရိပ်အယောင်မရှိ) နှင့် ကမ္ဘာပေါ်တွင် ဘုရားသခင်ပါဝင်ပတ်သက်မှုလုံးဝမရှိပါ။ နိုင်ငံတော်တည်ထောင်ခြင်းကဲ့သို့သော ပျော်ရွှင်ဖွယ်ဖြစ်ရပ်များ ဖြစ်ပေါ်လာသည့်အခါ၊ ကမ္ဘာကြီးကို ဖန်ဆင်းခြင်းနှင့် ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်တိုင် ဖန်ဆင်းခြင်းအတွက် ဘုရားသခင်ကို ကျေးဇူးတင်ရန် လှုံ့ဆော်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒါပေမဲ့ ဂါဇာ (?) မှာ ကျွန်တော် လက်ရှိရေးနေတဲ့ ဓမ္မပညာအကြောင်း စာအုပ်တစ်အုပ်မှာ အကျယ်ချဲ့ပြမယ်။
သို့သော် လွတ်လပ်ရေးနေ့အတွက် ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်တိုင် ကောင်းချီးမင်္ဂလာများကို ပြုပြင်ပိုင်ခွင့်ရှိပါသလား။
ဒါကို ဆွေးနွေးရမယ်။ အနည်းဆုံး အချို့သောနည်းလမ်းများ (Meiri) သည် ကယ်တင်ခြင်းနှင့် ဝန်ခံခြင်း၏ အံ့ဖွယ်အမှုတိုင်းတွင် ချီးမွမ်းစကားပြောဆိုရန် တရားဝင်ဖြစ်ပြီး အထူးစည်းမျဥ်းမပါဘဲပင် ကောင်းချီးပေးသင့်သည်ဟု ထင်ရသည်။ ပန်းသီးတစ်လုံးစားတိုင်း ကောင်းချီးပေးသလိုမျိုး ပန်းသီးတိုင်းအတွက် ကောင်းချီးပေးစရာမလိုပါဘူး။
မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ ကောင်းချီးမပေးဘဲ ချီးမွမ်းရန် အကန့်အသတ်မရှိမှာ သေချာသည်။
ပြီးတော့ Sabra အတွက် ကောင်းချီးတစ်ခုနဲ့တောင် အကန့်အသတ်မရှိ ကောင်းမွန်တဲ့ နေရာတစ်ခုရှိပါတယ်။ Chanukah ၏အံ့ဖွယ်အမှုပြီးနောက် အစ္စရေးတို့သည် ပညာရှိများ၏ စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများမပါဘဲ သူတို့ကိုယ်သူတို့ Hallel ကောင်းချီးမင်္ဂလာဖြင့် ပြောလိုက်လျှင် ပြဿနာရှိသလား။ အချို့သော ရှေးယခင်က ဓလေ့ထုံးစံတစ်ခုဖြင့် မင်္ဂလာရှိ၍ ဤကိစ္စ၌ ချီးမွှမ်းခြင်းအကြောင်း ဆွေးနွေးခြင်းလည်း ရှိပါသည်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီအတွက် ကျွန်တော် တွန့်ဆုတ်ဖြစ်သွားပြီ။
အစ္စရေးနိုင်ငံကို “ဝန်ဆောင်မှု” တစ်ခုအနေနဲ့ မြင်ဖို့က ကျွန်တော့်အတွက် ခက်ခဲပါတယ်။
2000 နှစ်အကြာတွင် အစ္စရေးလူမျိုးများသည် အစ္စရေးနိုင်ငံသို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိခဲ့ကြသည်။ ဝမ်းနည်းစရာကောင်းတာက လွန်ခဲ့တဲ့ အနှစ် ၂၀ လောက်က နိုင်ငံတော်ကို မထူထောင်ခဲ့တာ။
နိုင်ငံတော်၏ကျေးဇူးကြောင့် ပို့စကတ်များ အစုလိုက်ရှိပါသည်။ လွတ်လပ်သောအစိုးရသည် အစ္စရေးပြည်သူတို့ထံ ပြန်လာခဲ့သည်။ ပညာရှိများ၏အသုံးအနှုန်းများကို "မေရှိယ၏နေ့ရက်များ" ဟုခေါ်သည်။
ချီးမွမ်းခြင်းသည် အံ့ဖွယ်အမှုတစ်ခုအတွက်သာမက ကယ်တင်ခြင်းအတွက်ဖြစ်သည်။
အံ့ဖွယ်အမှုတစ်ခုသည် သဘာဝ၏နိယာမများကို ချိုးဖျက်ရုံသာမက သမိုင်း သို့မဟုတ် ယုတ္တိဗေဒဆိုင်ရာ နိယာမများကို ချိုးဖောက်ခြင်းဖြစ်သည်။
နှစ် 2000 အကြာတွင် မြေကြီးစွန်းတွင် ပြန့်ကျဲနေသော လူတို့သည် ၎င်းတို့၏ပြည်သို့ ပြန်သွားကြသည့် ဖြစ်ရပ်ကို မည်သည့်နေရာတွင် ထောက်ပြခဲ့သနည်း။
သူမကိုဖြေရှင်းသည်။ ပြုစုသူ။ အဲဒီထဲမှာ ပို့စကတ်တွေ ဖွဲ့ထားတယ်။ အခြားမည်သည့်ဥပမာရှိသေးသနည်း။
ပရောဖက်တို့သည် ၎င်းတို့၏ရူပါရုံ၌ ဤအရာကို အလိုရှိကြသည်မဟုတ်လော။
အကယ်၍ လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း 80 ကဆိုလျှင် ၎င်းတို့သည် မော်ရိုကိုနိုင်ငံမှ Mordechai နှင့် Poland မှ Libish တို့ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းတို့အား ပြောပြခဲ့ပေလိမ့်မည်။ သူတို့​ရဲ့​သား​မြေး​တွေ​က အစ္စရေး​ပြည်​မှာ+ အစ္စရေး​တွေ​ရဲ့ အုပ်​ချုပ်​မှု​အောက်​မှာ အတူ​ရှိ​ပြီး မိသားစု​တွေ​ကို ထူထောင်​ကြ​မယ်။ အိမ်သာနဲ့တူတယ်လို့ ဆိုကြမှာလား။
အစ္စရေးနိုင်ငံကို ဝန်ဆောင်မှုတွေနဲ့ နှိုင်းယှဥ်တဲ့အခါ၊ နိုင်ငံတော်ဟာ ဝန်ဆောင်မှုတွေလောက် တန်ဖိုးမရှိသလို ရွံရှာဖွယ်ကောင်းတယ်လို့ မပြောလိုပါဘူး။ နိုင်ငံတော်သည် ကျွန်ုပ်တို့အတွက် (အရေးပါသော) အဓိပ္ပါယ်ရှိပြီး ဘာမှမကျန်တော့ပါ။ ဒီအဓိပ္ပာယ်ကို ကျွန်တော်တို့ အကောင်အထည်ဖော်နိုင်လို့ အရမ်းဝမ်းသာပါတယ်၊ နှစ်ပေါင်းများစွာ မလုပ်ဖြစ်သေးပေမယ့် ဘာသာရေးတန်ဖိုးတစ်ခုအနေနဲ့ မမြင်မိပါဘူး။ ဒါဟာ နိုင်ငံတော်ရဲ့ တန်ဖိုးအရှိဆုံးပါ။ ဧကန်စင်စစ် မေရှိယကြွလာခြင်းသည် မိုးကိုပေးကမ်းခြင်းကဲ့သို့ ကတိတစ်ခုလည်းဖြစ်သည်။ မေရှိယ၏နေ့ရက်များသည် mitzvos ကိုမစောင့်ထိန်းသောကြောင့် ဘာသာရေးတန်ဖိုးမရှိသော်လည်း အများစုမှာ mitzvos (ဗိမာန်တော်စသည်ဖြင့်) ကိုပိုမိုစောင့်ထိန်းနိုင်စေမည့်နည်းလမ်းများဖြစ်သည်။ ချမ်းသာရခြင်းသည် ပညတ်တော်များကို စောင့်ရှောက်ခြင်း၏ နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး ဘာသာရေးတန်ဖိုး ကြွယ်ဝခြင်းကိုလည်း မဖြစ်စေပါ။ နိုင်ငံတော်ဆိုတာ မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး၊ အဲဒါက ငါတို့အတွက် အချိန်အတော်ကြာအောင် ချို့တဲ့နေပြီး အဲဒါကို လိုချင်လို့ မရဘဲနဲ့ ခံစားခဲ့ရတာက ငါတို့အတွက် အရမ်းရှုပ်ထွေးပါတယ် (သူ့ဒုက္ခကြောင့် ငွေကို တန်ဖိုးအဖြစ်မြင်တဲ့ ဆင်းရဲသားတစ်ယောက်လို) .
အံ့ဖွယ်အမှုများနှင့် ပတ်သက်၍ အလွန်အကျိုးအမြတ်များသော ရှုပ်ထွေးမှုများရှိသည်။ ကမ္ဘာပေါ်ရှိဘုရားသခင်၏ ကြားဝင်ဆောင်ရွက်ပေးမှုတိုင်းသည် အံ့ဖွယ်အမှုများဖြစ်သည်။ ဝင်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်း ဆိုသည်မှာ တစ်စုံတစ်ရာ စွက်ဖက်ခြင်းမရှိဘဲ (သဘာဝနိယာမများအတိုင်း) ဖြစ်ပေါ်လာပြီး ဘုရားသခင်က ဝင်ရောက်စွက်ဖက်ပြီး အခြားအရာများ ဖြစ်ပေါ်လာသည်ဟု ဆိုလိုသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ သဘာဝ၏ နိယာမများကို ချိုးဖောက်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ အံ့ဖွယ်ပင်။ အံ့ဖွယ်တစ်ပါးမဟုတ်သော သဘာဝတွင် ဘုရား၏ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှု မရှိပါ။
အစ္စရေးသို့ ပြန်လာခြင်း၏ ထူးခြားမှုမှာ ကျွန်ုပ်အတွက် လူသိများပြီး ၎င်းကို သဘောတူပါသည်။ ဤနေရာတွင် အံ့ဖွယ်တစ်ခုရှိနေသည်ဟု ဆိုလိုပါသလား။ ကျွန်တော့်မျက်လုံးထဲမှာ သံသယကြီးစွာနဲ့။ ဒါဟာ ထူးထူးခြားခြား သမိုင်းဝင်ဖြစ်ရပ်တစ်ခုပါ။
ခြားနားချက်ကို နားမလည်ခဲ့ပါ။ ဘုရားသခင်က သူသည် ပရောဖက်ကို စေလွှတ်မည် သို့မဟုတ် မိုးရွာမည်ဟု မိန့်တော်မူခဲ့သည်။ ငါတို့ mitzvot လုပ်ခဲ့တယ်၊ မင်းဘယ်တော့ မိုးမရွာဖို့ ဆုံးဖြတ်မလဲ။ တစ်ပတ်ပြီးနောက်? တစ်လ? မျိုးဆက်? mitzvot လုပ်မလား၊ မလုပ်ဘူးလား ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်မလဲ။ ပညတ်တော်မည်မျှလုပ်ဆောင်သင့်သနည်း။ လူအချို့? ဤအရာအားလုံးသည် အမှန်တကယ် ငြင်းဆို၍မရပါ။ ဒါဟာ ငြင်းခုံခြင်းမဟုတ်ပဲ ယေဘူယျ အထင်ကြီးခြင်းရဲ့ မေးခွန်းတစ်ခုပါ။ ငါရေးထားသလိုပဲ၊ ဘုရားသခင်က စွက်ဖက်တော်မမူဘူးလို့ ကောက်ချက်ချတာက ပြတ်ပြတ်သားသား ချေပချက်တစ်ခုရဲ့ ရလဒ်မဟုတ်ပေမယ့် အထင်ကြီးစရာတစ်ခုပါပဲ။
"ဘာသာရေး" လို့ဆိုလိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကို အခုနားလည်ပါပြီ၊ ထို့ကြောင့် အစ္စရေးနိုင်ငံအတွက် စကားလုံးအသုံးအနှုန်းကို နားလည်ပြီး ၎င်း၏တည်ထောင်မှုမှာ ဘာသာရေး အဓိပ္ပါယ်မရှိပါ၊ "ဘာသာရေး" ဟူသော စကားလုံးသည် ပိုမိုကျယ်ပြန့်သော အဓိပ္ပါယ်ကို မြင်နေရသောကြောင့် Kibbutz Galuyot စသည်တို့၏ အမြင်တွင် ၎င်းကို နားလည်ပါသည်။ ကြီးမြတ်သောဘာသာရေးအဓိပ္ပာယ်ရှိသည်။
မေရှိယ၏နေ့ရက်များအတွက်လည်း အလားတူပါပဲ၊ မေရှိယကြွလာမည့် ဗိမာန်တော်ရှိမည်ကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရ၊ ဤကိစ္စတွင် ကျွန်ုပ်မဝင်ပါ။
အံ့ဖွယ်အမှုတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ “မနက်ဖြန် နေထွက်မယ်” ဆိုတဲ့ အယူအဆကို မျှဝေပါတယ် - ဒါက အံ့ဖွယ်တစ်ခုတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ သဘာဝနိယာမများကို အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းသည် အံ့ဖွယ်တစ်ခုမဟုတ်ပါ။
တစ်ချို့လူတွေပြောသလိုပဲ အရာရာတိုင်းဟာ အံ့ဖွယ်တစ်ခုမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ အနေအထားကို ကျွန်တော်လုံးဝမျှဝေပါတယ်။
သို့သော် နှစ်ပေါင်းနှစ်ထောင်ကျော်ကြာပြီးနောက် အစ္စရေးနိုင်ငံသို့ ပြည်နှင်ဒဏ်များစုဖွဲ့ကာ အခြားလူမျိုးများနှင့် တန်းတူမှုမရှိသည့် ဖြစ်စဉ်တစ်ခုသည် သဘာဝဖြစ်စဉ်တစ်ခုမဟုတ်ပါ။
ဤနေရာတွင် ပင်လယ်ကိုဖြတ်ကူးခြင်း သို့မဟုတ် "Givon Dom" တွင် နေရောင်မရှိသည်မှာ မှန်သော်လည်း ဤနေရာတွင် သဘာဝမဟုတ်၊ ၎င်း၏အမျိုးအစားနှင့် အမျိုးအစားအလိုက် ထူးခြားသည့် ဖြစ်စဉ်တစ်ခုရှိပါသည်။ ဤအချက်ကိုပင် ကျွန်ုပ်တို့ သဘောမတူကြောင်း ထင်ရှားသည်။
အငြင်းအခုံနှစ်ခုကို ပိုင်းခြားရန်လိုသည်- ၁။ နိုင်ငံတော် ထူထောင်ရေးနှင့် ပြည်နှင်ဒဏ်ပေးရေး အဖွဲ့များ ထူထောင်ခြင်းသည် အံ့ဖွယ်ကောင်းလှသည်။ 1. ဤတရားနှစ်ပါးသည် ဘာသာရေးဆိုင်ရာ အဓိပ္ပါယ်ရှိသည်။ နှစ်ဖက်စလုံးအပေါ် မှီခိုမှု မရှိပါ။ ဘာသာရေးအရ အဓိပ္ပါယ်မရှိသော အံ့ဖွယ်အမှုများ ရှိနိုင်သည် (၎င်းသည် အံ့ဖွယ်ကောင်းသည်ဟု ယူဆသူများအတွက် အပေါက်များဖွင့်ခြင်းကဲ့သို့)၊ ဘာသာရေးဆိုင်ရာ အဓိပ္ပါယ်ရှိနိုင်သည်၊ ၎င်းသည် အံ့ဖွယ်ကိစ္စမဟုတ်ပေ။ ဤအရာသည် အံ့ဖွယ်အမှုဖြစ်သည် (ကွဲလွဲချက်များသည် အံ့သြဖွယ်မဟုတ်ပါ)၊ ဘာသာရေးအရ အရေးပါမှုလည်းမရှိ (ကျွန်ုပ်သည် လောကီဇီယွန်ဝါဒီတစ်ဦးဖြစ်သည်) ဟူသော အရိပ်အယောင်မရှိဟု ကျွန်ုပ်ငြင်းဆိုပါသည်။ ဆိုခဲ့သည့်အတိုင်း၊ ဤတောင်းဆိုချက်နှစ်ခုအနက်မှ နှစ်ခုစလုံးကို သီးခြားစီ သို့မဟုတ် နှစ်ခုလုံးအပေါ် သဘောမတူနိုင်ပါ။
ထို့အပြင်၊ ဤနိုင်ငံသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ရွေးနှုတ်ခြင်း (Inshallah) ၏ ကြီးထွားမှုဖြစ်လာပြီး ၎င်းတွင် ဗိမာန်တော်တစ်ခု တည်ဆောက်ပြီး ရွေးနုတ်ခြင်းခံရမည်မှာ ဖြစ်နိုင်ချေရှိသည်။ ဒါတောင် ငါ့မျက်စိထဲမှာ ဘာသာရေးအရ အရေးမကြီးဘူး။ ၎င်းသည် လောကရေးရာရည်ရွယ်ချက်များနှင့် လောကရေးရာလှုံ့ဆော်မှုများအတွက် ပြုလုပ်ထားသည့် လောကပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒီလိုလုပ်ရပ်တွေက ဘာသာရေးအရ အရေးမကြီးပါဘူး။
အဲဒါက ဘာသာရေးရဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကို မင်းထင်မြင်ယူဆတာက ဘာသာရေးဆိုင်ရာ ရည်ရွယ်ချက်ရှိဖို့ လိုတယ်။
လူသားတို့၏ လုပ်ရပ်သည် ဘာသာရေးဆိုင်ရာ ရည်ရွယ်ချက် (A.A. Leibowitz) ဖြင့် လုပ်ဆောင်မှသာ ဘာသာရေးဆိုင်ရာ အရေးပါမှု ရှိပါသည်။ mitzvos သည် ရည်ရွယ်ချက်မလိုအပ်သော်လည်း ၎င်းသည် mitzvos တွင်သာဖြစ်သည် (ကျပန်းအမည်တစ်ခုအနေဖြင့် sabra ကြောင့်)။ အထူးသဖြင့် ပညတ်တော်များ၏ ထင်မြင်ယူဆချက်အားလုံးသည် ယုံကြည်ခြင်း လိုအပ်ကြောင်း (မွန်းတည့်အချိန်၌ လောကီရေးရာ ပျက်ကွက်မှု) ဆောင်းပါးတွင် ကျွန်ုပ်သက်သေပြခဲ့ပါသည်။ ကောင်းကင်ဘုံအတွက်၊ မစ်ဇဝဟ် (ဣသရေလနိုင်ငံကို အခြေချနေထိုင်ခြင်း) ထောက်၍ ခြောက်သွေ့သော ရွှံ့များကို ဘာသာရေးအရ အဖိုးမဖြတ်ပါ။ အမျိုးသားတန်ဖိုးရှိတယ်။
ဤသည်မှာ လိုအပ်သော အခြေအနေတစ်ခုသာဖြစ်သော်လည်း မလုံလောက်ပါ။ လုပ်ရပ်ကိုယ်တိုင်က ဘာသာရေးတန်ဖိုးရှိရမယ်၊ တိုရာကပဲ သတ်မှတ်ပါတယ်။ အသည်းကွဲတဲ့ ဘာသာရေးအကြောင်းပြချက်နဲ့ ခြေတစ်ဖက်ပေါ် မတ်တပ်ရပ်တဲ့သူဟာ ဘာသာရေးအတွက် တန်ဖိုးမရှိပါဘူး။
Pentateuch ရှိ Mo'an ရှိ Maimonides သည် "ခြေလက်အင်္ဂါများ" နှင့်ရည်ရွယ်ချက်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိလုပ်ဆောင်သူအကြားခွဲခြားသည်။
မေးစရာမှာ လူတစ်ဦးသည် ရည်ရွယ်ချက်မရှိဘဲ ပြုလုပ်သည့် မည်သည့်ဘာသာရေးမှ မဟုတ်သည့် လုပ်ရပ်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ သတ်မှတ်မည်လား။ နိယာမတစ်ခုအနေနဲ့ ကျွန်တော်သဘောတူပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် ဒါက အစ္စရေးနိုင်ငံတော်တော်များများအတွက် မသင်မနေရ လေ့လာမှုတစ်ခုပါ၊ အလုပ်အတွက် အဆင်ပြေပြေနဲ့ တန်ဘိုးပေးတဲ့အရာအချို့လည်း ရှိပါသေးတယ်...
Oakham ရဲ့ သင်တုန်းဓားနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ကျွန်တော့်ရဲ့ ဆောင်းပါးမှာ ယုံကြည်ချက်ကြောင့် မလုပ်တာဟာ သူ့အတွက်ကြောင့် မဟုတ်ဘူးဆိုတာ ရှင်းပြခဲ့တယ်။ ဒါဟာ ဘာသာရေးဆိုင်ရာ ကျင့်စဉ်တစ်ခု မဟုတ်ဘူး။ ဘုရင်များထံမှ Rambam Sufach ကိုကြည့်ပါ။ ယုံကြည်ပြီး ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိမရှိသူသည် ဤနေရာတွင် mitzvos နှင့် mitzvah အဖြစ်မသတ်မှတ်ထားသောအရာကို ပိုင်းခြားရပါမည်။ မှန်ကန်စွာ သင်ယူခြင်းသည် လှပသော အရာဖြစ်သည်၊ သို့သော် အမှန်တရားကို ရှင်းလင်းရန် ကိရိယာတစ်ခု မဟုတ်ပေ။ အာဗတ်ရှိ Mishnah (ဟော်ဒန်၏ ညာဘက်တွင် လူအားလုံး) အကြောင်း ဋီကာဆရာများ (ရမ်ဘမ်၊ ရဗ္ဗနုယောန နှင့် အခြားသူများ) တွင် လူကြိုက်များသော ထင်မြင်ချက်နှင့် ဆန့်ကျင်ဘက် ကျိုးကြောင်းဆီလျော်စွာ ရေးထားသည်ကို သူမြင်သည်။ ပြီးတော့ Oakham ရဲ့ သင်တုန်းဓားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ BDD ဆောင်းပါးတွေမှာ ကျွန်တော်ရေးခဲ့တယ်။
အကယ်၍ ရဗ္ဗိသည် “ဘာသာရေးတန်ဖိုး” ဟုပြောခြင်းဖြင့် သူဆိုလိုသည်များကို သတ်မှတ်နိုင်လျှင်၊ ဆိုလိုသည်မှာ မိဿဟာယ သီလကို လိုက်နာခြင်းသာလျှင် သာသနာ့တန်ဖိုးဖြစ်သည် (ရဗ္ဗိက ခွင့်လွတ်ခြင်း အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်မှာ လီဘိုဝိဇိယန်ကို မကြိုက်ကြောင်း နားလည်သောကြောင့်) ၎င်းသည် ဘာသာရေးနှင့် စပ်လျဉ်း၍ မိဿဟာယ တရားကို ထောက်ကူပေးသည့် မည်သည့်အရာပင် ဖြစ်သနည်း။ အသိတရားနှင့် ကျော်လွန်သည်- မဟုတ်လျှင် ဘာသာရေးတန်ဖိုး ရှိပါသလား။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ရဗ္ဗိဆရာကို နှလုံးသားထဲက မေ့ကျန်ခဲ့တဲ့ ဆွေးနွေးမှုတွေကို အဟောင်းတွေဆီ ပြန်ခေါ်လာမယ်ဆိုရင် တောင်းပန်ပါတယ်။
ကြီးမြတ်သောငြိမ်းချမ်းမှု။ဘာသာရေးတန်ဖိုးဆိုသည်မှာ ဘုရားသခင်၏အမှုတော်တွင် တန်ဖိုးရှိသည်။ ဘုရားသခင်ကို ကိုးကွယ်ခြင်းသည် တရားဥပဒေထက် ကျယ်ပြန့်သောကြောင့် ဘာသာရေးတန်ဖိုးသည် ပညတ်တစ်ခုမျှသာမဟုတ်ပါ။ Shulchan Aruch မတိုင်မီကပင် ၎င်းသည် ဘာသာရေးတန်ဖိုးရှိသည်။ အမှန်စင်စစ်၊ ဘုရားသခင်၏အမှုတော်အတွက် လုပ်ဆောင်ရမည့် အခြေအနေမှာလည်း လိုအပ်ပါသည်။
ကျွန်တော့်ရဲ့ အဆုံးအဖြတ်အရ နိုင်ငံတော်ဟာ ဘာသာရေးအရ ဘယ်လိုမှ တန်ဖိုးမရှိပါဘူး။ နိုင်ငံတော်သည် ကျွန်ုပ်/ကျွန်ုပ်တို့၏ လိုအပ်ချက်ဖြစ်ပြီး တန်ဖိုးတစ်ခုမဟုတ်ပါ။ ငါ၏လူမျိုးနှင့် ငါတို့၏သမိုင်းကိုစွဲလမ်းသော ဣသရေလပြည်၌ ငါနေချင်သည်။ ဒါပဲ။
ဟာလာဟာ အုပ်ချုပ်တဲ့ ပြည်နယ်တစ်ခုအတွက် ဘာတန်ဖိုးရှိလဲ (နိုင်ငံတစ်ခုဟာ နိုင်ငံသားတွေအတွက် ကိရိယာတစ်ခုမဟုတ်တဲ့အတွက်) ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံလို ပြည်နယ်တစ်ခုဟာ ဘာသာရေးတန်ဖိုး မရှိပါဘူး။
NFM အတွက်၊ သင်ရှာနေသည့် မည်သည့် NFM ကို ကျွန်ုပ်မသိပါ (အမျိုးသမီးတစ်ဦး၏ သန့်ရှင်းမှုမှလွဲ၍)။ ဤအရာနှစ်ခုမှာ လုံးဝကွဲပြားသည်- လိုအပ်ချက်တစ်ခုနှင့် တန်ဖိုးတစ်ခုဖြစ်သည်။ တစ်ခုခု လှတယ် ဒါမှမဟုတ် ကောင်းရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ ဤအရာများသည် မတူညီသော အရာနှစ်ခုမျှသာဖြစ်သည်။
ပြောချင်တာက မင်းသတ်မှတ်ထားတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ထက်ကျော်လွန်တဲ့ ဘာသာရေးတန်ဖိုးရဲ့ အဓိပ္ပါယ်က ဘာလဲ။ mitzvah သို့မဟုတ် ဘာသာရေးတန်ဖိုး ကွာခြားချက်မှာ အဘယ်အရာဖြစ်သနည်း၊ ၎င်း၏ဖြစ်တည်မှုကို အဘယ်အရာက ကျွန်ုပ်အား ကူညီပေးသနည်း။ သို့တည်းမဟုတ် ရဗ္ဗိ၏ စကားကို နားမလည်ခဲ့ဘဲ၊ ဤသဘောတရားသည် ၎င်း၏အဓိပ္ပါယ်ထက် ကျော်လွန်၍ အဓိပ္ပါယ်မရှိသောကြောင့်၊ ဤမေးခွန်းသည်လည်း မြုံသောမေးခွန်းဖြစ်သည်။ စကားလုံးနဲ့မညီရင်တောင် အကောင်းနဲ့အလှပကြား ကွာခြားချက်နဲ့ သူတို့ကြား NPM ကို ရှင်းပြနိုင်မယ်ထင်တယ်။ (ဥပမာ- အလှတရားအတွက် လုံလောက်တဲ့ အဓိပ္ပါယ်မရှိလို့၊ အနည်းဆုံးတော့ ငါ့အမြင်အရတော့ အလှအပအတွက် ပေးမယ့်သူကို ရှာတွေ့မယ်လို့ မထင်ပါဘူး)။
Scriptum ကိုတင်ပါ။ နိုင်ငံတော်ကို (ကျွန်တော်နားလည်သလောက်) အမျိုးသားရေးတန်ဖိုးသက်သက်အဖြစ် ခံယူထားတယ်၊ (ပညတ်တော်များကို စောင့်ရှောက်ရန် အဘယ်အရာသည် သာသနာ့တန်ဖိုးဟု မဆိုလိုသော်လည်း) သင့်နည်းလမ်းအရ အဘယ်ကြောင့် အမှန်တကယ် ဟီလာကို ပြောသနည်း။ ကမ္ဘာကြီးကို ဖန်ဆင်းခြင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဝန်ခံချက်တစ်ခုက ကျွန်တော် လစာတိုးပေးတာ ဒါမှမဟုတ် ဟယ်ရီပေါ်တာစာအုပ် ထွက်လာရင်တောင်မှ သာမာန်လူက ချီးကျူးစကား မပြောရဲပါဘူး။ နိုင်ငံတော်သည် အမှန်တကယ် အမျိုးသားတန်ဖိုးသာရှိပြီး၊ ဘုရားသခင်ကို ကိုးကွယ်သည့်စနစ်သို့ စတင်ခြင်းမရှိပါက၊ ၎င်းကို ချီးမွမ်းရန် ကောင်းသော လှုံ့ဆော်မှုဟု ကျွန်ုပ်ယူဆမည်မဟုတ်ပါ။ ရဗ္ဗိသည် သူထင်မြင်ချက်ကို ရှင်းပြနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး နယ်စပ်ကို မည်သည့်နေရာတွင် ဖြတ်ကျော်သနည်း။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ နှစ်သစ်မှာ ပျော်ရွှင်ပါစေ၊
ဒီလိုအချိန်မျိုးမှာ ဆွေးနွေးဖို့က ကျွန်တော့်အတွက် ခက်ခဲပါတယ်။
ဘာသာတရား၏တန်ဖိုးသည် မိဿဝါခေတ်သို့မရောက်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေနှင့်၊ mitzvah သည် ဘာသာရေးတန်ဖိုးတစ်ခုခု၏ ဥပမာတစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော် ကိုယ်ကျင့်တရားကျင့်စဉ်တွင်ပင် တန်ဖိုးရှိပြီး ဘာသာရေးဆိုင်ရာ အရေးပါမှုများ (ငှက်ကုလားအုတ်သည် ဘုရားသခင်၏အလိုတော်ပြည့်စုံသောကြောင့်)။ ဆန့်ကျင်ဘက်အားဖြင့်၊ မောဟလိုအပ်ချက်ကို ဖြည့်ဆည်းခြင်းသည် ကိုယ်ကျင့်တရား သို့မဟုတ် ဘာသာရေးတန်ဖိုး မရှိပါ။ လူတစ်ယောက်ဟာ မနက်စာ ဒါမှမဟုတ် အိမ်လိုချင်သလို တိုင်းပြည်ကို လိုချင်တယ်။ ဒါဟာ လိုအပ်ချက်တစ်ခုရဲ့ ပြည့်စုံမှုဖြစ်ပြီး တန်ဖိုးတစ်ခုမဟုတ်ပါဘူး။ သင့်ဘ၀တွင် သိသာထင်ရှားသော လိုအပ်ချက်တစ်ခု ပြည့်စုံလာသောအခါ (သင့်အသက်ကို ကယ်တင်ခြင်းကဲ့သို့) ပြည့်စုံလာသောအခါ ဤသည်မှာ ချီးမွမ်းပြောဆိုရန် အကြောင်းပြချက်ကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒီနေရာမှာ နားမလည်တာတွေကို ရှင်းပြဖို့ လိုတယ်လို့ မမြင်ပါဘူး။
နိုင်ငံတော်က ဘာသာရေးတန်ဖိုးတွေကို လိုက်နာခွင့်ပြုသလား။ ဖြစ်နိုင်တယ်။ ဒါပေမယ့် မနက်စာနဲ့ လစာကိုလည်း ခွင့်ပြုတယ်။
29 Elul 09 - 2016/15/03 at XNUMX:XNUMX
အထက်ဖော်ပြပါ ဆွေးနွေးပွဲများမှ ဆက်လက်၍ ကျွန်ုပ်သည် ဆောင်းပါးနှင့် ပတ်သက်သော ဆွေးနွေးမှုများမှ ကျွန်ုပ်၏ သဘောထားအမြင်အရ မေးထားသော မေးခွန်းများစွာကို မေးလိုပါသည်။
တစ် ကျွန်ုပ်နားလည်သလောက် ဘုရင်မင်းမြတ်သည် ဖန်ဆင်းရှင်၏ စွက်ဖက်မှုနှင့် အစ္စရေးနိုင်ငံကဲ့သို့သော “အံ့ဖွယ်အမှုများ” ဖန်ဆင်းခြင်းသဘော၊ အထူးသဖြင့် “ဖြစ်ပျက်” သေးငယ်သော “အံ့ဖွယ်အမှုများ” ကြောင့် ဘုရင်မင်းမြတ်သည် နားလည်သလောက် မယုံပေ။ "ငွေ" ကဲ့သို့ လူတစ်ဦးအား မထင်မှတ်ထားသော နေရာမှ ပြုတ်ကျသွားသည်။
[သင်အများကြီးတင်ပြလေ့ရှိတဲ့ ခေါင်းစဉ်တစ်ခုအရ] ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး မင်းရေးခဲ့တဲ့ ဘုရားမဲ့ဝါဒီတွေက မင်းဘေးနားရပ်ပြီး ဥပဒေတွေကို အပြင်မှာကြည့်ရင်း 'ဒီဥပဒေတွေကို ဘယ်သူဖန်ဆင်းတာလဲ' လို့မေးပြီး အဲဒီဥပဒေကို တွေ့တဲ့အခါ၊ ဖန်ဆင်းခြင်းဆီသို့ ဦးတည်သည်ဟူသည့်နည်းဖြင့် တည်ဆောက်ထားခြင်းဖြစ်သည်၊ ဘုရားသခင်သည် ဤနည်းဖြင့် ပညတ်တရားကို ဖန်ဆင်းသည်ဟု ကောက်ချက်ချသည်၊ ဆိုလိုသည်မှာ၊ ဘုရားသခင်သည် 'ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ဥပဒေ' ကို ဖန်ဆင်းသည်ဟု သင်ယူဆပါသည်။ သို့ဆိုလျှင် အံ့ဖွယ်အမှုများနှင့်ပတ်သက်၍ပင် 'အပေါ်ယံ' ရိုးရှင်းသောအမြင်ဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ထင်မြင်ရသည်မှာ အရာအားလုံးသည် သဘာဝကျသည်ဟု ထင်ရပြီး ဣသရေလလူမျိုး၏ မျိုးဆက်များ ၏လမ်းစဉ်ကို ထူထောင်ခြင်းကဲ့သို့သော သဘာဝရှင်းလင်းချက်များ ရှိသည်၊ အစ္စရေးနိုင်ငံ၊ သို့သော် ကျွန်ုပ်တို့ အပြင်ဘက်ကြည့်၍ မေးကြည့်လျှင် ပရောဖက်များနှင့် တိုရာပရောဖက်ပြုထားသည့် အလားတူပင်၊ ဖန်ဆင်းရှင်သည် ဤ 'သဘာဝ' ဖြစ်စဉ်တစ်ခုလုံးကို ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုဖြင့် စီမံညွှန်ကြားပြီး ဖြစ်စဉ်နှင့် သဘာဝနိယာမများကို ပြင်ပသို့ကြည့်ခြင်းဟု ဆိုနိုင်ပါသည်။ ၎င်းအတွင်း၌ ပံ့ပိုးမှု၏ပုံတစ်ပုံကို ပေးနိုင်ပါသလား။ [သေးငယ်သော အံ့ဖွယ်အမှုများနှင့်ပတ်သက်၍ပင် ဤရှုထောင့်ကို လက်ခံနိုင်သည်]။
ခ နောက်ထပ်မေးခွန်းတစ်ခုမှာ၊ Torah နှင့် တမန်တော်မြတ်၌ ရေးထားသော အံ့ဖွယ်အမှုများကို သင်မယုံဟု ဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့သည် ရူပဗေဒနိယာမများကို ငြင်းပယ်ခြင်းကဲ့သို့သော အပေါ်ယံအကြည့်ဖြင့် မြင်နေရသည်- မြွေဖြစ်လာသော တောင်ဝှေး၊ ကောင်းကင်မှဆင်းသက်လာသော ပေါင်မုန့်၊ ၊ သွေးအဖြစ်ပြောင်းသောရေ၊ ကောင်းကင်မုန်တိုင်းတွင်မြင်းများပါသောရထားတစ်စီး၊ ဒဏ္ဍာရီများစုစည်းမှုအဖြစ်?
တတိယ။ ထို့အပြင်၊ လူ့လုပ်ရပ်များအကြောင်း ဘုရားသခင်ကို သိခြင်းအပေါ် သင်၏ယုံကြည်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ၎င်းသည် အဘယ်အရာကိုဆိုလိုသနည်း၊ အပေါ်ယံအားဖြင့် ကြီးကြပ်မှုကင်းမဲ့ခြင်းသည် ဘုရားသခင်ကိုသိခြင်းကို ပျက်ပြားစေသည်ဟု ထင်ရသော်လည်း၊ အချင်းချင်းအပေါ်တွင် ဤယုံကြည်ချက်များ၏ နက်နဲမှုရှိကြောင်း၊ သင်၏နည်းလမ်းအတွက် 'ဆုငွေနှင့် ပြစ်ဒဏ်' ဟူသော အယူအဆ မရှိပါ။ ထို့ကြောင့် သင်၏စကားများက 'နောင်ကမ္ဘာ' သည် Torah ၌ အထောက်အပံ့မရှိသော ပညာရှိယုံကြည်ချက်ဖြစ်သည် [အမှန်ပင် ကျွန်ုပ်သဘောတူသော်လည်း ပရောဖက်များနှင့် ကျမ်းဂန်များတွင် အများအပြားရှိသည်။ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ထောက်ခံမှု]၊ ဤနိယာမ၌ မယုံကြည်ခြင်းသည်၊ Leibowitz ၏ စကားကို ထပ်ခါထပ်ခါ ပြောခြင်းဖြစ်သည်၊ mitzvah အတွက် 'စွဲချက်' ဟူသည်မှာ ငါပြုရန် ကြိုးပမ်းခဲ့ခြင်းကြောင့်သာ ဖြစ်သည်ဟု ဆိုလိုသလော။ သို့ဆိုလျှင် ဤသာသနာတော်သို့ ဝင်ရောက်ရန် တွန့်ဆုတ်ခြင်းများစွာ မရှိကြပေ၊ အဘယ်ကြောင့် ခေတ်နောက်ကျ၍ ခေတ်မမီတော့သော ဥပဒေစနစ်တစ်ခု၌ မိမိကိုယ်ကို အဘယ်ကြောင့် ထားဘိသနည်း [အမိန့်တော်များစွာနှင့် မိတ်သဟာယတို့၏ အရသာကို ခေတ်အဆက်ဆက် ပျက်ပြယ်စေကြောင်း ဝန်ခံပါ၏]၊ 'အဲဒီဥပဒေစနစ်ရဲ့ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုသာ လက်ခံပါ၊ သက်ဆိုင်ရာ သင်တစ်ဦးတည်းသာ၊ အစ္စရေးနိုင်ငံတော်ရဲ့ ဥပဒေတွေက ဘာတွေမှားနေလဲ၊ တည်ဆဲဥပဒေတွေကို ဘာကြောင့် အလွန်အကျွံ ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုး ဖြစ်စေတာလဲ။
ဃ။ 'ကောင်းကင်မှ တိုရာဟ်' အယူအဆကို သင်ယုံကြည်သည်ဟု သင်ပြောခဲ့သောစကားမှ ထွက်ပေါ်လာသော အသံဖြစ်သည် [ သမ္မာကျမ်းစာ၏ ဝေဖန်ရေးဆရာများ၏ တောင်းဆိုချက်အချို့ကို သင်လက်ခံကြောင်း ကျွန်ုပ်နားလည်ထားသောကြောင့် ကန့်သတ်ချက်တစ်ခုအတွင်း)၊ သို့မဟုတ် မဟုတ်ပါက သင်ယုံကြည်ရမည်၊ 'အနာဂတ္တိ'။ ပြီးတော့ ငါမေးတယ်၊ မင်းက ဘာလို့ တူညီတဲ့ ယုတ္တိဗေဒကို မသုံးတာလဲ ဆိုတော့ ငါ မမြင်ဘူးတဲ့ အရာတိုင်းဟာ ငါ ရှိနေတယ် လို့ ယူဆစရာ အကြောင်းမရှိဘူး ၊ ဆိုလိုသည်မှာ နှစ်ပေါင်း 2500 နီးပါး ဘယ်သူမှ မမြင်ဖူးဘူး ။ ပရောဖက်ပြုချက်ဆိုတာ ဘာလဲ၊ ဘယ်လိုပြသင့်တယ်၊ တစ်ချိန်က ရှိခဲ့ဖူးတဲ့ လေးနက်မှုမရှိတဲ့ ပရောဖက်ပြုချက်တွေကို အခြေခံပြီး သင်ယုံပါ [အတိတ်က ဟောခဲ့တဲ့ ဒီလမ်းစဉ်ဟာ ကောင်းမှုလုပ်၊ မကောင်းတာလုပ်၊ မကောင်းတာလုပ်၊ နောင်ဖြစ်လာမယ့် လုပ်ငန်းစဉ်အားလုံးကို လုပ်ပါ။ သဘာဝတရားလမ်းစဉ်မှ သွေဖည်မသွားပါ] ထို့ကြောင့် ပရောဖက်ပြုချက်ကဲ့သို့ အရာမျိုးမရှိဟု ရိုးရိုးရှင်းရှင်း မယူဆဘဲ ၎င်းသည် ရှေးကမ္ဘာရှိ လူများ၏ စိတ်ကူးယဉ်မှုဖြစ်ပြီး ယနေ့ခေတ်တွင် မရှိသောကြောင့် ၎င်းသည် ယခင်က မရှိခဲ့သကဲ့သို့၊ နတ်ဆိုးတွေ၊ နတ်ဆိုးတွေ၊ စာလုံးပေါင်းတွေ၊ ရာသီရုပ်တွေနဲ့ တခြားလှပတဲ့ ဒဏ္ဍာရီတွေ ရှိတယ်လို့ မြင်ယောင်ကြည့်တဲ့အခါ၊ ပရောဖက်ပြုချက်တစ်ခုရှိတယ်၊ အခြေခံအားဖြင့် မင်းရဲ့စကားတွေကို ငါပြောနေတယ်၊ ​​ငါက ပရောဖက်ပြုချက်ကို ယုံစရာအကြောင်းမရှိဘူး။ ဒီနေ့တော့ ရှိပြီးသားလို့ မမြင်ပါဘူး။ ခ ပရောဖက်ပြုချက်အားလုံးကို သဘာဝအတိုင်း ရှင်းပြနိုင်ပါတယ်။ တတိယ။ တစ်ချိန်က လူတွေမှာ ထူးထူးခြားခြား ကောင်းကောင်း မခွဲခြားတတ်ဘဲ ပရောဖက်ပြုပြီး စိတ်ကူးယဉ်တာကို တီထွင်ခဲ့တာလို့ ယုံကြည်ဖို့ ကျိုးကြောင်းဆီလျော်တဲ့ အခြေခံတစ်ခုရှိတယ်။
တစ် ပထမ၊ ကျွန်ုပ်၏ဂုဏ်အသရေကို ယုံကြည်သည် သို့မဟုတ် မယုံကြည်သည်ကို ကျွန်ုပ်မသိပါ၊ ကျွန်ုပ်သည် ကျွန်ုပ်ယုံကြည်သောအရာနှင့် ပို၍နီးစပ်ပါသည် (သို့မဟုတ်) မယုံကြည်ပါ။ ငါယုံကြည်သောအရာနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ကမ္ဘာတွင် မည်သည့်အံ့ဖွယ်အမှုများဖြစ်ပျက်နေသည်ဆိုသည့် အရိပ်အယောင်မရှိသည်မှာ အမှန်ပင်။ တစ်ချို့တွေ ရှိကောင်းရှိနိုင်ပေမယ့် မမြင်ရပါဘူး။ ညွှန်ကြားထားသည့်လက် (ဖန်ဆင်းရှင်) တည်ရှိမှုကို တွန်းအားပေးသည့် အငြင်းအခုံတစ်ခုရှိသောကြောင့် ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်နှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်၏ငြင်းခုံပုံနှင့် ဆင်တူသည်မဟုတ်ပေ။
ထို့အပြင်၊ အံ့ဖွယ်အမှုတစ်ခုသည် လောက၌ ဘုရားသခင်၏ ကြားဝင်ဆောင်ရွက်ပေးမှုအဖြစ် အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုသည်၊ ဆိုလိုသည်မှာ ၎င်း၏ပုံမှန်လမ်းစဉ်မှ ပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်သည်။ ဥပဒေများအတိုင်း ရွှေ့ခြင်းသည် X ဖြစ်သင့်ပြီး ဘုရားသခင်က Y ဟု ပြောင်းလဲသည်ဟု Hoy က ဆိုသည်။ ဖြစ်ပျက်နေသည့်အရာအတွက် သဘာဝကျသော ရှင်းလင်းချက်တစ်ခုရှိနေသ၍ စွက်ဖက်မှုရှိသည်ဟု အဘယ်ကြောင့်ယူဆရမည်ကို ကျွန်ုပ်မတွေ့ပါ။ သဘာဝကျတဲ့ အမူအကျင့်ကို ဖန်တီးပေးတဲ့သူဆိုရင် အဲဒါကို ပြောတာပါ။ ဤသည်မှာ ဥပဒေများဖန်တီးခြင်းဖြစ်သည်။
ခ ကျွန်ုပ်၏စာအုပ်များတွင် အရင်းအမြစ်အမျိုးမျိုးရှိ သဘာဝလွန်ဖော်ပြချက်များအကြောင်း ကျွန်ုပ်၏ကိုးကားချက်ကို အသေးစိတ်ဖော်ပြပါမည်။ ယေဘူယျအားဖြင့်၊ အတိတ်၌ ဘုရားသခင်သည် ပို၍ကြားဝင်ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့သည် (ထိုအခါတွင် အံ့ဖွယ်အမှုများရှိခဲ့ပြီး ပရောဖက်ပြုချက်ရှိခဲ့သည်) ဖြစ်နိုင်သည်။ ယနေ့တွင် ဘုရားသခင်သည် ထိုသို့သောပါဝင်ပတ်သက်မှု၏ အရိပ်အယောင်ကို ကျွန်ုပ်မတွေ့ပါ။
တတိယ။ ဒီမှာ နားမလည်ဘူး။ ကြီးကြပ်မှုကင်းမဲ့မှုတွင် ပါဝင်ပတ်သက်မှု မရှိခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ကော။ လူသားများ၏ လုပ်ရပ်များကို အာရုံစူးစိုက်မှု မရှိဘဲ စွက်ဖက်မှု မရှိပါ (အနည်းဆုံး မကြာခဏ မဟုတ်ပါ)။
Torah နှင့် mitzvah တွင် ကတိကဝတ်သည် ဆုငွေနှင့် ပြစ်ဒဏ်အတွက် လိမ်ညာခြင်းမဟုတ်ဘဲ Gd အမိန့်ပေးသည့်တာဝန်ကို ထမ်းဆောင်ရန် တာဝန်ဖြစ်သည်။ Maimonides သည် အလုပ်သမားများ၏ ဆုကြေးမျှော်လင့်ချက်နှင့် ပြစ်ဒဏ်ခံရမည်ကို ကြောက်ရွံ့ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ၎င်း၏မှတ်ချက်တွင် ရေးသားထားပြီးဖြစ်သည်။ UAV နဲ့ပတ်သက်တဲ့ ဒီယုံကြည်ချက်တွေကို ဘာကြောင့် ဖန်တီးခဲ့တာလဲ ဖြစ်နိုင်တယ်။ ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး သူတို့က မှန်ကန်ပေမယ့် ကျွန်တော်မသိဘူး။
အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များ၊ မည်သူပါဝင်မည်နည်း ဟူသော မေးခွန်းသည် အမှန်တရားကိစ္စနှင့် မသက်ဆိုင်ပါ။ မေးခွန်းက ငါမှန်သလား၊ ငါရေပန်းစားမှာလား။ ငါသည် သန့်ရှင်းသော မုသားကို ဆန့်ကျင်သည် (မုသာစကားကို ဘုရားသခင်၏ အမှုတော်၌ လူများ ပိုမိုတွယ်ကပ်စေရန်)။ Maimonides'ဆင်ပုံဥပမာကြောင့်သာဆိုလျှင်၊ အလုပ်တွင်ပါဝင်သူများသည် အမှားအယွင်းကိုအခြေခံ၍ လုပ်ဆောင်သောကြောင့် ၎င်းတို့သည် မှားယွင်းသောဘုရားသခင်အတွက် လုပ်ဆောင်နေပြီး ၎င်းတို့၏ပူးပေါင်းခြင်းသည် တန်ဖိုးအနည်းငယ်သာရှိသည်။
အစ္စရေးနိုင်ငံ၏ ဥပဒေများနှင့် ဆက်စပ်မှုကား အဘယ်နည်း။ စောင့်ရှောက်သောသူသည် သာသနာ့တာဝန်မှ နှုတ်ထွက်မည်လော။ ဖီဖာ (ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်) ရဲ့ စည်းမျဉ်းတွေကို ဘာကြောင့် မပြောတာလဲ။
ဃ။ ဒါကိုလည်း ကျွန်တော့်စာအုပ်ထဲမှာ ရှင်းပြပါမယ်။ ဤအရာအချို့ကို အမှန်တရားနှင့် မတည်မငြိမ်သောစာအုပ်များတွင်လည်း ဆွေးနွေးထားသည် (တစ်နေ့၏သက်သေအငြင်းအခုံတွင်)။ ဒီနေရာမှာ အတိုချုံးရှင်းပြပါမယ်။ သဘာဝ၏နိယာမများသည် တစ်ချိန်လုံးတူညီသောနည်းလမ်းအတိုင်း လုပ်ဆောင်နေသော်လည်း လူသားများသည် ပြောင်းလဲသွားကြသည်။ ပြီးတော့ ဒီနေ့ သူတို့ တွေးဖူးတဲ့ အရာကို တွေးနေတာလား။ ဒီနေ့ တစ်ချိန်က သူတို့ဘာလုပ်ခဲ့ကြသလဲ။ ဒီနေ့ တစ်ချိန်က ဘာဝတ်ခဲ့လဲ။ သို့ဆိုလျှင် ဘုရားသခင်၏ အမူအကျင့် မပြောင်းလဲဟု အဘယ်ကြောင့် ယူဆသနည်း။ ငါဆုံးဖြတ်ရမယ်ဆိုရင် အဲဒါကို သက်မဲ့သဘာဝနဲ့ မနှိုင်းယှဉ်ဘဲ လူသားတွေနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ဖို့ ပိုကောင်းပါတယ်။ တစ်ချိန်လုံး အတူတူ ပြုမူနေမည်ဟု ယူဆစရာ အကြောင်းမရှိပါ။ ထို့ကြောင့် သူသည် ဤလောကနှင့် ဝေးရာသို့ ဖြည်းဖြည်းချင်း ထွက်ခွာရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့လျှင် ၎င်းသည် ထူးဆန်းသော သို့မဟုတ် နားမလည်နိုင်စရာ တစ်စုံတစ်ရာအဖြစ် ကျွန်ုပ် မမြင်ပါ။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေနဲ့၊ ဘာကြောင့် ဒီလိုဖြစ်ရတာလဲဆိုတာကို ကျွန်တော့်မှာ အယူအဆတစ်ခုတောင်ရှိတယ်။ ကြီးပြင်းလာတဲ့အခါ သူ့အဖေက သူ့ကို အထီးကျန်ဆန်ပြီး လွတ်လွတ်လပ်လပ် ပြေးထွက်သွားတဲ့ ကလေးတစ်ယောက်လိုပါပဲ။ ငါတို့အပေါ်ထားတဲ့ ဘုရားသခင်ရဲ့သဘောထားက ဒီလိုပါပဲ။ သူ၏ ထွက်ခွာမှုသည် ကျွန်ုပ်တို့နှင့် ရင်းနှီးသည့်အတိုင်း မျိုးဆက်များ ဆုတ်ယုတ်ခြင်းမဟုတ်၊ မျိုးဆက်များ ကြီးထွားခြင်း (ရင့်ကျက်ခြင်း) ဖြစ်သည်။ ယနေ့ခေတ်တွင် မြို့တော်အတွက် ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးရှိနေကြောင်း အံ့ဖွယ်အမှုများမရှိဘဲ နားလည်နိုင်နေပြီဖြစ်သည်။ ပုံသေဥပဒေများဖြင့် အုပ်ချုပ်သောကမ္ဘာသည် ဖန်ဆင်းရှင်အား ရူးသွပ်သောကမ္ဘာထက် များစွာပို၍ သက်သေခံကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့ နားလည်နိုင်လောက်အောင် အတွေးအခေါ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ယခု သင်သည် အံ့ဖွယ်အမှုများ မလိုအပ်တော့ပါ။ အနည်းဆုံးတော့ ငါတို့မျှော်လင့်ထားတဲ့အတိုင်း လူကြီးတွေလို သဘောထားကြီးကြီးနဲ့ တွေးနေမယ်ဆိုရင်။ ကလေးဆန်သော တွေးခေါ်မှုရှိသော အခြားသူများမှာ အမှန်ပင်ရှိသော်လည်း ၎င်းတို့ထံမှ ကြီးပြင်းလာရန် မျှော်လင့်ဖွယ်ရှိသည်။
ဤတုံ့ပြန်မှုအပြီးတွင် သင်သည် "ယခင်က ဘုရားသခင်သည် ပိုမိုစွက်ဖက်ခဲ့သည်" ဟု သင်ပြောခဲ့သည်မှာ သေချာပါသည်။ သို့ရာတွင် တိုရာ၌ မျိုးဆက်ပေါင်းများစွာ ကြားဝင်စွက်ဖက်ခြင်းအကြောင်းပြောသော ကျမ်းပိုဒ်များရှိပါသည်။ (အချိန်အခါအလိုက် သင့်ပြည်ကို မိုးရွာစေကာ အချိန်တန်လျှင် မိုးရွာစေသည် စသည်ဖြင့်)။ ဘုရားသခင် (တစ်ချိန်ချိန်တွင် အဆက်အသွယ်ဖြတ်တော့မည်ဟု သိသာထင်ရှားသော) ဘုရားသခင်သည် တစ်ချိန်ချိန်တွင် ဖြည့်ဆည်းပေးမည့်သူအား ရပ်တန့်ရန် ရည်ရွယ်ထားသည့် "ဆုလာဘ်" ဆိုင်ရာ ကတိများကို ရေးခဲ့သည်ကို မည်သို့ဆိုနိုင်သနည်း။ အမှန်တော့ မိဘက သူ့ကလေးကို သကြားလုံးနဲ့ လဲလှယ်ပြီး အကျင့်ကောင်းနဲ့ ကတိပေးရင် ကလေးကြီးပြင်းလာရင်တောင် မိဘက သူ့ကတိကို စောင့်ထိန်းဖို့ မျှော်လင့်တယ် မဟုတ်လား။ လိင်ဆက်ဆံတာကို ရပ်ချင်ရင် အနည်းဆုံးတော့ ဘာကြောင့် (ငါတို့ ကြီးပြင်းလာတာလဲ စသဖြင့်) ရှင်းပြသင့်ပါတယ်။
Torah တွင်၎င်းသည် ပရောဖက်များ၊ ပရောဖက်ပြုချက်များနှင့် အံ့ဖွယ်အမှုများအကြောင်းပါရှိပြီး ၎င်းတို့သည်လည်း ပျောက်ကွယ်သွားခဲ့သည်။ ဗိမာန်တော်နှင့် ယဇ်ပူဇော်မှုများလည်း ပျောက်ကွယ်သွားခဲ့သည်။ ကျွန်စနစ်လည်း ပိုများလာတယ်။ တခါတရံ Torah သည် Torah ကိုပေးဆောင်သည့်အချိန်မှလူများကိုစကားပြောပြီး Torah မှမဖော်ပြသောအပြောင်းအလဲများရှိသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရှိခဲ့သည်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတာကို ခန့်မှန်းနိုင်ပေမယ့် ဒါတွေက အဖြစ်မှန်တွေပါ။
ပရောဖက်များ၊ ပရောဖက်ပြုချက်များ၊ အံ့ဖွယ်အမှုများ၊ ဗိမာန်တော်၊ ယဇ်ပူဇော်ခြင်း၊ ကျွန်ပြုခြင်းစသည်ဖြင့်၊ ဤအရာများသည် မျိုးဆက်များဆက်ခံမည့် ကတိတော်မရှိသောအရာများဖြစ်သည်။ တစ်ချိန်ချိန်တွင် ဖြစ်ပျက်ခဲ့သော ဥပမာများသာ ရှိသော်လည်း အနာဂတ်တွင်လည်း ၎င်းတို့ကို အဘယ်ကြောင့် မျှော်လင့်ရမည်နည်း။ သို့သော် ဆုလာဘ်နှင့် ပြစ်ဒဏ်နှင့်ပတ်သက်၍ Gd သည် Torah တွင် မျိုးဆက်များအတွက် မိတ်ဆက်မှုနှင့် ဆုလာဘ်အချို့ကြား ဆက်နွှယ်မှုရှိကြောင်း Gd က အတိအလင်း ရေးထားသည်၊ ထို့ကြောင့် ဤဆက်နွှယ်မှုကို အနာဂတ်တွင် တည်ရှိစေရန် မျှော်လင့်ရန် အကြောင်းပြချက်ကောင်းတစ်ခု ရှိသည်၊ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့ ကောက်ချက်ချပါက၊ ရှိမနေဘူး အဲဒါဟာ Torah အမှန်တရားတွေရဲ့ ပြင်းထန်တဲ့ မေးခွန်းတစ်ခုပဲ မဟုတ်လား။ ဤမေးခွန်းအတွက် ကျွန်တော်စဉ်းစားနိုင်သော တစ်ခုတည်းသော ရှင်းလင်းချက်မှာ "Alma Likha ကျွန်းပေါ်ရှိ mitzvah ဆုလာဘ်" နှင့် "And I give your rains in due season" ကဲ့သို့သော ရိုးရှင်းသော ကျမ်းပိုဒ်များကို ဖယ်ရှားရမည်ဖြစ်ပါသည်။ နောင်ကမ္ဘာတွင် အခကြေးငွေအတွက် ပုံဥပမာအဖြစ် ၎င်းတို့ကို ပေးသည်။ ဒါပေမဲ့ ကျမ်းစာက ရိုးရှင်းလွန်းတာကြောင့် ခက်ခဲနေပါသေးတယ်။
ကျွန်တော်နားမလည်ပါဘူး။ ပရောဖက်ပြုချက်ကိစ္စတွင် ပညတ်တော်များစွာပါဝင်သည်။ mitzvos သည် မျိုးဆက်များအတွက် မဖြစ်သင့်ပါ။ ဘုရားသခင်၏ အလုပ်၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းမှာ ကျွန်ုပ်တို့အတွက် တမန်တော်မြတ်နှင့် သူ၏ ဝိညာဉ်ရေးဆိုင်ရာ ဦးဆောင်မှုကို နားထောင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဤသည်မှာ ကျွန်ုပ်တို့တွင် ပရောဖက်တစ်ပါးရှိခဲ့သော ကိစ္စမဟုတ်ပါ။ Torah က ကတိပေးခဲ့ပြီး သူ့အသံကို ကြိုးစားနားထောင်ရန်ပင် အမိန့်ပေးခဲ့သည်။ ပရောဖက်သည် စစ်တိုက်ခြင်း၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုလည်းဖြစ်သည်။
ပညတ်တော်တို့ကို စောင့်ရှောက်လျှင် မိုးရွာစေမည်ဟူသော ကတိတော်များကို မိုးရွာသည့်အချိန်ကာလနှင့် သက်ဆိုင်သော ကတိများအဖြစ် အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုကြသည်။ သူ့အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ လိုက်နာစောင့်ထိန်းရမယ့် အနေ အထားရှိတယ်။ ငါတို့ကြီးပြင်းလာလို့ ငါတို့ကို ပေးလိုက်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ထားပြီး အခုမှစပြီး မသက်ဆိုင်ဘူးဆိုတာ ထင်ရှားတယ်။ သူသည် ကျွန်ုပ်တို့အား သူ၏မူဝါဒကို ရိုးရိုးရှင်းရှင်းရှင်းပြသည်- တစ်စုံတစ်ခုပေးသောအခါ ပညတ်တော်များကို လိုက်နာရန်ဖြစ်သည်။
ပရောဖက်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ တရားဟောရာကျမ်း၌ ရေးထားသည်– “သင်တို့တွင် ပရောဖက်တစ်ပါး ပေါ်ထွန်းလာမည်” ဟု ဤနေရာတွင် ပြန်လည်ထူထောင်ရန် ကတိတော်မရှိပါ။ ဆိုလိုသည်မှာ၊ ပရောဖက်တစ်ဦးအား စစ်ဆေးခြင်းနှင့် ပတ်သက်သည့် ပညတ်တော်များအားလုံးသည် ဖြစ်တည်မှုဆိုင်ရာ ပညတ်များဖြစ်သည်- အကယ်၍ ပရောဖက်တစ်ဦးကို ထူထောင်ရမည်ဆိုပါက ထိုအတိုင်းဖြစ်ပါစေ။ အတောင်လေးခုပါသော ၀တ်စုံကို ၀တ်ဆင်ပါက မြိတ်တွင် မြိတ်ကို ၀တ်ထားရမည်ဖြစ်ပါသည်။ မစ်ဇဝသ်သည် ဘယ်သောအခါမှ မတည်မြဲသော်လည်း အမြဲတမ်း ရှင်သန်နေမည်မဟုတ်ပေ။ ဒါပေမယ့် ဆုငွေနဲ့ ပြစ်ဒဏ်အကြောင်းပြောထားတဲ့ ကျမ်းပိုဒ်တွေရဲ့ ထူးခြားချက်ကတော့ A လုပ်ရင် ဘုရားသခင်က B လုပ်လိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ ဆက်စပ်မှုရှိပါတယ်။ ဆက်ဆံရေးကိုယ်နှိုက်သည် မည်သည့်အခြေအနေမျိုးတွင်မဆို သတ်မှတ်ချက်မရှိပါ။ ချိတ်ဆက်မှု အမြဲရှိနေပုံရသည်။ ဤချိတ်ဆက်မှု မရှိဟု ကျွန်ုပ်တို့ နိဂုံးချုပ်လိုက်သည်နှင့်၊ ဤနေရာတွင် Torah နှင့် ကွဲလွဲနေပုံရသည်။ Torah တွင်ပါရှိသော တောင်းဆိုချက်တိုင်းသည် မျိုးဆက်များအတွက် မဖြစ်မနေမှန်ကန်ကြောင်း သင် စောဒကတက်နိုင်ပါသည်။ သို့သော် ပညတ်တော်များကိုယ်တိုင်လည်း ပြောင်းလဲနိုင်သည်ဟု သူပြောရတော့မည်။
ဤချိတ်ဆက်မှုကို လက်တွေ့တွင် မမြင်နိုင်သော်လည်း လျှို့ဝှက်နည်းလမ်း (မျက်နှာလွှဲ) ဖြင့် ရှိနေသည်ဟု အဘယ်ကြောင့် မပြောသနည်း။
ပရောဖက်အတုအယောင်နှင့် ပတ်သက်သော ကျမ်းပိုဒ်များကို သင်သည် ယူဆောင်လာခဲ့သည်။ အမှန်မှာ၊ ပရောဖက်နှင့်စပ်လျဉ်းသော ကျမ်းပိုဒ်များ (တရားဟောရာ)၊
ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ Mkrbc Mahic Cmni Ikim မင်းအတွက် Ikok မင်းရဲ့နတ်ဘုရားမ Tsmaon: Ccl Asr Salt Mam Ikok မင်းရဲ့ဘုရားသခင် Bhrb က Asf Lsma At Cole Ikok Alhi နဲ့ တပ်မဟာ Hgdlh Hzat Arah တစ်​ခု​တော့မဟုတ်​ဘူး ၊ La Amot က Hkhl ​ပေါ်ထွက်​သွားတယ်​။ နတ်ဘုရားမ Hitibo Asr Dbro- ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ Akim Lhm Mkrb Ahihm And Neuvena ဖြစ်နိုင်သည်- ဗိုလ်ချုပ်ကျွန်းသား၊ ဘုရားသခင်သည် wheragram- " Shavua Jacka ကျွန်း
စကားမစပ်၊ အတိအကျ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်သည် ဖြစ်တည်မှု mitzvah မဟုတ်ဘဲ အခြေအနေအရ အပြုသဘောဆောင်သော mitzvah (မြိတ်ကဲ့သို့) ဖြစ်သည်။ အပြုသဘောဆောင်သော mitzvah အားလုံးနီးပါးသည် အခြေအနေအရဖြစ်သည်။ ဖြစ်တည်မှု မစ်ဇဝသ်ဟူသည် မပယ်ဖျက်နိုင်ဘဲ သိမ်းဆည်းထားရုံသာဖြစ်သည်။ ဤ mitzvot ကို ရုတ်သိမ်း နိုင် သည် ( အခြေအနေ များ ရှိ လျှင် - အဝတ် နှင့် အတောင် များ ကို ၀တ် ပြီး mitzvah ကို မလုပ် ပါ နှင့် ) ။
နောက်ဆုံးမေးခွန်းအတွက်၊ ဘုရားသခင်သည် အဆက်မပြတ် ကြားဝင်စွက်ဖက်သည်ဟု သေချာပေါက်ပြောနိုင်သော်လည်း ကျွန်ုပ်တို့ စစ်ဆေးသောအခါတွင် ကိုယ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့ကို ရှုပ်ထွေးစေမည့် တွင်းထဲသို့ ပြေးဝင်လာပါသည်။ အဲဒါက ငါ့အတွက် မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ ထင်ပါတယ်။ လောကကြီးမှာ ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ အရာတွေကို ကြည့်တိုင်း သဘာဝနဲ့ သာမာန် ရှင်းပြချက်တွေ ရှိတယ်။ သဘာဝနိယာမများသည် အလုပ်ဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့ကို ဓာတ်ခွဲခန်းတွင် စမ်းသပ်သောအခါ ဘာဖြစ်မည်ကို မျှော်လင့်ပါသည်။ ဤနေရာတွင် ထူးဆန်းသော ပုန်းလျှိုးကွယ်လျှိုးရှာသည့် ဂိမ်းတစ်ခုရှိနေသည်ဟု ယူဆရန် အကြောင်းမရှိပါ။ ဤသည်မှာ သက်သေမဟုတ်သော်လည်း သာမာန်သဘောဖြင့် ထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းဖြစ်သည်။ ရွေ့လျားနေသော ခန္ဓာကိုယ်ကို မြင်သောအခါ၊ ကျွန်ုပ်၏ ယူဆချက်မှာ ၎င်းကို တွန်းအားပေးသည့် အရာဖြစ်ပြီး ဘုရားသခင်က ၎င်းအား တွန်းအားပေးရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ခြင်း မဟုတ်ပေ။ ဒါ့အပြင် စွမ်းအားမဲ့ လှုပ်ရှားနေတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်တွေ ရှိတယ်လို့လည်း ကျွန်တော် ယူဆတယ်။ ဤသည်မှာ လက်ခံထားသော သိပ္ပံနည်းကျ အယူအဆဖြစ်ပြီး ၎င်းသည် ကျွန်ုပ်အတွက် လုံးဝကျိုးကြောင်းဆီလျော်ပြီး အလုပ်ဖြစ်ပုံရသည်။
ဤအခန်းငယ်များသည် ပရောဖက်ကို မည်သည့်အချိန်တွင် တည်စေမည်၊ သို့မဟုတ် မည်မျှမကြာခဏဖြစ်သည်ကို ဖော်ပြထားသည်မဟုတ်ပေ။ ယေဘူယျအားဖြင့်၊ အမျိုးအစား၏ တောင်းဆိုချက်- ဘုရားသခင်သည် X ကို ပြုလုပ်မည်ဆိုပါက ငြင်းဆန်နိုင်သော အရေးဆိုမှုများ မဟုတ်ပါ (တောင်းဆိုမှုအတွက် အချိန်ဘောင်မသတ်မှတ်ထားသောကြောင့်)။ သို့သော် အမျိုးအစား၏ တောင်းဆိုချက်- X ဖြစ်ခဲ့လျှင် ဘုရားသခင်သည် Y ကို ဖြစ်ပေါ်စေမည် ဖြစ်သောကြောင့် X ဖြစ်ပျက်သည်နှင့် Y သည် တိုင်းတာနိုင်သော အကြောင်းပြချက်ဖြင့် ငြင်းဆန်နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် ဒုတိယအငြင်းအခုံကိုဖြေရှင်းရန် ရွေးချယ်စရာသုံးခုရှိသည်။ ဒါမှမဟုတ် X က တကယ်ဖြစ်မလာခဲ့ဘူးလို့ ပြောတာ။ ဒါမှမဟုတ် Y ကို တိုင်းတာလို့ မရဘူးလို့ ပြောပါ။ သို့တည်းမဟုတ် အဆိုကို ငြင်းဆိုထားသည်ဟုဆိုရမည်။ သို့ရာတွင် ၎င်းကို ငြင်းဆိုပါက၊ ယေဘုယျအားဖြင့် Torah မှ တောင်းဆိုချက်များ၏ မှန်ကန်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ ရိုးရှင်းသောမေးခွန်းမဟုတ်ပါ။
ဤနေရာတွင် သိပ္ပံပညာအရ ငြင်းဆိုနိုင်သော အရာမရှိပါ။ မိုးရွာရန် ပညတ်တော်မည်မျှ ကျင့်ရမည်နည်း။ ဤပညတ်တော်တို့ကို လူဘယ်နှစ်ယောက် ကျင့်သင့်သနည်း။ မိုးဘယ်လောက်ကျမလဲ၊ ဘယ်လောက်ကြာမလဲ ဤအရာသည် တမန်တော်မြတ်၏ ကိစ္စကဲ့သို့ပင် ငြင်းဆန်နိုင်သော ကိစ္စဖြစ်သည်။
ကျွန်တော်ရေးထားသလိုပဲ၊ ဘုရားသခင်က ကြားဝင်မစွက်ဖက်ဘူးလို့ ကျွန်တော့်ရဲ့ထင်မြင်ချက်က သိပ္ပံနည်းကျ ချေပချက်ရဲ့ ရလဒ်မဟုတ်ပေမယ့် ယေဘူယျ အထင်ကြီးမှုတစ်ခု (ဝင်ရောက်စွက်ဖက်ပုံမပေါ်ပါဘူး)။ အမှန်မှာ ကျွန်ုပ်တို့ ကြုံတွေ့နေရသော အခြေအနေတွင် ဘုရားသခင်သည် စွက်ဖက်ခြင်း မရှိကြောင်းနှင့် ယုံကြည်သူ အများအပြားက ထိုကဲ့သို့ ထင်မြင်ယူဆနေခြင်း ဖြစ်သည်။ mitzvos လုပ်တဲ့အခါ မိုးရွာလို့ ဆက်စပ်မှုမရှိဘူးလို့ ထင်ကြတယ်။ အမှန်အကန်အခြေအနေသည် ဤနေရာ၌ မည်သည့်အရာကိုမျှ အတည်ပြုခြင်း သို့မဟုတ် ချေပခြင်းမဟုတ်ကြောင်း သင့်မျက်လုံးများက မြင်သည်။
အဲဒါက သိပ္ပံနည်းကျ ငြင်းလို့မရနိုင်ဘူးဆိုတာ နားလည်ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် ယေဘူယျ အထင်ကြီးလောက်စရာတောင်မှ ပြန်ငြင်းဖို့ လုံလောက်ပါတယ် (စကားလုံးရဲ့ ယုတ္တိ-သင်္ချာသဘောအရ မဟုတ်ပါ)။
တမန်တော်မြတ်(ဆွ)၏ သာသနာတော်နှင့် မိုးရွာသွန်းမှုအကြား ခြားနားချက်မှာ ပညတ်တော်နှင့် ဆုလဒ်ကြား ဆက်နွှယ်မှုသည် (သာမန်သဘောအရ) အတော်လေး ချက်ခြင်း ဖြစ်သင့်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ၊ ဣသရေလလူမျိုးများသည် ပညတ်တော်များနှင့်အညီ ပြုမူပါက၊ ဘုရားသခင်ထံမှ တုံ့ပြန်မှုသည် သင့်လျော်သောအချိန်ကာလတစ်ခုအတွင်း ၎င်းတို့ရောက်ရှိလာလိမ့်မည် (နှစ်ပေါင်း 700 နောက်ပိုင်းတွင် လအနည်းငယ်အတွင်း ဟုဆိုသည်)။ သို့သော် တမန်တော်မြတ်၏ကိစ္စတွင်၊ ဘုရားသခင်သည် အနှစ် ၃၀၀၀ တွင်တစ်ကြိမ် တမန်တော်တစ်ပါးစေလွှတ်ခြင်းကို တားမြစ်ပိတ်ပင်ထားခြင်းမရှိပေ။ ဤနေရာတွင် စိတ်ကူးယဉ်နိုင်သော "ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သော ကာလ" မရှိပါ။
ငါနားလည်ဖို့ကြိုးစားနေတာက မင်းရဲ့ခံယူချက်နဲ့ ကျမ်းချက်တွေကထွက်လာတဲ့ ရှင်းလင်းတဲ့သတင်းစကားကြားက ကွဲလွဲမှုကို ဘယ်လိုပေါင်းကူးထားတာလဲ။ စောစောက သင်ဤကဲ့သို့သောအဖြေကိုရေးခဲ့သည်- "သူသည် ကျွန်ုပ်တို့အား သူ၏မူဝါဒကို ရိုးရိုးရှင်းရှင်းရှင်းပြသည်- ကျွန်ုပ်တစ်ခုခုပေးသောအခါ ၎င်းသည် mitzvos ကိုလိုက်နာရန်ဖြစ်သည်။" အဲဒီရှင်းပြချက်ကို ကျွန်တော်လက်ခံနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မင်းရဲ့ထင်မြင်ချက်အတိုင်းဆိုရင်တောင်မှ ဒီမူဝါဒကို အကောင်အထည်မဖော်ရင် ပြောရခက်တယ်။
သူက ကွပ်မျက်တယ်။ လောကီသားတို့အား တစ်စုံတစ်ခုပေးသောအခါ ပညတ်ကို လိုက်နာခြင်းဖြစ်၏။ ကာမဂုဏ်ကို မပေးဘူး၊ ရှေးယခင်က စေလွှတ်တော်မူသော ပရောဖက်တို့ကို ယခုမစေလွှတ်။ ဤသည်မှာ ပေးကမ်းခြင်းနှင့် ဆုတောင်းခြင်းကြား ဆက်နွှယ်မှုမဟုတ်သော်လည်း ပေးကမ်းခြင်းကိုယ်တိုင် ပြောင်းလဲသွားသော မူဝါဒဖြစ်သည်။
ထို့အပြင် Fook Hezi သည် လက်ရှိအခြေအနေတွင် သူဝင်ရောက်စွက်ဖက်သည်ဖြစ်စေ မဝင်သည်ဖြစ်စေ ငြင်းခုံမှုတစ်ခု ပေါ်ပေါက်လာကြောင်းကို ကျွန်တော်ရေးသားခဲ့သလို၊ ထို့ကြောင့် ခံယူချက်နှင့် အသိတရားကြောင့်ပင် မဟုတ်ပဲ အမှန်တရားကိုယ်တိုင်က ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုကို ပြသသည်ဟု မည်သူမျှ မစွပ်စွဲနိုင်ပေ။ ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ် မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ ဤထုတ်ပြန်ချက်၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ အဘယ်နည်းဟု မေးနိုင်ပါသည်။ မျက်မြင်ကိုယ်တွေ့ မဆန်းစစ်သင့်သော ယေဘူယျထုတ်ပြန်ချက်ဖြစ်နိုင်သည်၊ ၎င်းသည် mitzvos ၏အရေးပါမှုကိုပြသသည်။ ပညတ်တော်များ၏ အရေးပါမှုသည် ယနေ့တိုင် ရှိနေသေးသည်။ အဖြစ်မှန်ပြောင်းလဲသော်လည်း သင်ခန်းစာသည် ထာဝရဖြစ်သည်။
29 Elul 09 - 2016/15/04 at XNUMX:XNUMX
Shalom VeYesha အရှင်ဘုရား အရှင်ဘုရား မိက္ခေလ၊
Mister Tsitsro နဲ့ စလိုက်ရအောင်၊ ဒါဆို Torah အတွက် Derech Eretz Kedma ရဲ့ အဓိပ္ပါယ်က အသစ်အဆန်းမဟုတ်ပါဘူး၊ အဓိပ္ပါယ်မဟုတ်ရင် ဒီနေရာမှာ ပုန်ကန်မှုတစ်မျိုးပဲ ရှိပါတယ် [Gd ရဲ့ ကျွန်ဖြစ်ခြင်းမှတပါး ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး ရှိပါတယ်]
အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် စည်းမျဉ်းများသည် နိုင်ငံရေးဥပဒေများသည် [လူ့] ဉာဏ်အလင်းရရှိပြီး halakhic ဥပဒေများသည် စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်ရုံမျှမက သနားစရာကောင်းသည်ဟု ခံစားရခြင်းမှလွဲ၍ စည်းမျဉ်းများသည် ဟာလခ သို့မဟုတ် နိုင်ငံရေးဆိုလျှင် အဘယ်အရာက အရေးကြီးသနည်း။
Ponivez ၏ ရဗ္ဗိ နှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဤ ပန်ကြားချက်သည် ဟလဂ် ဖြစ်သောကြောင့် ၎င်း၏ ပြောကြားချက် မဟုတ်သည် မှာ ဟာလဟာဟ် ကြောင့် ချီးမွမ်းခြင်း မပြုကြောင်း ထင်ရှားပြီး သူတောင်းစားသည်လည်း တူညီသော အကြောင်းပြချက်ဖြင့် မပြောဘဲ၊
ဟယ်လဟာ မဟုတ်ရင် မပြောသလို ဟာလခဟာ ဆုံးဖြတ်ထားသလိုပဲ၊
ထုတ်ဝေမှုနှင့်ပတ်သက်၍ အစ္စရေးတွင် ကြီးကြပ်မှုကင်းမဲ့နေပြန်သည်၊
“အဖြေမရသောဆုတောင်းချက်” သည် ဣသရေလလူတို့ကို ဘုရားသခင်ထံ ပိုနီးကပ်စေပြီး ကိုယ်တော်၏ဖန်ဆင်းရှင်နှင့် ချိတ်ဆက်ရန် အလွန်နီးကပ်နေရမည်ဖြစ်သည်။
အဲဒီလို ဒေါသကြောင့် ငိုရတယ်၊ မင်းက ပညာရှိပဲ၊ မင်းရဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက် အတွေ့အကြုံကို ပြောပြ၊
ခံစားချက်တွေနဲ့ ငြင်းခုံမနေပါဘူး။ လူတိုင်းနှင့်သူတို့၏ခံစားချက်။
မင်းပြောသလိုပဲ (ဒါက မမှန်ဘူး) ဆိုရင်တောင် ဒီစည်းမျဉ်းက ဘာကိုထင်ဟပ်နေသေးလဲ။ ဒီယူဆချက်တွေကို အဲဒီထဲမှာ ထည့်သွင်းထားပါတယ်။
ပိုင်ရှင်မဲ့ထုတ်ဝေခြင်းသည် ၎င်းတို့လုပ်ဆောင်နေသည်ဟု ခံစားလာရသောကြောင့် အစဉ်အလာတစ်ခုလုံးကို စွန့်လွှတ်ထားသူများအတွက် များစွာအထောက်အကူဖြစ်စေပါသည်။ ဒါဇင်နဲ့ချီပြီးတွေ့တယ်။ လက်ခံထားသောအကြောင်းအရာကို လက်ခံရရှိသူများသည် ပုံမှန်မက်ဆေ့ချ်များတွင် ၎င်းတို့ကိုယ်သူတို့ ဆက်လက်လျှော့တွက်သွားမည်ဖြစ်သည်။ ကျွန်တော့် ခံစားချက်ကတော့ တစ်စုံတစ်ယောက်က တည့်တည့်တွေးတဲ့ သူတွေကိုတောင် ပြောပြဖို့ လိုတယ်။ ရည်ညွှန်းထိုက်တဲ့ ကဏ္ဍတစ်ခုလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ အမှန်တရားက အရေးမကြီးပါဘူး၊ ရွာကလူမိုက်တွေအတွက်သာ အရေးမကြီးပါဘူး၊ အမှန်တရားကို မထုတ်ပြန်ဖို့ သန့်ရှင်းတဲ့မုသားဝါဒက ငါတို့ရဲ့အကောင်းဆုံးသားတွေကို ဆုံးရှုံးစေပြီး ဒီလုကာစားတဲ့သူတွေနဲ့ အတူရှိနေစေတယ်။ ဒါက ကျွန်တော့်ရဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက် အတွေ့အကြုံပါ။ မင်းမေးတော့ ငါပြောလိုက်တယ်။
မင်းရဲ့အကြောက်တရားတွေကနေ အမှန်တရားကိုဆန့်ကျင်တဲ့ရှေးဟောင်းရင်းမြစ်တွေကို တွယ်ကပ်ထားလို့၊ Yoma Set AB မှာ Gemara ကို ယူဆောင်လာဖို့ကလွဲလို့ ငါဘာမှမရှိပါဘူး။
Damar Rabbi Yehoshua Ben-Levi- ဘုန်းကြီးသောသရဖူကို ယခင်သရဖူကို ပြန်လည်ပြုပြင်ပေးသော Knesset အဖွဲ့ဝင်များကို အဘယ်ကြောင့်ခေါ်သနည်း။ Ata Moshe က Ata Jeremiah, Ata Jeremiah, Ata Moshe, က, Ata Jeremiah, သူ့ဗိမာန်တော်ရှိ Karkrin မှနိုင်ငံခြားသားများ, Aya ကသူ့ရဲ့ကြောက်မက်ဘွယ်သော? ဆိုးတယ်လို့ မပြောဘူး။ Ata Daniel ကပြောပါတယ်- နိုင်ငံခြားသားတွေက သူ့သားတွေ၊ Aya ရဲ့ သူရဲကောင်းတွေလို ကျွန်ခံနေကြပြီလား။ သူရဲကောင်းလို့ မပြောဘူး။ သူနှင့်အတူ သူမဟုတ်ကြောင်း၊ ယင်းအစား၊ ၎င်းမှာ သူ၏ ဗီဇကို အနိုင်ယူပြီး ဆိုးသွမ်းသူတို့ကို ရှည်လျားစေသည့် သူ၏ သူရဲကောင်းဆန်သော သူရဲကောင်းဆန်မှုပင် ဖြစ်သည်ဟု ဆိုကြသည်။ မြတ်စွာဘုရားကို ကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိဘဲ တိုင်းသူပြည်သားတို့၌ အမျိုးအနွယ် မည်ကဲ့သို့ တည်ရှိနိုင်သနည်း၊ Rabbanan Hichi သည် ကျွန်ုပ်၏ကျွန်ဖြစ်ပြီး Teknat Datkin Moshe ၏ အရေးကြီးဆုံးဖြစ်သည်။ အရှင်ဘုရား ဧလာဇာက- မြတ်စွာဘုရားသည် ဟုတ်မှန်ကြောင်းကို သိတော်မူသောကြောင့် မုသာကို မပြုကြကုန်။
ကျွန်ုပ်သည် ကျွန်ုပ်၏တောင်းဆိုချက်များကို သက်သေပြပြီး ၎င်းတို့အား အရင်းအမြစ်အမျိုးမျိုးမှ မဆွဲထုတ်ဘဲ Leibowitz (ကျွန်တော်နှင့် လုံးဝနီးပါးသဘောမတူသော) သို့မဟုတ် အခြားမည်သူမဆို။ သူတို့နှင့် Leibowitz အကြား တူညီမှုကို သင်တွေ့ရှိပါက ၎င်းသည် သင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်သည်၊ သို့သော် ၎င်းသည် ဆွေးနွေးမှုကိုယ်တိုင်နှင့် မသက်ဆိုင်ပါ။ သူတစ်ပါး၏ ဆောင်ပုဒ်အတိုင်း လောကအမြင်ကို ပုံဖော်ရန် တရားဟောသူတိုင်းသည် ထိုကဲ့သို့သော သဘောထားကြောင့် သူတစ်ပါးကို အပြစ်တင်မိသည်မှာ သနားစရာပင်။ Momo အတွက် disqualifier ။
အရှင်ဘုရား Michael Shavuot Tov
ဆိုလိုသည်မှာ ပေးကမ်းခြင်းနှင့် ဆုတောင်းခြင်းသည် မြင့်မြတ်သော မုသားအမျိုးအစားထဲတွင် ရှိသည်ဟု ကျွန်ုပ်မထင်ပါ၊
အမှန်အတိုင်းပြောခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ လူများမေးခြင်း သို့မဟုတ် တွန့်ဆုတ်ခြင်းတို့ကို လုံးဝသဘောတူသည် [ထိုအရာများစွာသည် လူသိရှင်ကြားနှင့် သီးသန့်ကြီးကြပ်မှုနှင့် ဆုတောင်းခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ လုံးဝတရားမ၀င်ကြောင်း ယုံကြည်သူအများစုသည် မျက်စိမှိတ်စောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့် လူတိုင်း၏ကိုယ်ပိုင်ကြီးကြပ်မှုကို အရင်းခံသည်ဟုခံစားရချိန်တွင်]
သီးသန့်ကြီးကြပ်မှုနှင့် ဆုတောင်းခြင်းသည် အမှန်တရားကိုပြောပြခြင်း သို့မဟုတ် ယင်း၏မရှိခြင်း သို့မဟုတ် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းလိုအပ်သောအရာများ၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်သည်ဟု ကျွန်ုပ်လုံးဝမထင်ပါ။
B] မည်သည့်နည်းဖြင့်မျှ အထောက်အကူမပြု၊
C] အပြစ်မဲ့သူတစ်ယောက်ကို ဘုရားသခင်က ကူညီနိုင်ပြီး အဲဒါကို မလုပ်ဘူးဆိုရင်၊ အိမ်နီးချင်းရဲ့ သွေးပေါ်မှာ မရပ်တည်တဲ့အတွက် သူ့ကို အပြစ်တင်နေတာတော့ အမှန်ပါပဲ၊
မင်းပြောနေတာက ကိစ္စရဲ့အနှစ်သာရလား၊ ငါပြောနေတာက မမှန်ဘူးလား၊ ဒါမှမဟုတ် အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ ယုံကြည်မှုကို မထိခိုက်စေဖို့အတွက် "သန့်ရှင်းသောမုသား" လို့ မင်းပြောနေတာလားဆိုတာ မင်းဆုံးဖြတ်ရမယ်။
ကျွန်တော်သည် ဘုရားသခင်ကို မည်သည့်အရာကိုမျှ အပြစ်မတင်ခဲ့ပါ။ ဥပဒေများဖြင့် မအုပ်ချုပ်နိုင်သော လောကကို ဖန်ဆင်းနိုင်ခဲ့သော်လည်း ဥပဒေများနှင့်အညီ ပြုလုပ်ရန် (သူနှင့်အတူ မြည်းစမ်းကြည့်ရန်) ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ Holocaust မှာ ဒါမှမဟုတ် တခြားဘေးဒုက္ခတွေမှာ မကူညီနိုင်ဘူးလို့ သင်ထင်ပါသလား။ ဒါဆို သူဘာလို့မကူညီတာလဲ။ မင်းထက် ငါက သူ့ကို ဘာလို့ ပိုအပြစ်တင်နေတာလဲ။ လောကကြီးမှာ လူတွေ ဒုက္ခရောက်နေတာကို ငါ အသစ်တဖန် ပြုပြင်ခဲ့တာလား။
ဒါပေမယ့် ဒါတွေအားလုံးကို ငါ့စာအုပ်ထဲမှာ ကောင်းကောင်းရှင်းပြလိမ့်မယ်။
ပထမဆုံးအနေနဲ့ ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲမှု လုံးဝမရှိဘူးလို့ မင်းတို့လို တောင်းဆိုချက်တွေကို ငါမတွေ့ဖူးဘူး၊
ဒါ မြင့်မြတ်တဲ့ လိမ်ညာမှုလို့ မထင်ပါဘူး၊ ဒါတကယ်လို့ရှိရင် အဲ့ဒါကို ဘာလို့ မထားခဲ့တာလဲ။
ဥပဒေများနှင့် ပတ်သက်၍ မပြောင်းလဲသေးသော ဖန်တီးမှုဥပဒေများ ပြင်ဆင်မှုမှာ ကြီးကြပ်မှု တစ်ခါမှ မရှိခဲ့၊ သို့မဟုတ် ရက်စွဲပါ ဥပဒေများ။
မီးလောင်တိုက်သွင်းခြင်း စသည်တို့နှင့် ပတ်သက်လျှင် အရာအားလုံးသည် အကောင့်တစ်ခု ဖြစ်သည်ဆိုလျှင် ကျွန်ုပ်သည် အကောင့်တစ်ခုကို မသိသော်လည်း၊ ကျွန်ုပ်၏ လွယ်ကူသော ယုံကြည်ခြင်း နှင့် ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုး နှင့် ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်မည်မဟုတ်ပေ။
ကြီးကြပ်မှု အကောင့်မရှိလျှင် Kushia ကို Dukhta သို့ပြန်ပို့ပါ။
Haftarah အရသာရှိတယ်၊ ဟုတ်ပြီ၊၊
2. ဘာကြောင့် မထားခဲ့တာလဲ ရှင်းပြတယ်။
(၃) သဘာဝနိယာမတရားများကို မသိသောအခါ၌ ဘုရားသခင်သည် ၎င်းတို့ထံမှ ပို၍သွေဖည်သွားစေရန် ကိုယ်တော်ကို ခွင့်ပြုပေးခဲ့ပြီး ယခုခေတ်တွင် ၎င်းတို့သည် ပို၍ရင်းနှီးလာလေလေ ဖြစ်ပေလိမ့်မည်။
4. မေးစရာမရှိသလို သူမဘယ်ကိုမှ ဆွဲမချဘူး။ ဖြစ်ပျက်သမျှဟာ တရားမျှတတယ်လို့ မင်းထင်ရင် (နားမလည်တာကလွဲလို့) ငါ့အတွက် မင်းဘာအခက်အခဲရှိနေတာလဲ။ အမှန်တော့၊ ငါ့အမြင်အရတော့ အရာအားလုံးဟာ ပိုင်ရှင်မဲ့ဖြစ်နေရင်တောင်မှ ဖြစ်ပျက်နေတာဟာ အတိအကျဖြစ်သင့်တယ်၊ ဒီတော့ ငါ့အမြင်အရ ဘုရားသခင်နဲ့ ပြဿနာက ဘာလဲ။ အမှန်တော့၊ မည်သူကမျှ မိမိရထိုက်သည်ထက် မခံစားနိုင်ပါ။
29 Elul 09 - 2016/15/07 at XNUMX:XNUMX
မင်္ဂလာပါ အရှင်ဘုရား မိုက်ကယ်
ထို့ကြောင့် ဤကိစ္စသည် ကောင်းပေသည်၊ ပြဿနာသည် ပရောဖက်များနှင့် ကျမ်းစာများမှ Torah မှဖြစ်ပြီး၊ Talmud တွင် ရှည်လျားသောပြဿနာများသာရှိသည်ဟူသော အကြောင်းပြချက်က Chazal တွင် လေ့ကျင့်ရေးပြဿနာ၊
ဘာကြောင့် ထားခဲ့တာလဲ ဆိုတာကို ကောင်းကောင်း ရှင်းပြခဲ့တယ်၊
မေးခွန်းမှာ၊ "ခြားနားသော အဓိပ္ပါယ်ရှိပါသလား" သို့မဟုတ် ခြားနားသော ယုတ္တိဗေဒဟူသည် အဘယ်အရာကို ဆိုလိုသနည်း။
ပထမက အဓိပ္ပါယ်မဲ့၊ ဒုတိယက ဆုနဲ့ ပြစ်ဒဏ်နဲ့ မသက်ဆိုင်ရင် [ဆုနဲ့ ပြစ်ဒဏ် ရှိသလား။] အကောင့်မရှိရင် [ကြီးကြပ်မှု] မဟုတ်ဘူး၊ တကယ်ကျန်သေးတယ်.. မအောင်မြင်ဘဲ ယူဆချက်တစ်ခုကို စိတ်ကူးကြည့်ဖို့၊
မကာရဿ။ ငါတို့ ပင်ပန်းနေပြီ ထင်ပါတယ်။
29 Elul 09 - 2016/15/08 at XNUMX:XNUMX
ဒီမှာ အတိအကျတော့ ပင်ပန်းတယ်လို့ မခံစားရဘူး၊
ပြီးတော့ ၂၇ ရက်နေ့မှာ ကျွန်တော်ရေးခဲ့တဲ့ ဒီစာပိုဒ်ရဲ့ အဖြေအတွက် ဝမ်းသာပါတယ်။
မေးချင်တာက "ဒါက တခြားအဓိပ္ပါယ်ရှိလား" လို့ အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။
ဤအရာများကို အဘယ်ကြောင့် ရည်ညွှန်းနေသနည်းဟု ကျွန်ုပ် နားမလည်ပါ။ ဘုရားသခင်က ကမ္ဘာကြီးကို ဥပဒေနဲ့အညီ အုပ်ချုပ်ဖို့ ဘာကြောင့် ဖန်ဆင်းခဲ့တာလဲဆိုတာကို ပြောပြမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ အရသာတစ်မျိုးကို အကြံပြုနိုင်တယ်၊ ဥပမာ၊ သူက ငါတို့ကို ကမ္ဘာမှာ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ဦးတည်နိုင်စေချင်တယ်။ ဥပဒေအရ မဆောင်ရွက်ရင် ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးမှာ ဖြစ်လာမယ်ဆိုတာကို ခန့်မှန်းလို့ မရသလို အသက်ရှင်နေနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
မင်းရေးတဲ့စာတွေ ငါတကယ်နားမလည်ဘူး။ ဒါပေမယ့် ကျေးဇူးပြုပြီး အသစ်အဆန်းတွေမရှိရင် ငါတို့ဒီမှာပဲအဆုံးသတ်လိုက်မယ်။ အီးမေးလ်တိုင်းကို အမြဲဖြေရတာ ထုံးစံပဲ၊ ဒါပေမယ့် ဒီဆိုက်က ငါ့ဆီကနေ အချိန်အများကြီးလိုတယ်၊ တော်တော်များများက ရေးပြီးပြောခဲ့တာတွေကို ထပ်ခါထပ်ခါ ဖြစ်နေပါတယ်။
29 Elul 09 - 2016/15/09 at XNUMX:XNUMX
ဒီမှာ အီးမေးလ်တွေကြားထဲမှာ ရှုပ်ယှက်ခတ်နေပုံပေါ်ပါတယ်၊ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့ တခါတည်း ပြန်မရေးမိတဲ့အခါ ဟာဖ်တာရာဟာ ဘာကြောင့် မောပန်းနေလဲဆိုတာ နားမလည်ခဲ့ပါဘူး။
မင်းရေးထားတာကို ငါထပ်တင်ပြီး အဖြေကို ဒီမှာ၊
အရှင်ဘုရား မာကလ ရေးသည် ၊၊၊
1. ထို့ကြောင့်? [၎င်းသည် တစ်ဦးချင်း အသိပညာနှင့် သက်ဆိုင်သည်]
2. သူ့ကို ဘာကြောင့် မထားခဲ့တာလဲလို့ ရှင်းပြခဲ့တယ်။
၃။ မသိသေးသော သဘာဝနိယာမများသည် ၎င်းတို့ထံမှ ပိုမိုသွေဖည်သွားစေရန် မိမိကိုယ်ကို ခွင့်ပြုထားသဖြင့် ယခုခေတ်တွင် ပို၍ရင်းနှီးလာကာ ယင်းကို မလုပ်ဖြစ်နိုင်ပေ။
1] ထို့ကြောင့် ဤကိစ္စသည် ကောင်းပေသည်၊ ပြဿနာသည် ဆန့်ကျင်ဘက်သို့ရေးထားသော သမ္မာကျမ်းစာမှဖြစ်ပြီး တာလမုဒ်တွင် လေ့ကျင့်ရေးပြဿနာ၊ ပညာရှိများက မေးခွန်းထုတ်မှာ မဟုတ်ဘူး၊
2] ကျွန်တော်ရှင်းပြပြီး အကျဉ်းချုပ်ပြောပြပါမယ်၊ သီးသန့်ကြီးကြပ်မှုနဲ့ ဆုတောင်းခြင်းဟာ အမှန်တရားကိုပြောခြင်း သို့မဟုတ် သင်ပြောခဲ့တဲ့ ဒါဇင်နဲ့ချီတဲ့ ပျက်ကွက်ခြင်းဆိုင်ရာ မေးခွန်းတွေနဲ့ ဖြေရှင်းချက်တွေရဲ့ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းလို့ မထင်မိပါဘူး။ အမှန်အတိုင်းပြောပါ
4] Gd သည် စောင့်ကြည့်ရန် ၎င်း၏ ဆုံးဖြတ်ချက်တွင် အချက်တစ်ချက်ရှိပြီး ၎င်းသည် သူ့အတွက် သက်ဆိုင်သည့် တာဝန်နှင့် ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်မည်မဟုတ်ကြောင်း သင်ရေးသားခဲ့သည်၊
အရသာက ငါတို့မသိဘူး၊ ယုတ္တိမရှိရင် အဓိပ္ပါယ်မဲ့သလို၊
အရသာက သိပ်မရင်းနှီးပေမယ့် ဖြစ်နိုင်ချေရှိပေမယ့် ဆုငွေနဲ့ ပြစ်ဒဏ်နဲ့ မသက်ဆိုင်ဘူးဆိုရင် [ရေတွက်ပြီး ကြီးကြပ်မှု မရှိရင် ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်] တစ်ဖက်က မမြင်ပါဘူး၊
1. ငါ့လိုပဲ ဘယ်သူမှ မပြောဘူး ငါ့အတွက် အရေးမကြီးဘူးလို့ ငါပြောခဲ့တယ်။ ဘာကြောင့် ရှင်းပြရမှာလဲ
2. ပြီးတော့ ငါဘာလို့ ချန်ထားခဲ့တာလဲလို့ ရှင်းပြတယ်။ ဆုတောင်းခြင်းနဲ့ ကြီးကြပ်မှုဟာ အတိအကျ ပြဿနာရှိတဲ့ လူတော်တော်များများကို တွေ့ခဲ့တယ် လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။ ဒီမှာ ဘာတွေ သက်တမ်းတိုးပြီးပြီလဲ။
3. ရှေးယခင်က သိပ္ပံပညာကို မသိ၍ လူတို့သည် သဘာဝနိယာမများကို မသိကြ။ ထို့ကြောင့် ၎င်းတို့နှင့် သွေဖည်ရန် အလားအလာ ပိုများသည်။ ဒီနေ့တော့ သူတို့ကို သိတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ပညတ်တော်များကြောင့် မိုးရွာသည်ဟု သူတို့ထင်ခဲ့ကြဖူးသည်။ ယနေ့တွင် မိုးမည်မျှရွာသည်နှင့် မည်သည့်အချိန်တွင် မိုးရွာမည်ကို ကြိုတင်သိရှိထားပြီး ၎င်းသည် မိုးလေဝသနှင့် ဇလဗေဒဆိုင်ရာ ဥပဒေများပေါ်တွင်မူတည်ကြောင်း၊
4. ဘုရားသခင်ကို မကြည့်ဖို့ အကြောင်းပြချက်ရှိတယ်ဆိုတာ ဘယ်မှာရေးထားလဲ ငါနားမလည်ဘူး။ မကြည့်ဘူးလို့ ရေးထားတယ်။ အရသာ? ငါတို့က ကလေးကြီးတွေ ဖြစ်နေပြီဆိုတော့ လက်တစ်ကမ်းကို မပေးသင့်ဘူး။ သို့သော် သီအိုရီများ မည်သို့ပင်ရှိစေကာမူ အစစ်အမှန်မေးခွန်းမှာ သူ အမှန်တကယ် ကြီးကြပ်နိုင်ဖွယ်ရှိပါသလား။ ငါ့အမြင် - မဟုတ်ဘူး။
ငါတို့ ပင်ပန်းသွားပြီလို့ ထပ်ရေးလိုက်တယ်။
Rabbi Makal ကရေးသားခဲ့သည်။
ဒါပေမယ့် သူ (သူနဲ့ မြည်းစမ်းကြည့်မယ်) စည်းမျဥ်းအတိုင်းလုပ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။
ငါတို့က ကလေးကြီးတွေ ဖြစ်နေပြီဆိုတော့ လက်တစ်ကမ်းကို မပေးသင့်ဘူး။
အဲဒီ့အဖြေက သွေးဖော်တွေဖက်က မတ်တပ်ရပ်မနေဘဲ ??အကြီးကြီးလေးတွေ ????
ဒီဟာက လမ်းကြောင်းမှန်နေတယ်ဆိုရင် ငါတို့က မောပန်းနေပေမယ့် ငါဒီမှာ အကြိမ်ကြိမ် အစွပ်စွဲခံရလို့ အခြေအမြစ်မရှိတဲ့ ဥပဒေထုတ်လွှတ်မှုတွေအတွက် မင်းသံသယဖြစ်စရာ မလိုပါဘူး၊
မကာရဿ။ အနှစ်သာရနဲ့ ဆွေးနွေးပြီးတဲ့ အရာတွေကို ပြန်လုပ်ပါ။
"မင်း မခံမရပ်နိုင်" ဟူသော အရုဏ်ဦး၏ ကင်းမဲ့ခြင်းကို မင်းကို ငါရှင်းပြခဲ့ပြီးပြီ၊
ငါတကယ်မကြိုက်ပေမယ့် ငါ့အတွက် ငါတို့ပြီးပြီ။
မင်္ဂလာပါ အရှင်ဘုရား မိုက်ကယ်၊
ဘုရင်မင်းမြတ်သည် စာကြောင်းများကြားတွင် မည်သို့ဖတ်ရမည်ကို သိသည်။
ငါ့မှာ လစာနဲ့ ကြွေးရှိတယ်၊ အကောင့်ဘယ်လိုလည်ပတ်နေလဲ ငါမကျွမ်းကျင်ဘူး၊
ဒါပေမယ့် မင်းက သေတော့မှာမို့ သွေးထွက်နေတဲ့အချိန်မှာ ဝင်မစွက်ဖက်ပါနဲ့ ??
ပြီးဆုံးသွားခဲ့ရင် တစ်သက်လုံး ၊၊
အနှစ်နှစ်ထောင်ကြာ ပြည်နှင်ဒဏ်ခံရပြီး သုံးနှစ်အကြာတွင် အစုလိုက်အပြုံလိုက် သတ်ဖြတ်ခံရပြီးနောက် သဘာဝတရား၏ ခြွင်းချက်အဖြစ် ရဗ္ဗိသည် မိမိပြည်သို့ ပြန်လာခြင်းကို မမြင်ဘူးလား။ ဤအရာသည် ဘုရားသခင်၏ ပံ့ပိုးပေးမှုကြောင့်ဟု ယူဆသင့်သည် မဟုတ်လော။
ဣသရေလလူတို့သည် ၎င်းတို့၏ပြည်သို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိလာခြင်းသည် အမှန်ပင် သမိုင်းအဆင့်တွင် ထူးထူးခြားခြားဖြစ်ရပ်တစ်ခုဖြစ်သော်လည်း သမိုင်းသည် ရှုပ်ထွေးလှပြီး ဤနေရာတွင် ဘုရား၏ဝင်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်းရှိမရှိကို သိရန်နည်းလမ်းမရှိပါ။ ယေဘူယျအားဖြင့် ဤလုပ်ငန်းစဉ်သည် ၎င်း၏ပါဝင်ပတ်သက်မှုမလိုအပ်ဘဲ ကောင်းစွာနားလည်သဘောပေါက်နိုင်သည်ဟု ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ လောကလူတွေက ဒီဖြစ်စဉ်ကို မြင်ပြီး သူတို့ရဲ့ ဘုရားမဲ့-သိပ္ပံနည်းကျ ယုံကြည်ချက်တွေကို မချိုးဖျက်ကြဘူး။
ထို့ကြောင့်၊ "သမိုင်းဝင် အံ့ဖွယ်အမှုများ" မှ ကောက်ချက်ဆွဲခြင်းသည် အလွန်အန္တရာယ်များပြီး မယုံနိုင်စရာကောင်းသော အရာဖြစ်သည်။ ဒါက ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အံ့ဖွယ်တွေနဲ့ ကွဲပြားနိုင်ပါတယ်။
ပရောဖက်များသည် လူများ ၎င်းတို့၏ပြည်သို့ပြန်လာရန် ကြိုတင်ကြိုပြောထားသည့်အချက်နှင့် ပတ်သက်၍ လေးလေးနက်နက်ရှိနိုင်သော်လည်း ဤသဘောအရ ဤလုပ်ငန်းစဉ်သည် မြင့်မြတ်သောပါဝင်ပတ်သက်မှုကို ညွှန်ပြသည့်အချက်အဖြစ် မြင်ရန်နေရာလွတ်ရှိပေမည်။ ငါမသိဘူး။ ဒီလိုမဖြစ်ခဲ့ရင်တောင် ဘယ်သူမှ သူ့ကျမ်းစာကို အလွတ်ကျက်ထားမှာမဟုတ်ဘူး (အများစုကတော့ သက်ဆိုင်ရာ ကျမ်းပိုဒ်တွေကို တောင်းဆိုပြီး ရိုးရိုးရှင်းရှင်းကနေ နှုတ်ယူကြလိမ့်မယ်)၊ ဒါကြောင့် အလွန်မြင့်မားတဲ့ ကိန်းဂဏန်းအလေးချိန်ကို သတ်မှတ်ဖို့ ခက်ခဲပါတယ်။ ဤပရောဖက်ပြုချက်များဆီသို့။ ငြင်းခုံခြင်း၏စမ်းသပ်မှုကို မခံမရပ်နိုင်သော thesis သည် အမှန်ဖြစ်လာသောအခါတွင်လည်း အလွန်အထင်ကြီးစရာမဟုတ်ပါ (နောက်တော့၊ အမှန်တကယ်ဖြစ်မလာခဲ့သည့် ပရောဖက်ပြုချက်များလည်း ရှိခဲ့ပြီး မည်သူမျှ မကြောက်ခဲ့ကြပါ)။ ထို့အပြင်၊ ဤပရောဖက်ပြုချက်များသည် လုပ်ငန်းစဉ်တွင် ကိုယ်တိုင်ပါဝင်ခဲ့သည် (ကျွန်ုပ်တို့ ဤနေရာမှ ပြန်လာသည့်အတွက် ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်)။ ၎င်းသည် စာသားအရ မိမိကိုယ်ကို ပြည့်စုံစေသော ပရောဖက်ပြုချက်ဖြစ်သည်။
29 Elul 09 - 2016/15/11 at XNUMX:XNUMX
Kikro ကို ဟီးဘရူးဘာသာဖြင့် ရေးသားသင့်သည်ဟု ကျွန်ုပ်ထင်ပါသည်။ ထို့အပြင်၊ သူ၏အမည်မှကိုးကားမှုသည် Publius Trentius Ash နှင့်ဆက်စပ်နေသည်။
အိုး၊ အဲဒါကို ချက်ချင်း ထုတ်ဝေမယ်လို့ မထင်ထားပေမယ့် ဆိုက်တည်းဖြတ်သူဆီ ပို့ပေးလိမ့်မယ်။ ဤမှတ်ချက်နှင့် ၎င်းမတိုင်မီတစ်ခုကို သင်ဖျက်နိုင်သည်။
အမှန်တော့ အဲဒါက ကျွန်တော့်ဆီရောက်လာပေမယ့် ကျွန်တော့်ကွန်ပြူတာက တုံ့ပြန်ခဲပါတယ်။ ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်သည် ထုတ်ဝေမှုကို အတည်ပြုခဲ့ပြီး ယခုမှသာ ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ပိုင်တုံ့ပြန်ချက်ကို ပေးပို့နိုင်ခဲ့ပါသည်။ သူမမှာ:
ဘာကြောင့်ဖျက်တာလဲ။ စာဖတ်သူအားလုံး လေ့လာသင့်သော မှတ်ချက်နှစ်ခု။ ပထမအကြောင်းတော့ မသိဘူး။ လက်တင်ဘာသာဖြင့် နာမည်သည် Cicero ဖြစ်ပြီး နာမည်တစ်ခု၏ အသံထွက်ကို အဘယ်ကြောင့် ပြောင်းရမည်ဟု ကျွန်တော် မတွေ့ပါ။ အမေရိကန်မှာ တစ်ယောက်ယောက်က David လို့ခေါ်ရင် သူ့ကို ဟီးဘရူး David လို့ ခေါ်ရမလား။ ငါတော့မထင်ဘူး။
လက်တင် C ကို ဟေဗြဲမျောက် (မူရင်းတွင် ဆီဇာအစား ဆီဇာအစား ဆီဇာကဲ့သို့) အဘယ်ကြောင့် ဘာသာပြန်ရသည်ကို လုံးလုံးနားမလည်ခဲ့ပါ။
ဒုတိယပိုင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့လည်း ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ နှစ်အတော်ကြာအောင် ကောက်ကျစ်တယ်လို့ ထင်ခဲ့တယ်။ ယခု သင်သည် ချန်ပီယံတစ်ဦးဖြစ်ပြီး အသိပညာရှိသော ရဗ္ဗိတစ်ဦးဖြစ်သည်။
မင်းရဲ့ဒုတိယတုံ့ပြန်မှုကိုလည်း ငါပို့ခဲ့တယ်၊ ဒါပေမယ့် ယုတ္တိရှိဖို့ပဲလိုတယ်။ ပထမတစ်ခုက ဆိုက်ကို တည့်တည့်ရောက်လာတာကို မြင်လိုက်ရရင် (ထင်တယ်)၊ ဒုတိယတစ်ခုက အတူတူပဲဆိုတာ နားလည်ထားသင့်တယ်။ ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း၊ ၎င်းတို့နှစ်ဦးစလုံးကို အပ်လုဒ်တင်ရန်အတွက် ကျွန်ုပ်အတည်ပြုခဲ့သည် (အရာအားလုံး ကျွန်ုပ်ထံသို့ ရောက်ရှိလာစေရန် ဆော့ဖ်ဝဲကို တည်ဆောက်ထားပုံဖြစ်သည်)။ မထိုက်တန်သောအရာများမှလွဲ၍ အရာအားလုံးကို ငါလက်ခံသည် (ထိုအတောအတွင်း BH မရှိခဲ့)။
ကျွန်ုပ်တို့နှစ်ဦးစလုံး၏ဘိုးဘေးများ (P. Property Torah, c):
အဟိသောဖေလမှ မသင်ယူဘဲ နှစ်ပါးသာ သင်ယူခဲ့သော ဣသရေလရှင်ဘုရင် ဒါဝိဒ်ကို မိန့်မှာထားသောကြောင့် အခန်းကြီးတစ်ခန်း၊ ဟာလခ၊ တစ်ပိုဒ်၊ ပျားတစ်ပိုဒ်တည်းပင် ပျားတစ်ပိုင်းစာပင် လေးလေးစားစား ဆက်ဆံသင့်သည်။ အဟိသောဖေလထံမှ မသင်ယူခဲ့သော ဒါဝိဒ်မေလက်ဣသရေလသည် တတ်သိနားလည်ပြီး လွယ်ကူသောအရာမဟုတ်သည့်အရာ နှစ်ခုတည်းသာရှိသော ရဗ္ဗိအလူဖူနှင့် သူ၏စာရေးဆရာထံမှ သင်ယူခဲ့သော အခန်းတစ်ခန်း သို့မဟုတ် ဟာလခတစ်ပိုဒ် သို့မဟုတ် ပျားတစ်ပိုဒ်တည်းပင်၊ စာ​တစ်​စောင်​ပေါ်​မှာ ဘယ်လောက်​ လေးစား​မှု​ရှိ​ရ​မယ်​ဆို​ရင် တို​ရာ​ပြော​တဲ့ + သု​တ္တံ XNUMX:XNUMX + ပညာ​ရှိ​တွေ​ကို ချီး​မွမ်း​ရ​လိမ့်​မယ် + ရှေမ/သုတ္တံ/ XNUMX Y + အပြစ်​မဲ့​သူ​တွေ​က ကောင်း​တာ​ကို အမွေ​ရ​လိမ့်​မယ် တို​ရာ​က​လွဲ​လို့ ကောင်း​တာ မရှိ​ဘူး။ + ရှေမ/သုတ္တံ/၄ခ၊
BM Lag AA တွင်လည်း၊
အရှင်ဘုရား မိန့်တော် မူပါ အရှင်ဘုရား - ဉာဏ်ပညာကို သင်ယူသော အရှင်ဘုရား၊ ကျမ်းစာကို သင်ယူသော အရှင်ဘုရားမဟုတ်၊ အရှင်ဘုရား၊ အရှင်ဘုရား ယုဒ မိန့်တော်မူသည်ကား၊ အရှင်ဘုရား Yossi က ဤသို့ဆိုသည်– “ဤသူသည် ရဗ္ဗိတစ်ပါးတည်းမှတစ်ပါး မိမိမျက်စိကိုပင် လင်းစေတော်မမူ။ Raba က ကုန်စည်ရဗ္ဗိ၊ Dasburn Zohma Listron လိုမျိုးပေါ့။
ကျောင်းသားတစ်ဦးသည် သူ၏သခင်၊ သူ၏ချန်ပီယံနှင့် သူ၏အသိအကျွမ်းတို့၏စကားကို ဖျက်ပစ်ရန် သင့်လျော်ပါသလား။
ပုံကြီးချဲ့ပြီး ချီးကျူးစကားတွေအတွက် ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် :) ရဗ္ဗိကောင်တာ ဒါဇင်ပေါင်းများစွာကို ကျေးဇူးတင်ဖို့ ဒီကနေ သင်ခန်းစာယူရလိမ့်မယ်။ နယ်ပယ်များစွာတွင် ကျွန်ုပ်အတွက် တံခါးဖွင့်ပေးခဲ့သော သင်၏ ဟောပြောပွဲများနှင့် ထုတ်ဝေမှုများအတွက် ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါသည်၊ အခြားနယ်ပယ်များစွာတွင် ကျွန်ုပ်၏အသိပညာကို ကြွယ်ဝစေပါသည်။ ၎င်းအား "ချောကလက်မှ သက်သေ" ဟု ခေါ်ပါမည်။ 🙂)၊ ကျွန်ုပ်၏အမြင်ကို ကျယ်ပြန့်စေပြီး၊ တခါတရံ ငါ့ဝိညာဉ်အတွက် အားလပ်ရက်ကို တီထွင်ခဲ့သည်။
အတိအကျပြောရသော် ဤအချက်ကြောင့် ကျွန်ုပ်သည် ရဗ္ဗိတစ်ဦးအား Halacha ကို "သွန်သင်ခြင်း" မပြုလိုပါ။ ရဗ္ဗိက သင့်လျော်ကြောင်း တွေ့ရှိပါက ဆောင်းပါး၏ အစိတ်အပိုင်းကို ပြုပြင်ရန် လုံလောက်မည်ဟု ထင်သောကြောင့် ဖျက်ပစ်ရန် အကြံပြုခဲ့ပြီး တုံ့ပြန်မှု၏ ပုံပန်းသဏ္ဍာန်သည် အရေးမကြီးပါ။ ထို့အပြင် ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း အမှားတစ်ခုအတွက် လှိုင်းတွန့်စုတ်တံဖြင့် ညွှန်ပြရာတွင် အဆင်မပြေဖြစ်နေသည်မှာ အမှန်ပင်ဖြစ်ပါသည်။
အမှန်တော့၊ ကျွန်ုပ်၏ အသိဆုံးအနေနှင့်၊ လက်တင်အသံထွက်သည် အမှန်တကယ်တွင် cicero (ခေတ်ပြိုင်အင်္ဂလိပ်လို၊ တွေးခေါ်သူများ လွဲချော်သွားသည်)။ ဒါဝိဒ်၏မေးခွန်းသည် မူလအစဟု သိကြသော်လည်း မတူညီသော ယဉ်ကျေးမှုများဖြင့် ကွဲပြားစွာ အသုံးပြုခဲ့ကြသည့် အမည်တစ်ခုနှင့် ပတ်သက်လာလျှင် ပြဿနာတစ်ခု ပေါ်ပေါက်လာကာ ယင်းအမည်ကို syllable sequence အဖြစ် သို့မဟုတ် အခေါ်အဝေါ်အဖြစ် အသုံးပြုရာတွင်လည်း ပြဿနာတစ်ခု ပေါ်ပေါက်လာပါသည်။ Object သည်လည်း ၎င်း၏ အဓိပ္ပါယ်ကို ဆောင်သည်။ ဒါပေမယ့် Chitsro ဆိုတဲ့ နာမည်ပြောင်ကို အစ္စရေးမှာ တကယ်ပဲ အသိအမှတ်မပြုရင် လွှမ်းမိုးမှုမရှိသလို cicero ကို လူတွေကို နားမလည်နိုင်အောင် ဒါမှမဟုတ် နာမည်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကို ပျက်ပြားစေမယ့် ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ စွဲချက်မျိုး မဆောင်ထားဘူးလို့ ထင်ပါတယ်။ . ယနေ့လက်ခံထားသော အက္ခရာအသုံးအနှုန်းစည်းမျဉ်းများကြောင့် Tsizro ဖောင်အသုံးပြုမှုကို လျှော့ချလိုက်သည်ဟုလည်း ထင်ရသည်။
ယုတ္တိဗေဒဆိုင်ရာ ရွှင်မြူးခြင်းအတွက်၊ ဆိုခဲ့သည့်အတိုင်း ယုတ္တိဗေဒနယ်ပယ်တွင် ကျွန်ုပ်၏ အသိပညာ၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအတွက် ကျေးဇူးတင်ရမည်ဖြစ်ပြီး၊ ထိုသို့သော အသေးအမွှားမျိုးတွင် ကျွန်ုပ် မအောင်မြင်စေရန် လုံလောက်စွာ သင်ယူနိုင်မည်ဟု မျှော်လင့်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်၏ဒုတိယတုံ့ပြန်ချက်ကို အလိုအလျောက်ထုတ်ဝေမည်ဟု ကျွန်ုပ်ယူဆခဲ့သော်လည်း၊ ပထမအကြိမ် ဖျက်ပစ်လိုသောဆန္ဒကို ဖော်ပြရန် အခြားနည်းလမ်းကို မသိခဲ့ဘဲ၊ ၎င်း၏တုံ့ပြန်မှုမှလွဲ၍ မည်သည့်ယန္တရားဖြစ်သည်ကို ကျွန်ုပ်မယုံကြည်ကြောင်း၊ ချက်ချင်းထုတ်ပြန်ခြင်း။ နောက်ဆုံးတွင် ၎င်းကိုယုံကြည်သူတစ်ဦးက ၎င်းတို့ကိုမြင်ရပြီး မကြာသေးမီကဖော်ပြခဲ့သော ဖယ်ရှားရေးတောင်းဆိုမှုကို မြင်တွေ့နိုင်မည်ဟု ကျွန်တော်ယူဆပါသည်။
ပြီးတော့ ထပ်ပြီး ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။
အသံထွက်သည် မူလက Tszero (နှင့် Caesar) ဖြစ်သည်ဟု ကျွန်ုပ်၏ကွယ်လွန်သူဖခင် (လက်တင်ဘာသာလေ့လာသူ) ထံမှ ထုံးစံအတိုင်းဖြစ်သည်။ ဤနေရာတွင်လည်း ချန်ပီယံနှင့် တတ်ကျွမ်းသော ရဗ္ဗိတစ်ဦးဖြစ်သည်။ 🙂
Shivat ၏ 21th 02 - 2017 14:43 မိနစ်
ဥပဒေအစုတစ်ခုမှ ပိုမိုကျယ်ပြန့်သော တန်ဖိုးဖော်ပြချက်ကို နုတ်ယူနိုင်သော်လည်း ၎င်းနှင့် ကန့်သတ်ချုပ်ချယ်ခြင်း မရှိကြောင်း သင်တောင်းဆိုသည်။
ကျွန်ုပ်သည်လည်း ဤအမြင်ကို (အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ ဆုပ်ကိုင်ထားဆဲ) ဖြစ်သောကြောင့် ဂျူးဘာသာမှ ပေါ်ပေါက်လာသော လူမျိုးစု ခွဲခြားမှု သို့မဟုတ် လူမျိုးကြီးဝါဒ၏ ပဲ့တင်ထပ်ခြင်းအတွက် တာဝန်မရှိသလို (ထို့ပြင်၊ ကျွန်ုပ်သည် အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိပင်) အဓိပ္ပါယ်ရှိသော အနည်းငယ်မျှသာဝါဒကို လေ့ကျင့်ကာ ထိုနေရာတွင် ရှိသည်ဟု ဆိုကာ၊ halakhah တွင် "တန်ဖိုးဖော်ပြချက်" မဟုတ်ပါ။ မည်သည့်ထုတ်ပြန်ချက်မှ ထွက်ပေါ်လာခြင်းမရှိပါ - ပြဿနာဖြစ်သည့်အပြင် အပြုသဘောလည်းမဟုတ်၊ အနည်းငယ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသည့်အနေအထား)။
ဒါပေမယ့် မကြာသေးမီက ငါပျော့ပြောင်းလာပြီး သီအိုရီမှာ တည်ရှိနိုင်တဲ့ အချို့သော တန်ဖိုးဖော်ပြချက်တွေကို သတိပြုမိတတ်တယ် (အတိုးချေးငွေ ငြင်းဆိုမှု၊ ဘုရင်စနစ်အတွက် လိုလားမှု၊ ဘုရားကျောင်း တည်ထောင်မှု၊ ကမ္ဘာပေါ်ရှိ ဂျူးဘာသာကို လက်အောက်ငယ်သားအားလုံးအတွက် လိုလားတောင့်တမှု)၊ ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်၏ အသိမိတ်ဆွေသည် ကျွန်ုပ်၏ အာရုံကို ဆွဲဆောင်နိုင်ခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်က မင်းကို တစ်ခုခုလုပ်စေချင်တယ်လို့ အတိအကျ မိန့်မှာထားပေမယ့် မင်းဘာကြောင့် မလုပ်တာလဲ (ဆိုလိုတာက အရာနှစ်ခုက ပြောင်းလဲသွားပြီ - 1. ဒေါသကြီးတဲ့ တန်ဖိုးတစ်ခု ထွက်လာတာကို ငါ အသိအမှတ်ပြုတယ် 2. ငါ ယုံသွားပြီ။ Shittin မှထွက်ဆိုချက်များသည် စည်းနှောင်မှုရှိသည်။)
ထိုမေးခွန်းသည် ငါ့အကြောင်းသာဖြစ်လျှင် ငါ ဆွံ့အသွားသော်လည်း၊ ငါတို့၏ ရဗ္ဗိများသည် ဘုရားသခင်၏ အလိုတော်သည် တိုရဟ်နှင့် သီးခြားစီ ချုပ်ကိုင်ထားသည်ဟု သိထားပြီးဖြစ်သည်- (သူသိသော ပညာရှိများ၏ စကားကို နားထောင်ရန် တာဝန်" (နောက်ဆုံးတွင်၊ Hasbra သည် ဘုရားသခင်၏အလိုတော်ကို ရှင်းလင်းရန်အတွက် ခန့်မှန်းချက်ဖြစ်သည်။)
ဆိုလိုသည်မှာ ဘုရားရှင်၏ အလိုတော်သည် စည်းနှောင်မှုတစ်ခုဖြစ်ကြောင်း ဝန်ခံပြီးနောက်၊ အနည်းဆုံး 'သီလ' ၏ ဆုံးမပဲ့ပြင်မှု (ကျင့်ဝတ်သဘောအရ မဟုတ်ဘဲ သီလစည်းဝေးပွဲများကဲ့သို့) ဟူ၍ စောဒကတက်ခဲ့ပါသည်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ သူတို့ဟာ Halacha ကို နားလည်ပြီး ဘုရားရဲ့အလိုတော်ကို ရပ်တည်ရာမှာ ကျွမ်းကျင်သူတွေဖြစ်တာကြောင့် ခိုင်လုံတဲ့အချက်က သူတို့ဟာ ဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ဆိုတာကို နားလည်နိုင်တဲ့ ကျွမ်းကျင်သူတွေဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ် (ဒါက Rishonim ရဲ့ mitzvos ရဲ့ အရသာစာပေထဲမှာ ပါ၀င်တာထက် ပိုပါတယ်။ အယူဝါဒတစ်ခုကို မှန်းဆရန်မကြိုးစားဘဲ ထိုသို့သောတန်ဖိုးရှိသော ပြောဆိုချက်များကိုလည်း ရှာတွေ့ခဲ့သော တန်နာနှင့် အာမိုရိမ်။
ယခုကျွန်ုပ်၏မေးခွန်းအတွက် ကျွန်ုပ်၏ဝိညာဉ်သည် - Torah ကိုကြည့်ရှုခြင်းမှ သင့်မျက်စိအား ထုတ်ဖော်ပြသထားသည့်အတိုင်း ဘုရားသခင်၏အလိုတော်ကို ဖြည့်ဆည်းခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်ရန် အကြောင်းပြချက်ရှိပါသလား။
Torah မှ တန်ဖိုးဖော်ပြချက်တစ်ခုကို ကျွန်ုပ် တွက်ဆနိုင်လျှင် ၎င်းသည် ကျွန်ုပ်အား သေချာပေါက် မျှော်လင့်ပါသည်။ ဤသည်မှာ အမှန်တကယ် Halacha မဟုတ်လျှင်ပင် ဘုရားသခင်၏ အလိုတော်ဖြစ်သည်။
သို့သော် ပညာရှိတစ်ဦးထံမှ တန်ဖိုးဖော်ပြချက်သည် စည်းနှောင်မှုမဟုတ်ပါ။ ကျွန်တော့်အမြင်အရတော့ ပညာရှိတွေဟာ ကျွမ်းကျင်သူတွေမဟုတ်ပါဘူး (မင်းရေးခဲ့တဲ့အတိုင်းမဟုတ်ဘူး)။ ပညာရှိများ၏ အခွင့်အာဏာသည် ၎င်းတို့မှန်သည်ဟူသောအချက်မှ ဆင်းသက်လာခြင်းမဟုတ်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ၎င်းတို့၏ အခွင့်အာဏာကို ရရှိထားသည့်အချက်မှ ဆင်းသက်လာခြင်းဖြစ်သည် (Ks. ဤအတွက် အလွန်ကောင်းမွန်သော အကြောင်းပြချက်များ ရှိသော်လည်း ၎င်းတို့သည် ကျွမ်းကျင်သူများဖြစ်သောကြောင့် မဟုတ်ပါ။ ယခုဆိုလျှင် ကျွန်ုပ်တို့သည် halakhic ကိစ္စရပ်များတွင် ၎င်းတို့၏ အခွင့်အာဏာကို လက်ခံရရှိထားပြီးဖြစ်သော်လည်း meta-halakhic သို့မဟုတ် တန်ဖိုးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များတွင် မဟုတ်ဘဲ၊ ၎င်းတို့သည် ၎င်းကို ဟာလခဟ်တွင် ထည့်သွင်းရန် ဆုံးဖြတ်ထားမှသာလျှင် (ဥပမာ- အိမ်ထောင်ရေး အဆင့်အတန်းအပေါ် အကျပ်ကိုင်ခြင်း ကဲ့သို့သော) သည် ကျွန်ုပ်တို့အား တာဝန်ရှိပါသည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊၊ သူတို့နဲ့သဘောတူရင် ကျွန်တော်တို့ လုပ်မယ်၊ ဒါပေမယ့် မလုပ်ရင် အဲဒါလုပ်ဖို့ မလိုအပ်ပါဘူး။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေနှင့် Hasbra သည် စည်းနှောင်မှုအခြေအနေရှိသောကြောင့် ဆန့်ကျင်ဘက်အား အတိအကျလုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။
ဘုရားသခင်၏ အလိုတော်သည် တစ်စုံတစ်ခုကို တည်ထောင်ခဲ့သော Yeshivot ၏ အကြီးအကဲများထံမှမဟုတ်ဘဲ Gemara နှင့် ပထမအရာများအားလုံးမှဖြစ်ပြီး အရာများသည် ရှေးကျသည်။ ဤတွင်လည်း အမျိုးမျိုးသော အမှားများရှိနေသော်လည်း၊ ရှင်းလင်းချက်များအတွက် ဆိုဒ်ရှိ ဆောင်းပါးများကို ဤနေရာတွင် ကြည့်ပါ။ http://www.mikyab.com/single-post/2016/06/21/%D7%A2%D7%9C-%D7%A1%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%AA%D7%9F-%D7%95%D7%9E%D7%A2%D7%9E%D7%93%D7%9F-%D7%94%D7%94%D7%9C%D7%9B%D7%AA%D7%99
25 Sivan 06 - 2019 15:38 နာရီ
Sivan A.T.တွင် BSD XNUMX
အစုလိုက်အပြုံလိုက် သတ်ဖြတ်ခြင်းအထိမ်းအမှတ်နေ့ သတ်မှတ်ခြင်းဆိုင်ရာ ရဗ္ဗိများအကြား ဆွေးနွေးမှုများတွင် Rabbi Shmuel Katz ၏ ဆောင်းပါးများ၊ 'ဖျက်ဆီးခြင်းနှင့် အောက်မေ့ခြင်း' နှင့် 'ပထမ မီးလောင်တိုက်သွင်းခြင်းနေ့' နှင့် Rabbi Yeshayahu Steinberger ၏ The Wound Before Healing ဆောင်းပါးကို ကြည့်ပါ။ ဝဘ်ဆိုက် 'Shabbat Supplement - Makor Rishon' ပေါ်ရှိ သုံးခုလုံးနှင့် အထက်ဖော်ပြပါ ဆောင်းပါးများအတွက် ကျွန်ုပ်၏ တုံ့ပြန်မှုများ။
24 Kislev 12 - 2019/12/23 အချိန် XNUMX:XNUMX
ကျွန်ုပ်သည် ဤဆိုဒ်ရှိ အကြောင်းအရာကို ပထမဆုံးအကြိမ် ဖတ်ရှုနေပါသည်၊ ကျွန်ုပ်၏မေးခွန်းများ သို့မဟုတ် ၎င်းတို့အတွက် အဖြေများသည် ဆောင်းပါးများတွင် သို့မဟုတ် ဤနေရာတွင် ဖြေဆိုသူများ၏ မေးခွန်းများတွင် ပေါ်လာခြင်းရှိ၊ မရှိကို ကြိုတင်တောင်းပန်အပ်ပါသည်။
1. ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ကမ္ဘာတွင် ဖြစ်ပျက်နေသည့်အရာများကို ဝင်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်းကို ရပ်တန့်လိုက်ပြီဟု သင်ထင်ပါက၊ ယုဒဘာသာ၏ အခြေခံသဘောတရားများဖြစ်သည့် အတိုချုပ်အားဖြင့် ရှင်းပြနိုင်သည်။
ခ ဆုငွေနှင့် ပြစ်ဒဏ် - Maimonides (ကျွန်ုပ်သည် စာအုပ်ထဲတွင် သုံးသပ်ချက်မှမဟုတ်ဘဲ မှတ်ဉာဏ်မှ ရေးသည်) ဟု ကျွန်ုပ်က ယုဒလူမျိုးများ၏ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အမူအကျင့်ကြောင့် လောက၏ သဘာဝလမ်းစဉ်ကို ဆောင်ရွက်ပေးသည်ဟု ယူဆပါသည်။ မိုးရွာချိန် စသဖြင့်၊
2. တစ်နေ့လျှင် ၃ ကြိမ် ဆုတောင်းရန် မလိုအပ်ဟု သင်ထင်ပါသလား။ မင်းရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကို ပေးနိုင်တဲ့သူဆီကနေ မင်းရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကို တောင်းဆိုရတဲ့ အဓိကအကြောင်းရင်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်လောက်တဲ့ ဟာလခရစ်စွဲချက်တစ်ခုပဲ ကျန်တော့တာလား။
ကမ္ဘာပေါ်ရှိလူတိုင်းသည် Meron ၏သားတော်များအဖြစ် သူ့ရှေ့ကဖြတ်သန်းသွားသော Rosh Hashanah ကို စွန့်လွှတ်နိုင်ပါ့မလား။
4. သူ့ဂုဏ်က ရှီဝ အိပ်ပျော်သွားတယ်လို့ ထင်တဲ့သူတွေကို ခူးလို့ ခိုင်းနှိုင်းဖို့ မရည်ရွယ်ထားဘူးလား။ ဒါမှမဟုတ် သူ့ကမ္ဘာကို ထားခဲ့တာလား။
အကယ်၍ သင့်အချိန်သည် သင့်အား မှတ်ချက်ပေးရန် ခွင့်မပြုပါက သက်ဆိုင်ရာနေရာများကို ရည်ညွှန်းရန် ကျွန်ုပ်သည် ဆိုက်ကို ဆွေးနွေးပြီးပါက ကျေနပ်ပါသည်။
24 Kislev 12 - 2019/17/22 တွင် XNUMX:XNUMX
သင်သည် မေးခွန်းများစွာကို မေးပြီး ဤနေရာတွင် ဖြေရှင်းရန် ခက်ခဲသည်။ trilogy အသစ်တွင် ဤအကြောင်းအရာများနှင့် အခြားအကြောင်းအရာများဆိုင်ရာ ကျွန်ုပ်၏သွန်သင်ချက်အားလုံးကို၊ ဒုတိယစာအုပ် (No Man Is Ruler in the Spirit) တွင် ဤအကြောင်းအရာများကို သင်တွေ့ရပါမည်။ ၎င်းအပြင် သင်သည် ဤနေရာတွင် ဆိုက်ကိုရှာဖွေနိုင်ပြီး ဤမေးခွန်းတစ်ခုစီအတွက် ကိုးကားချက်များစွာကို ရှာဖွေနိုင်သည်။
Tammuz တွင် 25 - 06 နာရီ 2020:15 နာရီ
1) Maimonides ၏ စီရင်ချက်နှင့် တူညီမှု မရှိခြင်း နှင့် ပတ်သက်၍ ၎င်းသည် meta-halakhah နှင့် ဘာမှမဆိုင်သော်လည်း halakhah ၏ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်သည် အချို့သော နည်းလမ်းဖြင့် လုပ်ဆောင်သော်လည်း ၎င်း၏ စီရင်ချက်သည် မလိုအပ်ဘဲ ဆက်စပ်နေသည် (ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည်။ လုံးဝမသက်ဆိုင်ဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။)
ဥပမာ- AR Acha Bar Hanina သည် သူနှင့်တူသော ရဗ္ဗိမေရ မျိုးဆက်တွင် မည်သူမျှ မရှိဟု မိန့်တော်မူသော လောက၌ မြတ်စွာဘုရား၏ ရှေ့မှောက်၌ သိမြင်နိုင်၏၊ အဘယ့်ကြောင့် သာသနာတော် အဆုံးတိုင်အောင် မရပ်တည်နိုင်သနည်း၊ စင်ကြယ်သော ညစ်ညူးခြင်းအကြောင်း ပြောဆို၍ ဖြူစင်သောမျက်နှာကို ပြသည်ဟု ထင်မြင်ခြင်းရှိသော် ပညာရှိရဗ္ဗိ (ထိုသူတို့၏ အခွင့်ကောင်း) သည် မိမိကဲ့သို့ ဟာလက္ခကို မအုပ်စိုးကြောင်း ပညာရှိတို့ သိမြင်ကုန်၏။
အလားတူစာမျက်နှာ (Eruvin XNUMX :) အကြောင်းရင်းမှာ Shabash ကို Tapi မှထက်မြက်စေသော်လည်း Halacha Kavah ကိုပေးရခြင်းဖြစ်ပြီး၎င်းသည်၎င်းတို့၏နှိမ့်ချမှုကြောင့်ဖြစ်ပြီး၎င်းသည်နှိမ့်ချမှုအမြဲတမ်းအမှန်တရားဆီသို့ဦးတည်နေသည်ဟုတစ်စုံတစ်ဦးမှမထင်ထားပေ။ သမ္မာတရား (အကြိမ်များစွာ ပြတ်သား ပြတ်သားလာသည်)။
ကျွန်တော့်အမြင်အရ၊ ဟာလခဟ်၏ တွေးခေါ်ရှင်များ (ခုံသမာဓိလူကြီးများနှင့် မတူဘဲ) သည် ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာ လိုက်လျောညီထွေရှိသော နည်းလမ်းဖြင့် သွားသည်ကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း သိသာထင်ရှားလှပါသည်၊ ပြီးနောက်၊ များသောအားဖြင့် ၎င်းတို့ကဲ့သို့ အုပ်စိုးသူ အများအပြားကို တွေ့ရှိခဲ့ပြီး အချို့ကိစ္စများတွင်သာ အုပ်ချုပ်ခဲ့ကြပါသည်။ သူတို့လိုပေါ့။ တစ်နည်းဆိုရသော်၊ Maimonides သည် meta-halakhic ဟူသော စီရင်ချက်တွင် အဓိပ္ပာယ်ရှိသောကြောင့် မက်တာ-ဟာလာခဆစ် ညီညွတ်မှု မရှိဟူသော ပြောဆိုချက်အတွက် အဓိပ္ပါယ်မရှိပါ။
2) ရဗ္ဗိသည် အံ့ဖွယ်အမှုကို စွက်ဖက်ခြင်းမရှိဘဲ မနေနိုင်ဟု အကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့် ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ဒီအဓိပ္ပါယ်ကို ဘယ်ကရလဲ။
ထိုထင်မြင်ယူဆချက်၏ ထူးဆန်းမှုမှာ သမ္မာကျမ်းစာကို လက်ထဲတွင်ကိုင်ဆောင်ဖူးသူတိုင်းအတွက် နိမိတ်လက္ခဏာများ ရှိသော်ငြား အပြစ်ဖြေခြင်း နှင့် ပုန်ကန်ခြင်းတို့ကို ကျူးလွန်ခဲ့သည် (နိမိတ်လက္ခဏာများ ပေါ်ပေါက်ခဲ့သော ရဗ္ဗိဆရာများ၏ အဆိုအရ) နှင့် အံ့ဖွယ်ရာများဟု ဆိုပါက၊ အဲဒါတွေက မျိုးဆက်တွေ အားလုံးက အရူးတွေလို့ ပြောကြတယ် (Don Ku နဲ့ Baba နဲ့ တတ်ယောင်ကားတွေရဲ့ "အံ့ဖွယ်အမှုများ" ကြောင့် သောင်းနဲ့ချီပြီး နောင်တရပြီး အပြစ်မကင်းတဲ့ ဘာသာရေးသမားတွေထက်တောင် ပိုပါတယ်။ အပြစ်သားမဟုတ်သော Ku ၏သား Ku ၏အပြစ်ကိုကြောက်ရွံ့ခြင်း)
အံ့ဖွယ်အမှုတစ်ခုသည် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့် ကိန်းဂဏန်းဖြစ်နိုင်ခြေနည်းပါးသည်ဟု ကျွန်တော်ထင်သောကြောင့် ငြင်းဆိုသူများအတွက် (ပရောဖက်များခေတ်ကပင်) ဤအရာသည် သဘာဝနှင့် အံ့ဖွယ်မဟုတ်ဟု ဆိုရန် ဖွင့်ဆိုချက်တစ်ခုရှိသည်။ ဤအချက်အရ ကျွန်ုပ်တို့မျိုးဆက်တွင်လည်း အံ့ဖွယ်အမှုများရှိသည်။ (သိပ္ပံပညာတွေ တိုးတက်လာတာနဲ့အမျှ တစ်ချိန်က အားနည်းတယ်လို့ ယူဆတာကြောင့် ညီလာခံမှာ ယူဆခဲ့ကြတဲ့ အရာတွေကို ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ သိလာမှာပါ၊ ကတိကဝတ်ပြုထားတာကို သိလာရတဲ့အတွက် ဒီအဆိုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြဿနာကို ကျွန်တော် နားလည်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အခုချိန်ထိတော့ အများကြီးရှိပါသေးတယ်။ လူတွေက ကိုယ့်မွေးရပ်မြေကို ပြန်ကြတယ်။
၃) ရဗ္ဗိက ဤသို့ရေးသားခဲ့သည်– “ဒါပေမဲ့ သူတို့ဟာ အဓိပ္ပါယ်ရဲ့ နက်နဲရာကို ရောက်သွားတယ်လို့ ငါမထင်ဘူး။ ရဗ္ဗိ၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ဘင်ဂူရီယန်ကဲ့သို့ပင် လောကီဇီယွန်ဝါဒီတစ်ဦးဖြစ်ကြောင်း ပြောရန်ဖြစ်သည်။"
သူ့စကားတွင် ဟာသနှင့် မတ်တပ်ရပ်ကာ ဟာသများ ထည့်သွင်းပေးခဲ့သော ရဗ္ဗိကို ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ စာဖတ်ခြင်းကို သက်သာစေပါတယ်...။
(ဒါကို ယုံတာ မယုံဘူး)။
ဤနေရာ၌ မင်းရေးထားသမျှကို ငါ အကျယ်တဝင့် ဖော်ပြပြီးပြီ။
1. သူပြောနေတာတွေကို ကျွန်တော် မမှတ်မိတော့ဘူး (ဘယ်လိုမှ တူညီမှုမရှိ)။ ဒါပေမယ့် လွှတ်တော်ရဲ့ စီရင်ထုံးနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ ဟာလခဟာ အမြဲတမ်း အမှန်တရားမဟုတ်ပေမယ့် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဲ့ တန်ဖိုးရှိတယ် (ကျနော့်အမြင်အရတော့ ဒါဟာ အမှန်တရားမဟုတ်ရင်တောင် နားလည်သလောက် အုပ်ချုပ်ဖို့ တခါတည်း ကိုးကားခဲ့ဖူးပါတယ်။ BS နှင့် BH နှင့် ပတ်သက်၍ ဋီကာဆရာများက ဝေဖန်ခဲ့ကြသည်။ Gemara ၏စည်းမျဉ်းများတွင် R.I. Karo က ၎င်းတို့၏နှိမ့်ချမှုသည် ၎င်းတို့အား အမှန်တရားသို့ပို့ဆောင်ကြောင်း ရှင်းပြသည် (၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်ရာထူးကိုမသတ်မှတ်မီ B'Sh ၏စကားကို ဦးစွာထည့်သွင်းစဉ်းစားသောကြောင့်) ဤအရာကို Tuba သို့အနည်းငယ်အခန်းငယ်များတွင်ဖော်ပြခဲ့သည်။
2. ဤနေရာတွင် Tuba သည် trilogy ၏ဒုတိယစာအုပ်တွင် (ထို့အပြင်နေရာများစွာရှိ site တွင်လည်းဤနေရာတွင်) ။ သဘာဝတွင် အံ့ဖွယ်ကောင်းသည့် တိရစ္ဆာန်မျိုး မရှိပါ။ ပြောတဲ့သူတိုင်းက ရှုပ်နေကြတာ။
3. ကျွန်တော်ယုံရုံသာမက လုံးဝယုံကြည်ပါတယ်။ Ponivez မှ ရဗ္ဗိသည် တင်းကျပ်သော လောကီဇီယွန်ဝါဒီဖြစ်သည်။
နောက်ထပ် စာရင်းသွင်းသူ 3,095 ဦးနှင့် ချိတ်ဆက်ပါ။
ဟာနနေလ ဂရန် Bennett ၏ထမြောက်ခြင်းနှင့် ကျဆုံးခြင်းနှင့် ၎င်းတို့၏အဓိပ္ပါယ်များ (ကော်လံ ၄၈၆)
ဆိုက်ကားသမားက ဘယ်သူလဲ။ ဂရန် Bennett ၏ထမြောက်ခြင်းနှင့် ကျဆုံးခြင်းနှင့် ၎င်းတို့၏အဓိပ္ပါယ်များ (ကော်လံ ၄၈၆)
အတော်လေး ဆင်ခြင်တုံတရား ဂရန် Bennett ၏ထမြောက်ခြင်းနှင့် ကျဆုံးခြင်းနှင့် ၎င်းတို့၏အဓိပ္ပါယ်များ (ကော်လံ ၄၈၆)
မီကင်း ဂရန် Bennett ၏ထမြောက်ခြင်းနှင့် ကျဆုံးခြင်းနှင့် ၎င်းတို့၏အဓိပ္ပါယ်များ (ကော်လံ ၄၈၆)